(No. 38, June 26, 2020)
၁။ RCSS နှင့် TNLA စစ်ရေးတင်းမာမှုကြောင့် နမ္မတူမြို့နယ် စစ်ရှောင် ၂၀ဝ ကျော်ရှိ
၂။ ရခိုင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေ စားနပ်ရိက္ခာ ပြတ်လတ်နေ
၃။ KNU ၏ ကိုဗစ် စောင့်ကြည့်ရေးစခန်းတွင် စားနပ်ရိက္ခာ လိုအပ်ချက်ရှိနေ
၄။ ရေးမြို့နယ် တောင်ပိုင်း၌ ခြံသမားတစ်ဦး သေနတ်ပစ်ခံထိသဖြင့် မော်လမြိုင် ဆေးရုံတွင် ကုသခံရ
၅။ ရွေး/ကော်အား တင်ပြဆွေးနွေးရန် အချက်များ တိုင်းရင်းသားပါတီများ ပြင်ဆင်
၆။ ဖားကန့်ဒေသတွင် မြေပြိုမှုကြောင့် သုံးဦးသေဆုံးပြီး ခြောက်ဦးဒဏ်ရာရရှိ ပျောက်ဆုံးသူများကို ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်
၇။ မော့ကနင်ကျေးရွာတွင် နေအိမ် ၁၈ လုံးကျော် မီးလောင်သဖြင့် အိမ်ထောင်စု ၂၇ စုဘေးသင့်ခံရ
၈။ နမ့်ခမ်း ဒေသခံများပိုင် ထင်းစိုက်ခင်း (၉၇) ဧက ပြန်လွှဲပြောင်းပေးမည် ဟုဆို
၉။ ကရင်ပြည်နယ်တွင် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူ ၂ သိန်းနီးပါးတိုးလာ
၁၀။ ကရင်နီတောင်သူ ၂၂ ဦးအပေါ် ပြစ်ဒဏ်ထပ်တိုးပေးရန် တပ်မတော်က တရားရုံးတွင် လျှောက်ထား
၁၁။ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု မခံယူဘဲ အော်ဟစ်ဆူပူမှုပြုလုပ်သူအား ထောင်ဒဏ် ၆ လ အမိန့်ချ
၁၂။ တပ်မတော်က ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့၍ ကျေးရွာ (၄၀) ကျော် ဆန်ပြတ်လပ်နေ
၁၃။ ရခိုင်မှာ အင်တာနက်ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ မရှိသေးဟု တပ်မတော်ပြောကြား
၁၄။ MCL ဘိလပ်စက်ရုံမှ ကျောက်မိုင်းခွဲသည့်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်း
၁၅။ ရေဖြူမြို့နယ် သုံးလောင်းပြိုင်လူသတ်တရားခံဖမ်းဆီးရမိ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲရန် ဖုန်း အပေါင်ခံထားမှုကြောင့်ဖြစ်
၁၆။ ကိုဗစ်-၁၉ အလွန် သျှမ်းပြည် စီးပွားရေး ကဏ္ဍ တိကျသည့် စီမံကိန်း မရှိသေး ဟုဆို
၁၇။ ပူတာအိုကျောင်းများ ပုံစံသစ်နှင့် ပြန်ဖွင့်မည်
၁၈။ ရိခေါဒါရ်မြို့အနီး ငလျင်လှုပ်ခတ်မှု လူနေအိမ်နှင့် အဆောက်အဦးများပျက်စီး
၁၉။ ရေးမြို့နယ်တွင် လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ၌ မဲရုံ ၁၇ ရုံတိုးရန်လျာထား
၂၀။ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုချက်ခြင်းရပ် ကမ်ပိန်းဦးဆောင်သူ ၂ ဦးကို ငြိမ်းစုစီဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်
၂၁။ ဖားကန့်ဒေသအတွင်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများက မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်လာရောက်ကြသော်လည်း မူးယစ်ဆေး ဝါးအန္တရာယ်နှင့်လုံခြုံမှုမရှိသောကြောင့် ဒုက္ခမျိုးစုံကြုံတွေ့နေကြကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပြောကြား
၂၂။ မန်ဆူဈေး ဆိုင်းဘုတ်ပြန်တပ်ပေးရန် သျှမ်းလူထု တောင်းဆို
၂၃။ မိုးညှင်းမြို့၌ မူးယစ်ဆေးစွဲနေသည့် သားဖြစ်သူက လက်သီးဖြင့်ထိုးသဖြင့် မိခင်သေဆုံး
၂၄။ မူဆယ် နယ်စပ် စီးပွားရေးဇုန်တွင် နမ့်ဖတ်ကာ-နမ့်ခမ်း-ကြူကုတ် တို့ပါဝင်မည်
၂၅။ ရသေ့တောင်မြို့အနီးပစ်ခတ်မှုဖြစ်၍ ရွှေပါရမီဘုန်းကြီးကျောင်းမှ မသန်စွမ်းသူစစ်ဘေးရှောင်တစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရ
၂၆။ မူဆယ်(၁၀၅) မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်အတွင်း လုံခြုံရေးတာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော နမ်းခမ်းမြို့မ ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ နေထိုင်သည့် အဆောက်အဦအား သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား
၂၇။ မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်း မူးယစ်ဆေးပြား ထောင်ချီဖမ်းမိ
၂၈။ ကွတ်ခိုင်မှာ မူးယစ်ဆေးချက်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ ဖျက်ဆီး
၂၉။ သျှမ်းတောင် ကိုဗစ်-၁၉ သံသယ စောင့်ကြည့်လူနာ ၇ဦးရှိ
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ္မတူမြို့နယ်အတွင်း RCSS နှင့် TNLA တို့ကြား စစ်ရေးတင်းမာမှုကြောင့် မန်စံကျေးရွာ ဘုန်းကြီး ကျောင်းသို့ စစ်ရှောင် ၂၃၀ ကျော် ရောက်ရှိတိမ်းရှောင်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရသည်။ ယခုရက်ပိုင်း နမ္မတူမြို့နယ် မန်စံကျေးရွာ အနီး သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် (RCSS/SSA) နှင့် တအာင်း (ပလောင်) အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (TNLA) တို့ စစ်ရေးတင်းမာမှုကြောင့် အဆိုပါ စစ်ရှောင်များထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်လာရ ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသည့် စစ်ရှောင်များသည် နမ္မတူမြို့နယ် နားကျဲကျေးရွာ၊ နားကျိုင်းကျေးရွာနှင့် ပိန်းလုံရွာတို့မှ ဒေသခံ ၂၃၆ ဦးတို့ဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိမန်စံအုပ်စုရှိ မန်ဟောင်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် နားခိုနေကြကြောင်း နမ္မတူမြို့နယ် စစ်ဘေး ရှောင် ကော်မတီအဖွဲ့မှ စိုင်းဘဉာဏ် က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကိုပြောသည်။“ မနေ့ ညကရောက်လာတယ်။ အဓိကတော့ RCSS နဲ့ TNLA စစ်ရေးတင်းမာလို့၊ အဲ့ရွာနားတဝိုက်မှာ စစ်သားတွေရောက်လာလို့ တိုက်ပွဲဖြစ်မှာ စိုးရိမ်တာနဲ့ ထွက်လာကြ တာပါ”ဟု စိုင်းဘဉာဏ်က ဆိုသည်။ ထို စစ်ရှောင်လာသည့် သူများအတွက် နေရာထိုင်ခင်း၊ စားစရာများသည် လက်ရှိမှာ အခက်အခဲမရှိသေးကြောင်း၊ အလှူရှင်များက လာရောက်ပေးထားကြောင်းလည်း စိုင်းဘဉာဏ် က ပြောသည်။
နမ္မတူမြို့နယ်အတွင်း စစ်ရေးတင်းမာမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး RCSS/SSA မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စဝ်အုမ်ခေး က “ ကျနော်တို့တပ်နဲ့ TNLA တပ် စစ်ရေးတင်းမာမှုရှိတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ တိုက်ပွဲတော့မဖြစ်ပါဘူး”ဟု သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကို ပြောသည်။ ဆက်လက်ပြီး သျှမ်းသံတော်ဆင့် မှ TNLA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူး တာ့အိုက်ကျော်ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာ အဆိုပါ စစ်ရေးတင်းမာမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မသိရှိသေးကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။ နမ္မတူမြို့နယ်အတွင်း RCSS/ SSA နှင့် TNLA သည် လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၆ ခုနစ်မှ စတင်ကာ စစ်ရေးတင်းမာမှုဖြစ်ပွားပြီး တိုက်ပွဲမကြာခဏဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archive s/17232
ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာ နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ ထိခိုက်သေဆုံးတဲ့အထိ ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပ် AA နဲ့ မြန်မာလုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေကြား တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးသူတွေ တိုးလာနေပါတယ်။ စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေကြောင့် လတ်တလောခန့်မှန်းချေ ဒုက္ခသည် တသိန်းခြောက်ထောင့်လေးရာကျော် ရှိနေရာကနေ နောက်ထပ် တိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များအစည်းအရုံး REC အတွင်းရေးမှူး ကိုဇော်ဇော်ထွန်းက ပြောပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဒုက္ခသည်တွေ လုံခြုံရေး စိုးရိမ်နေကြရသလို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ဘေးကာလမှာ အရေး ပေါ် အကူအညီတွေ လိုအပ်နေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်း တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဒုက္ခသည်တွေ ပိုတိုးလာသလို တချို့ယာယီခိုလှုံရေးစခန်းတွေမှာ စားနပ်ရိက္ခာပြတ်လပ်လာ နေတယ်လို့ ရသေ့တောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စောဝေကလည်း ပြောပြပါတယ်“ လောလော ဆယ်မှာ ကျမတို့ ရသေ့တောင်ဘက်မှာ တော်တော်များများတော့ သူတို့ အမိုးအကာလုံခြုံမှုအောက် ရောက်သွားကြပြီ။ ဒါပေမဲ့ တချို့တော့ အခုလောလောဆယ် တိုက်ပွဲကိုရှောင်ပြီး ပြေးလာတဲ့သူတွေမှာ နေရာမရှိသေးတာတွေရှိတယ်။ အခုဆို ရင် အားကစားခန်းမတွေထဲ ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့ရခိုင်ပြည်နယ်သည်မိုးအရမ်းများတဲ့အတွက် နေထိုင်ရေးက အတော် လေးကို အခက်ခဲရှိပါတယ်။
အခုတလော ဒီတရက် ၂ ရက်မှာကို ကျောက်တန်းတိုက်နယ်မှာ ကျောက်ခက်တို့ ထိစွေ့တို့မှာ တပ်မတော်ကက နေရာဝင်ယူ ထားတော့တဘက်နဲ့တဘက် တိုက်ပွဲဖြစ်မှာကြောက်လို့ အဲ့ကရွာသားတွေတော်တော်များများ ရသေ့တောင်ဘက်ကို ရောက် ရှိလာနေကြတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဒုက္ခသည်တွေ လုံခြုံရေး၊ ကပ်ဘေးအန္တရာယ်သာမက မိုးတွင်းကာလ ရာသီဥတုဒဏ် နဲ့လည်း ရင်ဆိုင်နေကြရတာပါ။ ဒီအတွက်လည်း တာဝန်ရှိတဲ့ အစိုးရအနေနဲ့ထိထိရောက်ရောက် အကူအညီပေးစေချင် တယ်လို့ ရခိုင်အမျိူးသားပါတီ ANP ရဲ့ အတွင်းရေးမှူး(၁) ဦးအောင်မြတ်ကျော်က ပြောပါတယ်။
ကပ်ရောဂါကြုံရတဲ့အချိန်ကစလို့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ပုံမှန်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ အစီ အစဉ်တွေအပါအဝင် အလှူရှင်တွေဆီက ကူညီထောက်ပံ့မှု ရပ်တန့်သလောက်ဖြစ်နေတယ်လို့လည်း ဒေသခံ နိုင်ငံရေး အသိုင်းအဝန်းနဲ့ အကူအညီပေးသူတွေက ပြောပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အခုအချိန်မှာ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ ကလေးငယ် တွေအတွက် အကူအညီတွေ အရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့လည်း REC အဖွဲ့က ကိုဇော်ဇော်ထွန်းက ပြောပြပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ စာနာမှုအကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးရုံး (UNOCHA) ရဲ့ ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက် အရ ရခိုင်ပြည်နယ်က စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေနဲ့ မြို့နယ်ပေါင်း ၁၄ ခုထက် မနည်းမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစလို့ ရေကြီးမှုတွေ ကြုံနေရတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မြေပုံ၊ ကျောက်တောနဲ့ မြောက်ဦးမြို့နယ်တွေက စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာ ရေကြီးမှုတွေကြောင့် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ ကလေးငယ်တွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကို ဘေးလွတ်ရာ ပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ရ ကြောင်းနဲ့ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေက အရေးပေါ်ကူညီနိုင်အောင် ပြင်ဆင်နေကြောင်းလည်း ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပြောဆို ထားပါတယ်။ https://burmese.voanews.com/a/rakhine-refugee-food-in-need-/5475079.html
KNU-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ ဒူးပလာယာခရိုင်(တပ်မဟာ ၆)မှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် COVID-19 အရေးပေါ်တုန့်ပြန်ရေး ကော်မတီ၏ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ရှိ ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ် စောင့်ကြည့်ရေးစခန်း (Quarantine center) တွင် စားနှပ် ရိက္ခာ မလုံလောက်မှု အခက်အခဲရှိနေကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ယနေ့ ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့မှစ၍ ယခင် ကော့ကရိတ်မြို့နယ် ရွာသစ်ကျေးရွာတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် စင်တာ၌ လူဦး ရေ အနေအထားနှင့် နေရာအကျယ်အဝန်း အခက်အခဲကြောင့် ကော့ကရိတ်-မြဝတီသွားလမ်းမကြီးဘေးရှိ KNU စိုက်ပျိုး ရေး နှင့် မွေးမြူရေးဌာနသို့ ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားပြီး လက်ရှိတွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ နေရပ်ပြန် စောင့်ကြည့်လူဦးရေ (၄၈) ဦး ရှိနေကြောင်း သိရသည်။ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ ကိုဗစ် ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေး ကော်မတီ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး စောအေးမြ က “ကျနော်တို့ သိရသလောက် ပြည်တွင်းမှာဝင်လာတဲ့ NGO တွေရဲ့ အကူအညီက အစိုးရ ဆီကိုပဲရောက်တယ်။ အဲ့ကနေ တစ်ဆင့် ကျနော်တို့ KNU ဗဟိုနဲ့ ခရိုင်နဲ့ ချိတ်ဆက်မှုတွေ လုပ်နေတယ်ပေ့ါနော်။ သူတို့ ခရိုင်ကပံ့ပိုးတာဘာမှမရှိဘူး။ သို့သော်လည်းပဲ သူတို့ဆီလည်း ဘာမှမရောက်လာသေးတဲ့ သဘောတော့ရှိတယ်။ အခုက ကျနော်တို့ဆီကို တိုက်ရိုက်ပံ့ပိုး တဲ့ အစီအစဉ်တွေ မရှိသေးဘူး” ဟု ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။
ထို့အပြင် လက်ရှိတွင် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၏ ဘတ်ဂျက်ငွေဖြင့်သာ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပြီး အဆိုပါ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် Quarantine Center ဆီသို့ အစိုးရဘက်မှ နေရပ်ပြန်သူများကို လာရောက်လွှဲပြောင်း ထားမှုရှိသလို ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု ကဏ္ဍတွင်သာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိပြီး စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့မှု တစ်စုံတစ်ရာမရှိ သေးကြောင်းနှင့် လတ်တလော ကိစ္စ ရပ်အတွက် ဒူးပလာယာခရိုင် တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း စောအေးမြက ဆက်ပြော သည်။
KNU ဒူးပလာယာခရိုင်မှ COVID-19 အရေးပေါ် တုန့်ပြန်ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် ခရိုင်အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ နေရပ်ပြန်ပြည်သူများအတွက် Quarantine Center ၃ ခုဖွင့်လှစ်ပေးထားကြောင်း ခရိုင်တာဝန်ရှိသူများ ထံမှ သိရသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံဒေသအသီးသီးမှ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မြဝတီနယ်စပ်မှ တဆင့် ဒုတိယ အကြိမ် မေလ ၂၃ ရက်မှ ယနေ့ ဇွန်လ တတိယအပတ်ထိ လူဦးရေ ၃၀,၀၀၀ ကျော် ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာ ခဲ့ဖြစ်သည်။ ထိုအထဲတွင် ရောဂါပိုး တွေ့ရှိသူများလည်းရှိကာ ၎င်းရောဂါးပိုးတွေ့ရှိ သူများကို သက်ဆိုင်ရာ ဖားအံ၊ မော်လမြိုင် နှင့် ရန်ကုန်မြို့များသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ http://kicnews.org/2020/06/knu%e1%81% 8f% e1%80%80% e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%97%e1
ရေးမြို့နယ် တောင်ပိုင်း ရင်းရယ်တောင်ခြေတွင် ခြံသမားတစ်ဦး ညအိပ်စောင့်နေစဉ် ဇွန်လ ၂၁ ရက်ည ၁၀ နာရီခန့်အချိန် က သေနတ်ဖြင့် ချောင်းမြောင်းပစ်ခံထိသဖြင့် မော်လမြိုင်ဆေးရုံ၌ ကုသခံနေရပြီး ယခုအခါ စိုးရိမ်စရာအခြေအနေမရှိတော့ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သေနတ်ပစ်ခံထိသူမှာ ရင်းရယ်ရွာသား နိုင်ဝမ်း ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ညာဘက်နံရိုးကို ထိမှန်သွားသည်ဟု ညီမဖြစ်သူ လူနာစောင့် မိယဉ်စိန်က ပြောသည်။“သူ့မှာ ရန်သူလည်းမရှိဘူး ရန်သူဟောင်း ရန်သူသစ်လည်းမရှိဘူး။ ပစ်တဲ့လူကို မတွေ့မိဘူးဆို တော့ ဘယ်သူလက်ချက်လည်းဆိုတာ မပြောတတ်ပါဘူး၊ ရန်ညိုးရန်စ ရှိထားတယ်ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့နော်”ဟု ၎င်း ကဆိုသည်။ အဆိုပါ သေနတ်ပစ်ခတ်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရဲစခန်း၌ အမှုဖွင့်ထားခြင်းမရှိသေးကြောင်း မိယဉ်စိန်က ဆက် ပြောသည်။
သေနတ်ဒဏ်ရာရရှိထားသည့်နေရာမှ ကျည်ဆံထိပ်ဖူးခွဲထုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အတွက် စိုးရိမ်စရာမရှိတော့သဖြင့် ဒဏ်ရာ အနာ ကျက်ရန် တစ်ပတ် ဆယ်ရက်ခန့်နေပြီးပါက ဆေးရုံဆင်းရမည်ဟု လိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်နေသည့် မွန်အရှင် ဥက္ကံသ က ပြောသည်။ မွန်အရှင် ဥက္ကံသ က “အခုကျည်ဆံထုတ်ပြီးပြီ၊ ကျည်ဆံက ဘယ်လိုအမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဆရာဝန် မပြောသေးပါ၊ ကျည်ဆံကထုတ်ပြီးပြီလို့ အဲ့လောက်ပဲပြောပြတယ်၊ ခန့်မှန်းကြည့်ရင်တော့ တောပုန်းသေနတ်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ စစ်သားတွေကိုင်တဲ့ သေနတ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ရွာနဲ့ခြံနဲ့ သွားရင် တစ်နာရီလောက်ပဲ ကြာတယ်၊ စစ်သားတွေလည်း မရှိပါဘူး” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ ရင်းရယ်ရွာနှင့်အနီတဝိုက်တွင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ သွားလာလှုပ်ရှားမှုမရှိသလို နယ်မြေအေးချမ်းသော ဒေသဖြစ်သည့်အတွက် ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းမှ စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေသည်ဟု သိရသည်။ ရေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းဒေသသည် ယခင်က မွန်ပြည်သစ်ပါတီအမာခံ နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ သော်လည်း ၁၉၉၅ ခုနှစ် နဝတစစ်အစိုးရ နှင့်သဘောတူချက်အရ တပ်စခန်းအခြေချခွင့် မရှိတော့ပေ။ http://burmese. monnews.org/2020/06/22/%e1%80 %9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%99%e1%
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် တွေ့ဆုံမည့် အစည်းအဝေးတွင် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် လွတ်လပ်ပြီး တရား မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ တင်ပြဆွေးနွေးသွားကြမည်ဟု ပြောသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကောက်မရှင်တို့ ဇွန် ၂၇ ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့တွင် တွေ့ဆုံရာတွင် သက် ဆိုင်ရာ ကြားနေအဖွဲ့အစည်းများအား လွတ်လပ်စွာသတင်းရယူ၊ ထုတ်ပြန်ခွင့်များကို ဖွင့်ပေးရန်တောင်းဆိုသွားမည်ဟု ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် စိုင်းလိတ် ကပြောသည်။ “ရွေးကောက်ပွဲကို စောင့်ကြည့်မယ့် ကြားနေအဖွဲ့အစည်းတွေ လွပ်လပ်မျှတစွာ သတင်းယူနိုင်ခွင့် သတင်းထုတ်ပြန်နိုင်ခွင့် ဒါတွေရှိဖို့အတွက်ကို သူတို့ဘယ်လို စီမံဆောင်ရွက်မှုမျိုးတွေရှိသလဲ ကျနော်တို့ ဖက်ကတော့ အဲဒီကြားနေအဖွဲ့အစည်းတွေ များများစားစားနဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှုပ်ရှားနိုင်အောင် ဖွင့်ထားပေးဖို့ ဒီဥစ္စာကို ကျနော်တို့ တောင်းဆို မှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ လက်ရှိတွင် တိုင်းရင်းသားဒေသများဖြစ်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတို့တွင် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေသည့်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်ဆိုပါက အဆိုပါဒေသများ တွင် ကျင်းပနိုင်မည့် အနေအထား ရှိ၊ မရှိကို ဆွေးနွေးသွားရန်ရှိပြီး ထိုသို့ သိရှိနိုင်မှသာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို လုပ်ဆောင် နိုင်မည်ဟု SNLD က ဆိုသည်။
ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ALD ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးကျော်က ၎င်းတို့ပါတီအနေဖြင့် ဆွေးနွေးမည့် အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။“ကျနော်တို့ဖက်ကတော့ အဓိကဆွေးနွေးရမှာကတော့ ရခိုင် ကိုယ်စားပြုပါတီတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ပြည်နယ်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် မေးကြရမှာပေါ့ဗျာ။ တစ်ဖက်မှာလည်း ပြည်ထောင်စု တစ်ခုလုံးမှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်နိုင်လား ဆိုတဲ့ဟာမျိုး ဒီလို မေးခွန်းလေးတွေတော့ ရှိမှာပေါ့။ နောက်တစ်ခါနေပြီးတော့ အခုရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတဲ့အချိန်က COVID ရဲ့ အချိန်လည်း ရှိနေတယ်လေ။ ဒီအတွက်ကိုလည်း ဘယ်လိုအကာအကွယ် အတားအဆီးပါ ဒါတွေလည်း မေးခွန်းတွေ အနေနဲ့ကတော့ ရှိမှာပါ။”
ထို့အတူ ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ပါတီ KSPP ကလည်း ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ မဲပေးမည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ကြိုတင်မဲကိစ္စ၊ တပ်မဲရုံကိစ္စနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာ၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးရန် စသည့်အချက်များကို အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲတွင် တင်ပြဆွေးနွေးသွားရန် ရှိသည်ဟု KSPP ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကွမ်ဂေါင်အောင်ခမ်းက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့က ရွေးကောက်ပွဲကို ရက်ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန်အတိုင်း ပြုလုပ်မည်ဆိုပါ က ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်မည့် သက်ဆိုင်ရာ ပါတီများ၏ သဘောတူညီချက်ကို ရယူရန် SNLD ပါဝင်သည့် စည်းလုံး ညီညွှတ်သော တိုင်းရင်းသားများ မဟာမိတ် UNA နှင့် မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများက ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထုတ်ကာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အား တိုက်တွန်း တောင်းဆိုထားသည်။ ထိုတောင်းဆိုမှု နောက်ပိုင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးပါတီများအား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ပြောဆိုလာခြင်းဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည်ဆိုသော်လည်း ကျင်းပမည့်နေ့ အတိအကျကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် UEC မှ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာထားခြင်း မရှိသေးပေ။ https://www.bni online.net/mm/news-73767
၆။ ဖားကန့်ဒေသတွင် မြေပြိုမှုကြောင့် သုံးဦးသေဆုံးပြီး ခြောက်ဦးဒဏ်ရာရရှိကာ ပျောက်ဆုံးသူများကို ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် ဆိပ်မူကျေးရွာအုပ်စု စပေါ့ကျေးရွာနှင့် ဘွမ်နန်ကျေးရွာကြားရှိ ရတနာအဓိပတိ ကုမ္ပဏီ လုပ်ကွက် ကျင်းပြိုကျခဲ့ရာ သုံးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ခြောက်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ မြေပြိုမှုဖြစ်စဉ်မှာ ဇွန်၂၃ ရက် ညနေ ၃ နာရီ ၃၉ မိနစ်ခန့်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မြေပြိုမှုအခြေအနေကို ကြိုတင်သတိပေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ မြေ ပြိုသည့်ဘက်မှ လူအများရှောင်တိမ်းနိုင်ခဲ့သော်လည်း ရေကန်တစ်ဖက်မှလူများမှာ မြေစာများ ရေကန်အတွင်းကျသည့် အ ရှိန်ကြောင့် ရေလှိုင်းများဆွဲချသည့်အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ ပျောက်ဆုံးစာရင်းများကို လိုက်လံကြေညာနေကြောင်း စပေါ့ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစန်းယုက ပြောကြားသည်။
ဖားကန့်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး မှတ်တမ်းများအရ သေဆုံးသူမှာ မှော်ရှန်ကျေးရွာ နေသူ ၅၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ဦးအောင်မြင့်မှာ ယင်းမြေပြိုချိန်တွင် အမြင့်ပေ ၆၀ ခန့်မှ ပြုတ်ကျခဲ့ပြီး ဦးခေါင်းပေါက်ပြဲ၊လက်မောင်းကျိုးပဲ့ကာ ဆေးရုံသို့ ကားဖြင့်ပို့ဆောင်စဉ် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း၊ ဆိပ်မူကျေးရွာမှ ၄၅ နှစ်အရွယ်ရှိ ဦးနော်တောင် နှင့် ဦးကျော်စိုး (အချက်အလက် စိစစ်ဆဲ) မှာ ရေလှိုင်း နှင့် ဆွဲချခံရကာ သေဆုံးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိတွင် ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေ ပြီး ပျောက်ဆုံးစာရင်းများကို ကောက်ယူနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း မြေပြို၊ မျောချောင်းပေါက် ကျမှုများ၊ ခြေချော်ပြုတ်ကျမှုများကြောင့် လူသေဆုံး မှု ၃၀ နီးပါးရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း အစိုးရမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
ဖားကန့်ဒေသတွင် မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်မှရောက်ရှိလာသည့်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား သုံးသိန်းဝန်းကျင်အမြဲရှိနေပြီး ကျောက်စိမ်း လုပ်ကွက်များတွင် တရားမဝင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် တူးဖော်ခြင်း၊ မြေစာပုံများတွင် ရေမဆေးရှာခြင်း၊ ကျောက်စိမ်းတူးဖော်နေဆဲ လုပ်ကွက်များတွင် ကျောက်စိမ်းရှာဖွေခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများတွင်လုပ်ကိုင်နေပြီး မြေပြိုမှုကြောင့်လစဉ်သေဆုံးမှုများရှိခဲ့ သည်။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ လက်ထက်တွင် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၏ စာရင်းများအရ ဖားကန့်ဒေသတွင် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ ၈၀၈ ခု တစ်ဧက လုပ်ကွက်ပေါင်း ၁၅၆၃၈ ကွက်၊ အကျိုးတူ ကုမ္ပဏီ ၂၂၂ ခု၊ လုပ်ကွက်ပေါင်း ၃၀၂ ကွက်အထိ ရှိခဲ့သည်။ NLD အစိုးရလက်ထက်တွင် လုပ်ကွက်များကို သက်တမ်းတိုးပေးခြင်း မရှိတော့ဘဲ လုပ်ကွက်ဧရိယာ အကျယ်အဝန်းနှင့် ပေါင်းစပ် တူးဖော်ခွင့်များ ကန့်သတ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် အကျိုးတူလုပ်ကွက် လေးခု၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ကွက် ၆၃၆ ကွက်ရှိပြီး အများစုမှာ ခိုးတူးနေကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https: //news-eleven.com/article/179872
မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ် မော့ကနင်ကျေးရွာတွင် အိမ် ၁၈ လုံး မီးလောင်ကျွမ်းသဖြင့် အိမ်ထောင်စု ၂၇ စုနှင့် လူဦးရေ ၁၄၄ ဦး မီးဘေးသင့် ခံနေရသည့်အပြင် အခြားနေအိမ် ၉ လုံးလည်း အိမ်အကာနံရံများ မီးထဲပါရှိသွားသည့်အတွက် လတ်တလော ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး မခန့်မှန်းနိုင်သေးကြောင်း မော့ကနင် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအင်းစိန်က ပြောသည်။ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်တွင် မီးစလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး ၂ နာရီခန့်အကြာ မီးညွန့်အရှိန်ကျိုးကာ ည ၁၁ နာရီခွဲခန့်က မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ပြီး စိစစ်မှုတွေအရ အိမ်တွင်း လျှပ်စစ်ဝါယာရှော့ကြောင့်ဟု မီးသတ်ဌာနက မှတ်ချက်ပြုသည်။ “လောင်တာ ကတော့ ဝါယာကြိုးရှော့ ဖြစ်ပြီးလောင်တယ်လို့ ပြောကြတာပေါ့ ဒါက မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ စိစစ်ချက်အရ ပြည်သူ့ရဲတွေ စိစစ် ချက်အရ မြို့နယ်ထွေအုပ်ဌာနရဲ့ စိစစ်ချက်အရ ဒီမီးပေးထားတဲ့ ပါဝါကြိုးကနေ ရှော့ဖြစ်ပြီးတော့ လောင်တယ်လို့ ပြောကြ တာပေါ့” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
“ဒီဘေးနားမှာပဲလားဆိုပြီး ဘာမှယူလို့လည်း မမှီတော့ ဂုန်နီအိတ်တစ်လုံးယူပြီးတော့ ပစ္စည်းတစ်ချို့ကိုထည့်ပြီး မြေးနဲ့ ပြေးသွားတော့တာပဲ အခုဘာမှမရှိတော့ဘူး အကုန်လောင်သွားကုန်ပြီ တန်ဖိုးက အများကြီးပဲ ဆုံးရှုံးသွားတာ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ တန်ဖိုးက အခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲ အိမ်မှာရှိတဲ့ ကလေးစရာ ပစ္စည်းတွေ စလောင်းတွေ TV တွေ အကုန်ကုန်သွားတယ် မီးစက်တွေ ပစ္စည်းတွေ တစ်အိမ်လုံးလည်း အကုန်ဖျက်စီးသွားတယ်”ဟု မီးဘေးသင့်ခဲ့ရပြီး နေအိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် ဒေါ်စန်း က ပြောသည်။ မီးလောင်ရာမှာ မျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူ မအေးကြူက “ဟို အိမ်မီးလောင်သွားပြီ ကြည့်လိုက်တော့ မီးခိုးတွေ ထွက်နေတယ် အဲ့ဒါနဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ပစ္စည်းတွေယူတယ် ယူနေတုန်းပဲ ရှိသေးတယ် မီးကလောင်တယ် ကြည့်နေတုန်းမှာပဲ နောက်တစ်အိမ် ဆက်ကူးသွားတယ် မီးကအားကောင်းနေတယ်လေ ခုနနေနောက်တစ်အိမ် သုံးအိမ်မြောက်ကို ဆက်ကူး သွားတယ် တစ်လမ်းလုံး ခြားနေတာတောင် မီးကူးလာတယ် အဲ့ချိန်မှာ မီးသတ်ကားကတော့ ရောက်လာပြီး အဲ့မှာကြောက် ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သွားနေလိုက်တယ်ပေါ့” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ မီးလောင်နေအိမ် (၁၈) လုံးတို့ကို ဆန်တစ်အိတ်နှင့် ငွေတစ်သိန်းစီနှင့် ကျန်နေအိမ် (၆) လုံးကို ဆန်တစ်အိတ်နှင့် ငွေငါးသောင်းစီ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦး နှင့် “အအာခရီး” အဖွဲ့တို့ကလည်းကောင်း၊ မော်လမြိုင်မြို့မှ ဘိုဘိုဝင်းလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းကောင်း ဆန်၊ ဆီနှင့် ပစ္စည်းတချို့တို့ကို သွားရောက်ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ http://burmese.monnews.org/2020/06/23/%e1%80%99%e1%80%b 1%e1%80%ac%e1%80%b7%e1%
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ကောင်းကတ်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သိမ်းယူထားသည့် မြေဧရိယာ (၉၇) ဧက ကို ကျေးရွာပိုင်များ ထင်းစိုက်ခင်းအဖြစ် ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးမည်ဟု လွှတ်တော်တွင် ဒေါက်တာ ညီညီအောင် က ပြောကြားလိုက်သည်။
ယမန်နေ့ ( ဇွန် ၂၄)ရက်တွင် ကျင်းပသည့် သျှမ်းပြည် လွှတ်တော် (၁၉ ) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် နမ့်ခမ်းမြို့ နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးမောင် မှ ကောင်းကတ်ကျေးရွာအုပ်စု ကွင်းပြင်ပ ဒေသရှိ သစ်တောစိုက်ခင်းအဖြစ် သိမ်းယူထားသည့် မြေများအနက် စိုက်ပျိုးခြင်းမရှိသော မြေဧရိယာ (၉ ၇) ဧက ကို မူလ ပိုင်ရှင် တောင်သူ ၂၈ ဦးထံ သို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရန် အစီစဉ် ရှိ /မရှိ ကြယ်ပွင့်ပြ မေးခွန်း မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ မေးမြန်းမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး သယံဇာတ နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ညီညီအောင် မှ နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ကောင်းကတ်ကျေးရွာအုပ်စု သစ်တောစိုက်ခင်းများကို ကျေးရွာပိုင်ထင်းစိုက်ခင်းအဖြစ် လွှဲပြောင်းပေးမည်ဟု လွှတ်တော်တွင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ နမ့်ခမ်း သစ်တော ဦးစီးဌာနမှ (၁၉၉၅ – ၁၉၉၆) ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာသုံး ထင်းစိုက်ခင်း အဖြစ် စိုက်ပျိုးရန် သိမ်းယူခဲ့ပြီး သိမ်းယူမြေဧက (၁၀ဝ) အနက် ၃ ဧက သာ ထင်းစိုက်ခင်းအဖြစ် သစ်တောဦးစီးဌာနက စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး ကျန်ရှိသည့် ဧက (၉၇) ဧက တွင် စိုက်ပျိုးခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။ https://bur mese.shannews.org/archives/17252
၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ကရင်ပြည်နယ်အနေဖြင့် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဆန္ဒမဲ ပေးခွင့်ရှိသူထက် လူဦးရေ ၂ သိန်းနီးပါး တိုးလာသည်ဟု ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့၏ ကောက်ယူထားသည့် စာရင်းအရ သိရသည်။ ကရင်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့က ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လမှ ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ် ဇွန်လအထိ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူ ၁၁ သိန်းနီးပါး စာရင်းကောက်ယူထားပြီး ၎င်းဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူများထဲတွင် အစိုးရ တပ်မတော်သားများ၏ ဆန္ဒမဲထည့်ခွင့်စာရင်း ပါဝင်မှုမရှိ သေးကြောင်း ကေအိုင်စီမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
“ ၂ဝ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲဆန္ဒနယ်ရော၊ မဲထည့်ခွင့်ရော မရခဲ့ဘူး။ ၂ဝ၂ဝ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အခြေခံမဲ စာရင်း ကောက်ခံထားတယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့နယ်က ကျေးရွာအုပ်စုတွေ ပါလာမယ်လို့တော့ မျှော်လင့်ရတယ်။ အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မရှိတဲ့ ကျေးရွာအုပ်စု အများကြီးရှိတော့ ဒေသခံတွေ မဲထည့်ခွင့်ရဖို့ ကော်မရှင်နဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးစေလိုတယ်”ဟု ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (KNDP) ဒုဥက္ကဋ္ဌ စကျော်စွာက ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့ ကေအိုင်စီ သို့ပြောသည်။
ကရင်ပြည်နယ်တွင် ဖာပွန်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်နှင့် အခြားမြို့နယ်အချို့ရှိ ကျေးရွာများတွင် အစိုးရမှ ခန့်အပ်ထားသည့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး မရှိသေးသည့်အတွက် ဒေသခံများ ဆန္ဒမဲထည့်ခွင့်ရဖို့ မသေချာသေးသည့်အပေါ် အစိုးရဌာနဆိုင် ရာများနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသည်ဟု ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး မြို့နယ်တာဝန်ရှိသူများထံမှ သိရသည်။
၂ဝ၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ကရင်ပြည်နယ်အနေဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိ သူဦးရေ ၉ သိန်းကျော်ရှိပြီး ပါတီပေါင်း ၁၉ ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၂၆ဝ ကျော် ဝင်းရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) ပါတီမှ မဲဆန္ဒ နယ်အများစု အနိုင်ရရှိသည်ဟု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/06/ %e1%80%80%e1%80%9b %e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%bb%e1%
မြေယာအငြင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပြီးဖြစ်တဲ့ ကရင်နီတောင်သူ ၂၂ ဦးအပေါ် နောက်ထပ်ပြစ်ဒဏ် ထပ်တိုးချမှတ်ပေးဖို့ တပ်မတော်က ကယားပြည်နယ်တရားရုံးမှာ လျှောက်ထားလိုက်ပါတယ်။ လွိုင်ကော်အခြေစိုက် အမြောက် တပ် ၃၅၆ တပ်ရင်းနဲ့ ခလရ ၂၅၀ တပ်ရင်းတို့က ကရင်နီပြည် တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ ခွန်းဘွယ်မူး၊ ခွန်းကောရီယို၊ ခွန်းမောင်လွင်နဲ့ တရားစွဲခံရတဲ့ တောင်သူ ၁၉ ဦးတို့ကို ပြစ်ဒဏ်ထပ်တိုးပေးဖို့ လျှောက်ထားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။
ကရင်နီတောင်သူ ၁၉ ဦးတို့ကို ပုဒ်မ ၄၄ရ၊ ပုဒ်မ ၂၉၄၊ ၃၅၃၊ ၄၂၇၊ နဲ့ ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆(၁) တို့ နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်က အမှုတွဲသီးခြားစီ တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့က သူတို့ကို လွိုင်ကော်မြို့နယ် တရားရုံးက ပုဒ်မအလိုက် ဒဏ်ငွေကျပ် ၂၀ဝ၀ဝ စီနဲ့ ချုပ်ရက် ထုတ်နုတ်ခံစားခွင့်ပြုတဲ့ ထောင် ဒဏ် ၆ လ ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ပြစ်ဒဏ်တွေဟာ နည်းနေတယ်ဆိုပြီး မူလ တရားစွဲဆိုတဲ့ တပ်မတော်အရာရှိတွေက လွိုင်ကော်ခရိုင်တရားရုံးကို လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ ခရိုင်တရားရုံးက ပလပ်ခဲ့တာကြောင့် ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်ကို ထပ်ပြီး လျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီပြင်ဆင်ချက်ကို ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်က လက်ခံတဲ့အတွက် ဒီကနေ့ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့မှာ တောင်သူတွေကို ခေါ်ယူလက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့တယ်လို့ တောင်သူတွေရဲ့ရှေ့နေ ခူးတလေပိုးရယ်က ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ ရှေ့နေပါဝါတင်ပြီး နောက်ထပ်ရုံးချိန်းမှာ အမှုကို လျှောက်လဲချက်ကြား နာဖို့နေကာ လျှောက်လဲကြားမှာပြီး ရင်တော့ အမိန့်ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့်ရုံးချိန်းရက်တွေကိုတော့ တရားလွှတ်တော်က ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်မှာကနေ ကြေညာပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်က တရားစွဲဆိုခံထားတဲ့ တောင်သူ ၂၂ ဦးထဲက ပုဒ်မ ၆(၁) နဲ့ တရားစွဲဆို ခံရသူ ၃ ဦးရှိပြီး သူတို့တွေဟာ ထောင်တွင်းမှာ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ မြို့နယ်တရားရုံးက အမိန့်ချ မှတ်စဉ်မှာတော့ ပုဒ်မ ၆၁ အပါအဝင် ကျန်တဲ့အမှုတွေနဲ့ပါ တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ ဦးဦးရယ်နဲ ဦးရှားရယ်ကိုတော့ ထောင်ဒဏ် ခြောက်လနဲ့ ငွေဒဏ်တွေ ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီး တစ်ဦးက အမှုမှ ကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။
ကယားပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်က ခူးဦးရယ်ထံ ပေးပို့ခဲ့သည့် အကြောင်းကြားစာအရ အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့က ခူးဦးရယ်နဲ့ ခူးရှားရယ်တို့ ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ ခလရ (၂၅၀) မှ အုတ်တံတိုင်းတွေဟာ ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပြီး ကာလတန်ဖိုး ကျပ် ၁၄၉ သိန်းခန့်ဖြစ်လို့ နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာဆုံးရှုံးမှုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပါက ထောင်ဒဏ် ခြောက်လပြစ်ဒဏ်မှာ နည်းပါးလွန်းလှတယ်လို တရားလိုက ရေးသားထားပါတယ်။ တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ တောင်သူအများစုဟာ တရားစွဲဆိုခံရလို့ လယ်ယာမြေတွေ ပြန်လည် လုပ်ခွင့်မရတော့ဘဲ့ မိသားစုစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ကယားပြည်နယ်၊လွိုင်ကော်နဲ့ ဒီးမော့ဆို မြို့နယ်မှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မြေယာအငြင်းပွားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်က တရားစွဲဆိုထားတဲ့ ဒေသခံ တောင်သူပေါင်း ၄၁ ဦး ရှိပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archive s/396084
ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ မြဝတီ-မဲဆောက် အမှတ် ၂ တံတားမှတဆင့် မြဝတီဘက်ခြမ်း BCF တွင် (ဇွန် လ ၂၃ ရက်နေ့) ဝင်ရောက်လာသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးမှာ အရက်သေစာသောက်စားလာပြီး စစ်ဆေးမှုမခံယူဘဲ အော်ဟစ်ဆူပူနေခြင်းများ ပြုလုပ်သည့်အတွက် မြဝတီမြို့နယ်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၆ လ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထိုင်း-မြန်မာ အမှတ် ၂ ချစ်ကြည်ရေးတံတားမှ တဆင့် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲ အချိန်ခန့်က ဝင် ရောက်လာသူ ဖားအံမြို့ တောင်ကလေးကျေးရွာနေ စောခင်စိုးဝင်း ၃၇ နှစ်သည် အရက်သေစာသောက်စားလာပြီး စစ်ဆေး မှုမခံယူခြင်း၊ အော်ဟစ်ဆူပူနေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍ ယင်းဖြစ်စဉ်အား မြဝတီခရိုင်ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ နန္ဒဝင်း မှ တရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်းမှုအရ မြို့နယ် တရားသူကြီး ဦးဝေဇင်မန်းမှ လက်ခံစစ်ဆေးပြီး ညနေ ၆ နာရီ အချိန်တွင် စောခင်စိုးဝင်းအား ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈ အရ ထောင်ဒဏ် (၆) လ ကျခံစေရန် အမိန့်ချမှတ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယမန်နေ့ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့ကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံ ထိုင်း-မြန်မာ အမှတ် ၂ တံတားမှတဆင့် ပြန်လာသူ အမျိုး သမီး တစ်ဦးမှာ မြဝတီ BCF ဇုန် သို့ မဝင်ဘဲ ကားဖြင့် ခိုးထွက်သွားသဖြင့် ၎င်းအမျိုးသမီးနှင့် အတူယာဉ်မောင်း အမျိုးသား (၁)ဦးအား မြဝတီမြို့နယ်တရားရုံးမှ ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် ထောင်ဒဏ်(၄)လစီ အမိန့်ချခဲ့ ပြီး မြဝတီနယ်စပ် BCF ဇုန်တွင် ဥပဒေချိုးဖောက်မှုဖြင့် အဆိုပါ ဥပဒေဖြင့် အရေးယူခံသူ (၃)ဦးထိရှိပြီဖြစ်သည်။ http://k icnews.org/2020/06/%e1%80%80%e 1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%8
မြန်မာ့တပ်မတော်က ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများ ပိတ်ဆို့ထားသည့်အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ချင်း လူမျိုးအများစုနေထိုင်ကြသော ကျေးရွာပေါင်း (၄၀) ကျော်မှဒေသခံပြည်သူများ ဆန်ပြတ်လပ်နေပြီဟုသိရသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော (AA) အကြားဖြစ်ပွားနေသည့် စစ်ရေးပဋိပက္ခကြောင့် တပ်မတော်က အမ်းမြို့နယ် ဒလက်ချောင်းအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာပေါင်း (၄၂) ရွာနှင့် ဆက်သွယ်သော ရေလမ်း ကုန်လမ်းများအားလုံးကို ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီလဆန်းကတည်းက ယနေ့ချိန်ထိ ပိတ်ဆို့နေသည့်အတွက် ဒေသခံပြည်သူများ ဆန်ပြတ်လပ်နေကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု ချင်းလူ့အခွင့်အဖွဲ့ (CHRO) မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုင်းလျန်ကပြောသည်။ ဒလက်ချောင်းအုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာများသည် ဆန်၊ဆီ၊ဆား အခြေခံစားသောက်ကုန်များကို အမ်းမြို့သို့ ကုန်းလမ်းဖြင့်သော်လည်း မြေပုံမြို့နယ် ကံတောင်ကြီးဖက်သို့ ရေလမ်းကြောင်းတို့ဖြင့် သယ်ယူလေ့ရှိကြသော်လည်း ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) ထံ စားနပ်ရိက္ခာများရောက်ရှိသွား မည်ကို စိုးရိမ်သည့်အတွက် တပ်မတော်ဘက်က လမ်းကြောင်းများအားလုံး ပိတ်ဆို့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
“အခုက ကျနော်တို့က ပိုက်ဆံရှိရင်တောင်မှ ဆန်ဝယ်လို့မရတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်နေတယ် ဆန်အိတ်ကိုကလုံးဝမရှိဘူး၊ အခုလောလောဆယ်က ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေက ဒလက်ချောင်းကြားမှာရှိတဲ့သူတွေက ရှမ်းကုန်းကျေးရွာနဲ့ မင်္ဂ္ကန်ကျေးရွာ ကိုအကုန်လုံးနီးပါး ပြောင်းရွှေ့လာကြပြီ ဆိုတော့ လောလောဆယ်က ကျနော်တို့စုပုံနေကြတာပေါ့ စုပုံနေတဲ့ခါ ကျတော့ အကုန်လုံးကအစားအသောက်တွေက ပြတ်နေတဲ့အခါကျတော့ စားစရာဆန်မရှိတဲ့အခါကျတော့ လောလောဆယ် အသီး အနှံ ပိန္နဲသီးတို့ စားပြီးတော့မှနေနေရတယ်” ဟု ဆလိုင်းဝင်းမောင်ကပြောသည်။
အမ်မြို့မှ အနောက်ဖက်(၂၅)မိုင်ခန့်အကွာ ဒလက်ချောင်းအုပ်စုအတွင်း ဒါးလက်ကျေးရွာ အထက်နှင့် ရှမ်းကုန်းကျေးရွာ အနားတွင် တပ်စခန်းများရှိတည်ပြီး အမ်းမြို့အခြေစိုက် အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံတပ်များ ဖြစ်ကြ ကြောင်း သိရပါသည်။ လက်ရှိ ရိက္ခာဆန်ပြတ်လပ်နေသည့် ဒလက်ချောင်းအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာ (၄၂) ရွာအနက် (၃၇) ရွာမှာ ချင်းလူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး ကျန် (၅) ရွာမှာ ရခိုင်လူမျိုးများနေထိုင်ကြကြောင်းသိရသည်။ https://www.bnionli ne.net/mm/news-73784
စစ်ရေးဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက် ပေါက်ကြားမှုနဲ့ လူမျိုးရေး အမုန်းတရားတွေကို အင်တာနက်ကနေ လှုံ့ဆော်မှုတွေ ရှိနေတာ ကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အင်တာနက်ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ အစိုးရကို တိုက်တွန်းမှာ မဟုတ်သေးဘူးလို့၊ တပ်မတော် သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်း က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ရခိုင် လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ လူ့အခွင့် အရေး လှုပ်ရှားသူတွေကတော့၊ ဒီယူဆချက်ကို လက်မခံဘဲ ငြင်းပယ်လိုက်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက မြို့နယ် ၇ မြို့နယ်နဲ့၊ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်တွေမှာ အင်တာနက် ဖြတ်တောက်ထား တာ တစ်နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှည်ကြာဆုံး အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုကို အဆုံးသတ်ပေးဖို့ ဒေသခံ တွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် တောင်းဆိုနေကြတာပါ။ တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ရခိုင်မှာ အင်တာနက် ဖြတ်တောက်ထားတာကို အဆုံးသတ်ဖို့ အစိုးရကို အဆိုပြုတိုက်တွန်းမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြော ကြားလိုက်ပါတယ်။ သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးကလည်း “ရခိုင်မှာ လုံခြုံရေး အခြေအနေတွေကြောင့် အင်တာ နက် ဖြတ်တောက်ပေးဖို့၊ တပ်မတော်က တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက် အစိုးရက ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ဒီလို အင်တာနက် ဖြတ်တောက်မှုက အကျိုးရှိပါတယ်”လို့ မကြာသေးခင်ကလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာ ပြောခဲ့ဖူး ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်က အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်ထုမေကတော့ တပ်မတော်ရဲ့ ဒီအကြောင်းပြချက် က ယုတ္တိမတန်ဘူးလို့ ချေပပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ သေဆုံးသူ ခြောက်ဦးသာရှိ သေးပေမယ့်၊ ရခိုင်နဲ့ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်က တိုက်ပွဲတွေကြောင့်၊ အရပ်သား သေဆုံးမူက ၂၀ဝ ကျော်ရှိနေပါပြီ။ အင်တာနက်ဖြတ်တောက် ပြီးနောက်ပိုင်း အရပ်သားထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့ အရေအတွက်နဲ့ မဖြတ်တောက်ခင် ထိခိုက်သေဆုံး ရမှုကို၊ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ကွာခြားတာကို တွေ့နိုင်တယ်လို့ ဒေါ်ထုမေက ထောက်ပြပါတယ်။
လူ့အခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူ Fortify Rights အဖွဲ့က နစ်ကီဒိုင်းမွန်းက၊ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာ ရခိုင်ပြည်သူ တွေနဲ့ နိုင်ငံတကာက စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေ၊ သတင်းမီဒီယာတွေအတွက် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးမှ ရှာမတွေ့ဘူးလို့ ထောက်ပြ‌ဝေဖန်ပါတယ်။ ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိုးသိန်း က‌တော့၊ ရခိုင်ပြည် နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ အင်တာနက် ဖြတ်တောက်ထားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ “ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအရ အများပြည်သူအကျိုးကို မထိခိုက်ဘူးလို့ သုံးသပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှသာ အင်တာနက် ပြန်ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီး၊ လောလောဆယ် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့ထိ အင်တာနက် ဖြတ်တောက်ထားမယ်”လို့ ဇွန်လ ၁၀ ရက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ HRW ရဲ့ အာရှ ဥပဒေ ရေးရာအကြံပေး Linda Lakhdhir က ရခိုင်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်တွေမှာ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ကမ္ဘာ့အရှည်ကြာဆုံး အင်တာနက် ဖြတ်တောက်မှုဖြစ်သလို ချက်ချင်းပြန်ဖွင့်ပေးသင့်ကြောင်းနဲ့ ဒေသခံတွေ လုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့ သတင်းအချက်အလက်ရရှိဖို့ ဟာ အရေးကြီးကြောင်း တိုက်တွန်း ပြောကြားထားပါတယ်။
တပ်မတော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ဂူတာပြင်ကျေးရွာ သတ်ဖြတ်မှု ကိစ္စအပေါ် စစ် တရားရုံးက ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အခြေအနေ၊ AA နဲ့ ပတ်သတ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့သူတွေ ရိုက်နှက်ခံရတဲ့ ကိစ္စအပေါ် စုံစမ်း စစ် ဆေးနေတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး RFA က မေးမြန်းရာမှာ၊ အဲဒီကိစ္စတွေကို စစ်ခုံရုံးက ပိုပြီးတိတိကျကျ စစ်ဆေး နေဆဲဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြန်လည်ဖြေကြား သွားပါတယ်။ https://www.rfa.org/b urmese/news/zawmintun-says-army-still-block-internet-in-rakhin e-state-06232020071026.html
Mawlamyine Cement Limited- MCL (ကျိုက်မရောဘိလပ်မြေစက်ရုံ) သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ကျောက် မိုင်းခွဲခြင်းလုပ်ငန်းကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အတွက် ကျောက်မိုင်းခွဲခြင်းကိစ္စအဝဝသည် MCL (ကျိုက်မရော ဘိလပ်မြေ စက် ရုံ) နှင့် လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ကြောင်း စက်ရုံ၏ Managing Director, Mr Hatsachai Prahanphap က ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ စွဲဖြင့် အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ မည်သို့အကြောင်းကြောင့် ကျောက်မိုင်းခွဲခြင်းလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရသည်ကို ကုမ္ပဏီ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်အချို့အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် ၎င်းတို့အနေဖြင့် ယခုကိစ္စအား ရှင်းပြပြောဆိုရန် ဆန္ဒမရှိကြောင်း မွန် သတင်းအေဂျင်စီကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
“MCL ကိုဖက်စပ်ထားတဲ့ ထိုင်း SCG နဲ့ မြန်မာဘက်က PLCI တို့ ရှယ်ယာပြဿနာကိစ္စရှိနေတယ်၊ နေပြည်တော်အထိ သွားပြီးရှင်းကြတယ်၊ အဆင်မပြေဘူး၊ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် လုံးဝကိုညှိမရလို့ စက်ရုံပိတ်သိမ်းတော့မယ့် အနေအထားအထိ တောင် ဖြစ်သွားနိုင်တယ်”ဟု MCL နှင့် နီးစပ်သည့်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက မွန်သတင်းအေဂျင်စီသို့ ပြောသည်။ သို့ရာတွင် အထက်ပါရှယ်ယာပြဿနာနှင့်ပတ်သက်၍ SCG နှင့် PLCI တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် အတည်မပြုနိုင်ခဲ့ပါ။“လက်ရှိ ကျန်နေသေးတဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေက ဇူလိုင်လ လယ်လောက်မှာ ကုန်တော့မယ်၊ သြဂုတ်လ ကုန်လောက်ဆိုရင် ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ် နေတာတွေလုံးဝကို ရပ်နားသွားသလောက်ပါပဲ”ဟု အဆိုပါလုပ်ငန်းရှင်က ဆက် ပြောသည်။
တစ်နေ့လျှင် ဘိလပ်မြေတန်ချိန် ၅၀ဝ၀ ထုတ်လုပ်သည့် MCL ဘိလပ်မြေစက်ရုံသည် ထိုင်းနိုင်ငံ SCG-Siam Cement Group က အစုရှယ်ယာ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် Pacific Link Cement Industries Ltd. က အစုရှယ်ယာ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၄၀ဝ ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် ပုဂ္ဂလိကအကျိုးတူ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းဖြစ် သည်။ Pacific Link Cement Industry- PLCI သည် ၁၆-၃-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှစပြီး ၁၅-၃-၂၀၃၆ ရက်အထိ နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်တိုင် ပျားတောင်ဒေသတွင် လိုအပ်သည့် စက်မှုကုန်ကြမ်း ထုံးကျောက်များကို ထုတ်လုပ်ခွင့် ရရှိထားသည်။
MCL ဘိလပ်မြေစက်ရုံ စတင်လည်ပတ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အတ္ထရံမြစ်ကြောင်းတလျှောက်သင်္ဘောကြီးများ အဆက်မပြတ် သွားလာမှုကြောင့် မြစ်ကမ်းပါးပြိုကျခြင်း၊ ကမ်းပါးအနီးအနားရှိ နေအိမ်များယိမ်းယိုင်သွားခြင်း၊ ရေနေသတ္တဝါများ ရှားပါးလာ ခြင်းနှင့် ကျောက်မိုင်းခွဲမှုကြောင့် အိမ်နံရံအချို့ တုန်ခါ၍အက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သဖြင့် ဒေသခံများမှ ကန့်ကွက်မှုများရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ စက်ရုံစတင် လည်ပတ်ခဲ့ရာတွင် လိုအပ်သော လျှပ်စစ်မီး မဂ္ဂါဝပ် ၄၀ ကို ကျောက် မီးသွေးအသုံးပြုရသည့်အတွက် ဒေသခံများနှင့် သဘာဝဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တို့၏ မကြာခဏ ကန့်ကွက်ခံရသည့် စက်ရုံတစ်ရုံအဖြစ်ထင်ရှားသည်။ http://burmese.monn ews.org/2 020/06/23/mcl-%e1%80%98%e1%80%ad% e1%80%9c%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%
၁၅။ ရေဖြူမြို့နယ် သုံးလောင်းပြိုင်လူသတ်တရားခံဖမ်းဆီးရမိ၊ ရာဘာခြံလုပ်သားနှစ်ဦး မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲရန် ဖုန်း အပေါင်ခံ ထားမှုကြောင့်ဖြစ်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေဖြူမြို့နယ် ရေး-ထားဝယ်ကားလမ်းပေါ်ရှိ ဥသာရံကျေးရွာအနီး မီးရထားသံလမ်းအစောင့် ဝန်ထမ်းမိသားစု သုံးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုကျူးလွန်သည့် တရာခံများအား ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ဥသာရံကျေးရွာမှ ရာဘာခြံလုပ်သားနှစ်ဦး မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲရန် ဖုန်းလာရောက်အပေါင်ခံထားရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။“တရားခံကတော့ မိပြီဗျ၊ မနေ့ညက မိထားတာ ခင်ဗျား”ဟု ရေဖြူမြို့မရဲစခန်း ထံမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက မွန်သတင်းအေဂျင်စီသို့ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ရေးမြို့နယ် ချောင်းတောင်ရွာနေ ကျော်မင်းထွန်းနှင့် ရေဖြူမြို့နယ် ဥသာရံကျေးရွာနေ ဝိုင်ကေတို့သည် ရေဖြူမြို့ နယ် ၂၃ မိုင်ဝန်းကျင် ရာဘာခြံအတွင်း ခြံခုတ်လုပ်သားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြပြီး အခင်းဖြစ်ပွားသည့် ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့ ည ၁၁ နာရီခန့်တွင် မူးယစ်ဆေးဝယ်ရန် ကိုင်ဆောင်ထားသောဖုန်းအား အသတ်ခံရသူ အောင်ကျော်ထွန်းထံ အပေါင်ထားခဲ့ ကြောင်း၊ အဆိုပါ ည ၁ နာရီခန့်တွင် အပေါင်ထားသော ဖုန်းအားပြန်တောင်းရာ မရသဖြင့် သုံးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုကျူး လွန်ခဲ့သည်ကို စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း ထားဝယ်ခရိုင်ပြန်/ဆက်သတင်းတွင် ဖော်ပြသည်။
အဆိုပါလူသတ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် သစ်သားရိုးတပ် ငါးမန်းစွယ်ဓားအား ဥသာရံကျေးရွာနေ သိန်းသန်းဝင်း ၏ နေအိမ်တွင် ပြန်လည်သိမ်းဆီးရမိပြီဟု သတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ အသတ်ခံရသူမိသားစုမှာ ဥသာရံကျေးရွာအနီး ရထားသံလမ်း တံခါးအဖွင့်အပိတ် ပြုလုပ်သည့် ဝန်ထမ်း ကိုအောင်ကျော်ထွန်း (၂၆ နှစ်)၊ ဇနီး မခင်မျိုးဝေ (၂၈ နှစ်) နှင့် အသက်တစ်နှစ်ခွဲအရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦးတို့ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ သုံးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရေဖြူမြို့မ ရဲစခန်းမှ ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၂ အရ အမှုဖွင့်ထားသည်။ http://burmese.monnews.org/
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါအလွန်တွင် သျှမ်းပြည် ပြည်သူများ၏ စီးပွားရေး ကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိကျသည့် အဖြေမရခဲ့ကြောင်း ဦးညီလေးချမ်းက ပြောဆိုလိုက်သည်။
၂၀၂၀ မေလ ၁၈ နှင့် ၁၉ သျှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (ဇွန် ၂၄) ရက်တွင် ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ဦးညီညီ (ခ) ဦးညီလေးချမ်း က ကိုဗစ်-၁၉ အလွန် သျှမ်းပြည် ပြည်သူလူထု ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး ၊ စီးပွားရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို လွှတ်တော်တွင်း မေးမြန်းခဲ့သည်။ ထိုမေးမြန်းချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများအသီးသီးက လာရောက်ဖြေကြားခဲ့သော်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ အလွန် စီးပွားရေးကဏ္ဍကို ဖြေဆိုပေးခဲ့သည်မှာ ကျေနပ်မှုမရှိကြောင်း ဦးညီလေးချမ်းက ပြောသည်။“ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းက လွှဲပြီး ကျေနပ်အားရမှု ရှိပါတယ်။ အခြေခံ လူတန်းစားတွေရဲ့ ဘဝက အရေးကြီးဆုံးပဲ။ ကဏ္ဍလေးဖြေသွားတာတော့ မတွေ့ဘူး။ စီမံကိန်းဝန်ကြီးက ဖြေသွားတာတော့ မပြည့်စုံဘူး။ အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက် မပါတော့မပြည့်စုံဘူးပဲ ပြောပါရစေ”ဟု ဦးညီလေးချမ်း က သျှမ်းသံတော် ဆင့် ကိုပြောသည်။
ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး နှင့် စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍမှာ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများက ပြန်လည်ဖြေကြားသွားတာ ပြည့်စုံမှု ရှိသော် လည်း စီးပွားရေးကဏ္ဍကို ပြည့်စုံစွာ ဖြေကြားခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း ဦးညီလေးချမ်း က ဆိုသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် သျှမ်းပြည် တဝှမ်းတွင် စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး ထိခိုက်မှုများရှိနေကြောင်း၊ ထိုထိခိုက်မှုကြောင့် သျှမ်းပြည် အစိုးရ အနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ အလွန် ဆောင်ရွက်မည့် အရာကိုသိလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မေးမြန်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဦးညီလေးချမ်းက ပြော သည်။
ကိုဗစ်ကာလအတွင်း သျှမ်းပြည်သို့ပြန်လာသည့် ထိုင်း၊ တရုတ် နိုင်ငံသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်သည့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ် သမား သိန်းချီရှိကြောင်း သိရသည်။ ထို ကိုဗစ်-၁၉ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါက သျှမ်းပြည် ဒေသခံများ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲ ကာ၊ ပြဿနာများစွာ ရင်ဆိုင်လာနိုင်ကြောင်းလည်း သျှမ်းပြည်သူများက ပြောဆိုလိုက်သည်။ ကိုဗစ် – ၁၉ ရောဂါကြောင့် မြန်မာပြည်တွင်း သာမက ကမ္ဘာတွင်လည်း စီးပွားရေး ကျဆင်းမှု သာမက ပြည်ပမှာလည်း စီးပွားရေးကြောင့် ကုမ္ပဏီများစွာ အကြပ်အတည်းဖြစ်ပြီး ဒေဝါလီ ခံခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/17246
ကချင်ပြည်နယ်၊ ပူတာအိုမြို့နယ်အတွင်းရှိ အခြေခံပညာသင်ကျောင်းများကို COVID-19 ကာလအတွင်း ပညာသင်ကြားရေး စနစ်များကို ပြောင်းလဲသင်ကြားရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု သိရသည်။
ပူတာအိုမြို့ရှိ၊ ကောင်ကထောင်ရပ်ကွက်ရှိ အထက်တန်းကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦးဆိုင်းခွန်က COVID-19 ကာလအတွင်း ပြောင်းလဲထားသည့် ပညာသင်ကြားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။“အထက်တန်းကို အရင် သင်မယ်၊ တစ်ခန်းမှာ အယောက် (၂၀) ထား သင်မယ်။ လူဦးရေများတဲ့ ကျောင်းတွေမှာဆိုရင် မနက်ပိုင်းနဲ့ ညနေပိုင်း သင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ တပတ်သင်ပြီး တပတ်ပြန်နား အဲ့လိုသင်သွားမယ်။ သင်ထားတဲ့စာတွေကို အိမ်စာအဖြစ် နားတဲ့ အပတ်မှာလုပ်ရမယ်။ (၉)တန်း၊ (၁၀)တန်း ကို အရင်သင်ကြည့်ပြီး အဆင်ပြေမှ မူလတန်း၊ အလယ်တန်းတွေကို ပြန် သင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်မပြေရင် ကျောင်း ပြန်ပိတ်မယ်။” ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့ မှစတင်၍ ၁၈ ရက်နေ့အထိ ၉ တန်း နှင့် ၁၀ တန်းတို့အား နာမည်စာရင်းများ စတင်ကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဟု ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးဆိုင်းခွန် က ဆက်ပြောသည်။
COVID-19 ကာလ ရောဂါတားဆီးကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် ယခုကဲ့သို့ ပြောင်းလဲစီစဉ်ရခြင်းဖြစ်ပြီး၊ နဝမ တန်းနှင့် ဒဿမ တန်း ကျောင်းသူ/သားများမှာ MASK များကို စနစ်တကျ သုံးတတ်ရန် သင်ကြားပေးရသည်မှာ လွယ်ကူသည့်အတွက် ၎င်း တို့အား ယခုကဲ့သို့ အရင်ဆုံး ကျောင်းဖွင့်ပေးရခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ ကျောင်းသူ/သားများအတွက် Mask (၂) ခုစီနှင့် Face Shield (၁) ခု စီကိုလည်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထောက်ပံ့ပေးရန် စီစဉ်ထားသည်ဟုလည်း သိရသည်။
ထို့အပြင် မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်း ကလေးငယ်များအတွက် ပထမအသုတ်အနေဖြင့် ကျောင်းစတက်ရမည့် နဝမတန်း နှင့် ဒဿမတန်း ကျောင်းသူ/သား နှင့် ဆရာ/ဆရာမများက COVID-19 ကာလအတွင်း စနစ်တကျ Mask များ တက်တတ်ရန် နှင့် လက်စနစ်တကျဆေးတတ်ရန် သင်ကြားပေးရန် စီစဉ်ထားသည်ဟုလည်း ပြောသည်။ ကျောင်းသားသစ်များအား တစ်ရက်ခြား ကျောင်းအပ်လက်ခံပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားဟောင်းများကို နေ့စဉ်လက်ခံပေးသွားမည်ဟု ကျောင်း အုပ်ကြီး က ပြောသည်။ ယခုကဲ့သို့စီစဉ်ရခြင်းသည် ကျောင်းအပ်ချိန် လူစုလူဝေးမဖြစ်စေရန် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ https:/ /www.bnionline.net/mm/news-73799
အိန္ဒိယ-မြန်မာ အမှတ် (၂) နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း ချင်းပြည်နယ် ရိခေါဒါရ်မြို့ အနီးတဝိုက်တွင် ဇွန် ၂၂ ရက်နံနက်ပိုင်း ၅ နာရီ ဝန်းကျင်ခန့်က အင်အားအသင့်အတင့်ရှိသည့် မြေငလျင်လှုပ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူနေအိမ်နှင့် အဆောက်အဦးများ ပျက်စီးမှုရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ မြေငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့် ရိခေါဒါရ်မြို့၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်ရှိ ရိပြည်ထောင်စုရိပ်သာ မျက်နှာကျက်အက်ကွဲ ကွာကျပျက်စီးမှု၊ ပြန်ကြာရေးနှင့်ပြည့်သူ့ဆက်ဆံ‌ရေးဌာနရုံး အဆောက်အဦးအရှေ့မျက်နှာစာ နံရံများအက်ကွဲကွာ ကျပျက် စီးမှု၊ ရိခေါဒါရ်မြို့ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်ရှိ ဦးထန်းအောင် နေအိမ် နှစ်ထပ်တိုက် ပင်မဆောင်နဲ့ကပ်လျက်တွင်ရှိသော ဝရံတာ၊ မီးဖိုဆောင်၊ ပန်းတင်ခုံများ အက်ကွဲပျက်စီးမှု၊ ဒေါ်ဇွန်ကိမ်း၏ နေအိမ် တစ်ထပ်တိုက် အတွင်းအိပ်ခန်းနံရံ၊ မီးဖိုချောင်၊ မီးဖိုခန်းလှေခါးအိမ်များအက်ကွဲပျက်စီးမှု၊ ဦးငွန်နယ်ကျဲအိုတို့ နေအိမ် နှစ်ထပ်တိုက် ဆောက်လုပ်ဆဲအတွင်းနံရံများ အက်ကွဲ ပျက်စီးခဲ့သည်ဟု ရိဒ်ခေါဒါရ်မြို့ ပြန်ဆက်ဦးစီးမှူး ဦး LalPeklawma ကပြောသည်။
“ထိခိုက်ပျက်စီးတာတော့ရှိတယ် မနေနိုင်လောက်အောင် ပျက်စီးတာတော့မရှိဘူး၊ အိမ်တွေက အက်တာရှိတယ် တစ်ချို့ နေရာမှာကျတော့ တော်တော်အက်ကွဲတယ် ရွှေ့ပြောင်းစရာတော့မလိုပါဘူး၊ ထိတ်လန့်ကြတယ်၊ ဒီလိုမျိုးမကြုံဖူးဘူးဆို တော့ ဒါပေမဲ့လူတွေထိခိုက်ပျက်ဆီးမှုတော့မရှိဘူး၊ ကျနော်သိသလောက်ဆိုရင်တော့ အဲလောက်ပြင်းအားကောင်းတာမျိုး တော့ မကြုံဖူးပါဘူး။ ဒီတစ်ခေါက်ပဲ၊ ရုံးတော့တက်လို့ရပါတယ်။ ရုံးက အက်ပဲအက်တာဆိုတော့ တက်လို့ရပါတယ်” ပြန်ဆက်ဦးစီးမှူး ဦး LalPeklawma ကပြောသည်။
လှုပ်ခတ်သွားသည့် မြေငလျင်နှင့်ပတ်သက်၍ ရိခေါဒါရ်မြို့တွင် နေထိုင်သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးကလည်း “ဒီနေ့မနက် ငလျင် လှုပ်တာတော့ အရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ် အိမ်ထဲက ဘီရိုတံခါးတွေ ပြုတ်ကျ မှန်တင်ခုံ မှန်လည်းကွဲ ဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှ မကြုံဖူးဘူး တစ်ချို့အိမ်တွေဆိုလည်း သိပ်နေလို့မရတော့လောက်ထိ ပျက်စီးတာတွေရှိတယ်”ဟု ပြောသည်။ အဆိုပါ မြေငလျင် လှုပ်ခတ်မှုကြောင့် တဖက် မီဇိုရမ်ပြည်နယ် ဇိုခေါထာရ်ကျေးရွာတွင်လည်း ဘာသာရေးအဆောက်အဦး တစ်ချို့ လည်း အနည်းငယ်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-73732
ရေးမြို့နယ်အတွင်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲရုံ ၁၁၀ ရုံရှိရာက လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲ၌ မဲရုံ ၁၇ ရုံ ထပ်မံတိုးမြှင့်ရန် လျာထားကြောင်း ရေးမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲထံက သိရသည်။ ရေးမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဌ ဦးညီသွေးက ” မဲရုံက အတိုးအလျော့ရှိနိုင်ပါသေးတယ်၊ လက်ရှိအနေနဲ့ကတော့ မဲရုံအရေအတွက်နဲ့ မဲရုံတည်နေရာ သတ်မှတ်လျာထားတာတွေ၊ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ပယ်ဖျက်တာတွေကတော့ လစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ် ” ဟု သံလွင်တိုင်းမ်ကို ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်အထိ ကောက်ခံရရှိသော မဲပေးခွင့်ရှိသူဦးရေ ၂၀၃၉၃၉ ဦးရှိပြီး ၂၁၀ဝ၀ဝ ကျော်ရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထား ကြောင်းနှင့် ယင်းတို့အထဲတွင် ပထမအကြိမ်မဲပေးမည့်သူ ၃၀ဝ၀ဝ ကျော် ပါဝင်လာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ”တပ်မဲရုံ ဆောင် ရွက်မှုအခြေအနေကတော့ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီဖြစ်စေဖို့ သက်ဆိုင်ရာတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့ ညှိနှိုင်း ဆဲဖြစ်ပါတယ် ” လို့ ဦးညီသွေးက ပြောကြားသည်။ ပြီးခဲ့သော ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်(၁)ဦး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁)ဦး အနိုင်ရရှိထားပြီး မွန်အမျိုးသားပါတီက အမျိုးသားလွတ်တော်(၁)ဦး ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁)ဦး အနိုင်ရရှိထားသည်။
ရေးမြို့နယ်အတွင်း ပါတီများအနေဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ၊ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ၊ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ၊ ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တီပါတီ စုစုပေါင်း ၇ ပါတီရှိကြောင်း ရေးမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲထံက သိရ သည်။ https://www.bnionli ne.net/mm/news-73787
အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုချက်ခြင်းရပ် ကမ်ပိန်းဦးဆောင်သူ လူငယ် ၂ ဦးကို ငြိမ်းစုစီ ပုဒ်မ-၁၉ နဲ့ ကျောက်ဖြူမြို့မ ရဲစခန်း မှာ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးအောင်မော်က တရားလိုပြုလုပ်အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့နယ် ၇ ခုနဲ့ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်တို့မှာ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတာ ၁ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဇွန် ၂၁ ရက်နေ့က ကန်ပိန်းပြု လုပ်ခဲ့ကြတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားစွဲခံရတာဖြစ်ပါတယ်။
အုန်းတောပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းဇအောင် က “ကျနော်တို့ကို မြို့နယ်ရဲစခန်းကနေပြီး စွဲတာပေါ့။ အင်တာနက်ပိတ်တာ ၁ နှစ်ပြည့်ဆိုပြီးတော့ ၃၆၅ ရက် No Internet ဆိုပြီးတော့ ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်ပြီးတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြ ပြီးတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တင်ကြတာပေါ့။ အဲဒါအပေါ်မှာ သူတို့က ဘယ်လိုမြင်လည်းတော့မသိဘူး၊ ငြိမ်းစုစီပုဒ်မ-၁၉နဲ့ ငြိတယ် ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့ကိုဆင့်ခေါ်ပြီး တရားစွဲတယ်လို့ပြောတယ်။ သူတို့ပြောတာကတော့ ဗဟိုက အထက်ကစွဲခိုင်းတယ်လို့ ပြောတာပဲ။”လို့ ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ သန္တာရင်သွီး မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဌ ကိုနေစိုးခိုင်က “ကျနော်တို့ လုပ်တာကလည်း အင်တာနက် ပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးနဲ့လုပ်တာ၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ အခြေခံကျတဲ့ သတင်းအချက်အလက်မျှဝေမှု၊ ပွင့်လင်းမြင် သာမှု၊ လူသားတိုင်း တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိဖို့ အင်တာနက်ကိုတောင်းဆိုကြတာ။ ကျနော်တို့ ရခိုင်ပြည်မှာဆိုရင် ကိုဗစ် လည်းဖြစ်နေတယ်၊ စစ်လည်းဖြစ်နေတယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာ ရခိုင်ပြည်သူတွေ သတင်းအချက်အလက်ကို အချိန်မီရဖို့အတွက် အင်တာနက် ဖွင့်ပေးဖို့လိုတဲ့အကြောင်း၊ အင်တာနက်ပိတ်ထားတာလည်း တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အတွက် အင်တာနက်ကို ပြန်ဖွင့် ပေးပါဆိုပြီး ကျနော်တို့ တောင်းဆိုကြတာပါ။ ဒါလေးကို ငြိမ်းစုစီနဲ့ငြိတယ်ဆိုတော့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီးက ဘယ်လိုဖြစ်သွား ပြီလဲဆိုတာလည်း ပြန်ပြီးတော့တောင် သုံးသပ်ရမလိုဖြစ်သွားပြီ” လို့ ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ် ၇ ခုနဲ့ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်မှာ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာ ဇွန် ၂၁ ရက်နေ့က တစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့် အင်တာနက်ပြန်လည်ဖွင့်ပေးဖို့ကို ရခိုင်ပြည်နယ် ၁၇ မြို့နယ်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ အပါအဝင် မြို့ကြီးတွေမှာ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းကာ ကမ်ပိန်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကမ်ပိန်းပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ဇွန် ၂၁ ရက်နေ့ ညနေက ရမ်းဗြဲမြို့နယ်က လူငယ် ၁ ဦးကို ငြိမ်းစုစီ ပုဒ်မ-၁၉နဲ့ အမှုဖွင့်လှစ်ခံခဲ့ရသလို ရန်ကုန်မြို့မှာလည်း ကမ်ပိန်း ဦးဆောင်သူတွေကိုလည်း ငြိမ်းစုစီဥပဒေနဲ့ တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/396028
၂၁။ ဖားကန့်ဒေသအတွင်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများက မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်လာရောက်ကြသော်လည်း မူးယစ်ဆေးဝါး အန္တရာယ်နှင့်လုံခြုံမှုမရှိသောလုပ်ငန်းခွင်များကြောင့် ဒုက္ခမျိုးစုံကြုံတွေ့နေကြကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြား
ဖားကန့်ဒေသအတွင်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများက မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် လာရောက်ကြသော်လည်း မူးယစ်ဆေးဝါး အန္တရာယ်နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိသော လုပ်ငန်းခွင် အခြေအနေများကြောင့် ဒုက္ခမျိုးစုံ ကြုံတွေ့နေကြကြောင်း လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက ပြောကြားသည်။
ဇွန် ၂၂ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ Video Conferencing ဖြင့် ပြုလုပ်သည့် ဖားကန့်ရတနာမြေရှိ ဒေသခံများနှင့် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများဘဝ ဘေးကင်း လုံခြုံစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် “ဖားကန့်ဒေသရှိ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ပြန်လည်ထူထောင် ရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့”၏ (၈) ကြိမ်မြောက်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး၌ အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီးက ယင်းကဲ့သို့ ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
အစည်းအဝေး၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက ရတနာနယ်မြေ ဖြစ်သည့်အတွက် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ မြေယာစီမံခန့်ခွဲရေးသည်လည်း အရေးကြီးကြောင်း၊ ဖားကန့်ဒေသအတွင်းသို့ ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများသည် မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်လာရောက်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း မူးယစ်ဆေးဝါး အန္တရာယ် နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိသော လုပ်ငန်းခွင် အခြေအနေများကြောင့် ဒုက္ခမျိုးစုံ ကြုံတွေ့နေကြရကြောင်း၊ ဘေးကင်းလုံခြုံ သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ဆောင်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို မဖြစ်မနေဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင် အစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ၁၆ ချက် ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဆောင်ရွက်ဆဲ အနေဖြင့် အချက် ၁၃ ချက်နှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးအနေဖြင့် သုံးချက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်သည့် လုပ်ငန်းများသည်လည်း ပြီးပြတ်အောင် ဆောင်ရွက်၍မရနိုင်သေးသည့် လုပ်ငန်းရပ်များဖြစ်ပြီး အချိန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ လုပ်ငန်း အများ စုသည် လုံခြုံရေးနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးတို့အပေါ် မူတည်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဖားကန့်ဒေသအတွင်းရှိ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်နှင့်ရှစ်လခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ပြန် လည်ထူထောင်ရေးဟု ဆိုသော်လည်း ဖားကန့်ဒေသ တစ်ခုလုံးအတွက် အရေးကြီးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်မှုများကို သုံးသပ်ကြည့်ရာတွင် ကောင်းသောအရွေ့ များစွာရှိကြောင်း၊ ရေရှည်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဖားကန့်ဒေသ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လုပ်ငန်း အဖွဲ့ခွဲခြောက်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ အရေးအကြီးဆုံး ကိစ္စသည် လုံခြုံရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဖြစ် ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပြောကြားသည်။ https://news-eleven.com/article/179751
သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့လယ်ခေါင်တွင်တည်ရှိသည့် မန်ဆူဈေး နာမည်ကို “ ရွှေချမ်းမြေ့” ဆိုင်းဘုတ်လာတင် သည့်အပေါ် ဒေသခံများ ကန့်ကွက်ခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
လားရှိုးမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေး ဌာနပိုင် မန်ဆူဈေး၊ ဈေးအကျိုးဆောင် ဥက္ကဌ ဦးမောင်ငယ် ဦးစီးပြီး ဈေးသူ၊ ဈေးသား (၃၃၀) ဦး တို့ မှ မန်ဆူဈေး အား “ ရွှေချမ်းမြေ့” ဈေးအဖြစ် အမည်ပြောင်းပေးရန် တင်ပြသည့်အတွက် ယမန်နေ့ (ဇွန် ၂၂) ရက်နေ့တွင် မန်ဆူဈေး ကို “ ရွှေချမ်းမြေ့” ဈေးဟု ဆိုင်းဘုတ်တင်ခဲ့ကြောင်း လားရှိုးမြို့စည်ပင်သာယာရေး ဖေ့စ်ဘုတ်တွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။“ရွှေချမ်းမြေ့ဈေး”ဟု ဆိုင်းဘုတ်တင်ပြီးနောက် လားရှိုးဒေသခံများက ကန့်ကွက်မှုများ ပြုလုပ် ကြရာ (ဇွန် ၂၂ ရက် ညနေ ၄ နာရီဝန်းကျင်တွင် ဆိုင်းဘုတ်ကို စည်ပင်သာယာမှပြန်လည်ဖြုတ်ပေးခဲ့ကြောင်း လားရှိုးဒေသခံ လည်းဖြစ် ၊ သျှမ်းလူငယ်အဖွဲ့ ဥက္ကဌလည်းဖြစ်သည့် စိုင်းဟန် က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကို ပြောသည်။
လားရှိုးမြို့လယ်ခေါင်တွင် တည်ရှိသည့် မန်ဆူဈေးနာမည် သည် မန်ဆူဘုရားအနီးတွင် တည်ရှိပြီး၊ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းများ စွာကတည်းက တည်ရှိသည့် နာမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ သျှမ်းနာမည်လည်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုနာမည်ကို သက်ဆိုင်ရာကပြောင်းလဲ ချင်တိုင်း ပြောင်းလဲခွင့်မရှိကြောင်းလည်း လားရှိုးဒေသခံများက ပြောဆိုလိုက်သည်။ ထို့အပြင် သျှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော် အမတ်များကလည်း မန်ဆူဈေးနာမည်ကိုသာ ပြန်လည်သုံးစွဲရန် လက်မှတ်ကောက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရထံတင်ပြသွား မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။“ သျှမ်းပြည် လွှတ်တော်အမတ်တွေကို လက်မှတ်ကောက်သွားမယ်။ နဂိုနာမည် “ မန်ဆူဈေး” ဖြစ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုမယ်”ဟု သိန္နီမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နန်းခင်ထားရီ က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကို ပြောသည်။ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းများစွာက မန်ဆူဈေးသည် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ရောင်းသည့်ဈေးဖြစ်သည့်အပြင် ဘော်လုံးကွင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုဘော်လုံးကွင်းပြင်ကို ဖျက်ကာ မန်ဆူကားဂိတ်၊ မန်ဆူဈေး နှင့် မန်ဆူပလာဆာ ဆိုပြီး ခေတ် အဆက်ဆက်မြေခွဲရောင်းချလာကြသည်ဟုလည်း လားရှိုးဒေသခံများပြောပြချက်အရသိရသည်။
လားရှိုး စည်ပင်သာယာအနေဖြင့် ဈေးနာမည်ကို မိမိသဘောဖြင့် ပြောင်းလဲနေခြင်းသည် လားရှိုးဒေသခံများ၊ သျှမ်းလူထု များ၊ သျှမ်းစာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်သည့် သျှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီများ နှင့်လားရှိုးမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များကို ဥပက္ခာပြုလိုက်သည့် သဘောဖြစ်သည်ဟုလည်း လားရှိုး သျှမ်းလူငယ်များက ပြောဆိုလိုက်သည်။ https://b urmese.shannews.org/archives/ 17
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းမြို့၊ အရှေ့စု ၆ လမ်း၊ အိမ်အမှတ် ၄၇၀ မှာ မူးယစ်ဆေးစွဲနေတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးက မိခင်ထံက ငွေ တောင်းမရတဲ့အတွက် လက်သီးဖြင့်ထိုးရာ မိခင်ဖြစ်သူ သေဆုံးသွားတယ်လို့ မိုးညှင်းမြို့မရဲစခန်းက သိရပါတယ်။
ဇွန် ၂၄ ရက် ညနေ ၂ နာရီခွဲလောက်က မိုးညှင်းမြို့၊ မိုးဒါးစုရပ်ကွက်နေ မအေးနုက မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်အဲလှအောင် ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို သွားရောက်ကြည့်ရှုရာ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ အိပ်ခန်းတံခါးပွင့်နေတဲ့အတွက် ဝင်သွားစဉ် တံခါးပေါက် ဝင်ဝင်ချင်းမြေကြီးပေါ်မှာ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ လဲကျသေဆုံးနေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အနီးနားမှာလည်း ဓာတ်ဗူးတစ်လုံးကွဲကျ နေတာကို တွေ့ရတဲ့အတွက် မိခင်နဲ့အတူနေတဲ့ မောင်ဖြစ်သူ ဇော်ဇော်ဦးကို နေအိမ်မှာ ရှာဖွေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဇော်ဇော်ဦးကို အိပ်ခန်းတွင်းမှာ အိပ်နေတာတွေ့ရလို့ နှိုးလိုက်ရာမှာ အော်တဲ့အတွက် အိမ်နီးချင်းတွေကို အော်ဟစ်အကူ အညီတောင်းရာ ရာအိမ်မှူးတွေနဲ့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့က ရဲစခန်းကို အကြောင်းကြားပေးခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ နယ် ထိန်းခေါင်းဆောင် ဒုရဲအုပ်ကျော်မင်းနိုင် ထံသို့ အရှေ့စုရာအိမ်မှူး ဦးမြင့်သိန်းက လူသတ်မှုဖြစ်ပွားကြောင်းဖုန်းနဲ့ သတင်း ပေးချက်အရ ရဲတပ်ဖွဲ့က အခင်းဖြစ်ရာနေရာကို သွားရောက် ခဲ့ပါတယ်။
အိမ်နီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကို မေးမြန်းရာမှာ ဇော်ဇော်ဦးက မိခင်ဖြစ်သူကို အမြဲထိုးကြိတ်နေလို့ မိခင်ဖြစ်သူ မကြာခဏထွက် ပြေးတာမြင်ရကြောင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွန်အကျွံသုံးစွဲပြီး မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်အဲလှအောင် ထံမှ ဆေးဖိုးတောင်းလေ့ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ဇော်ဇော်ဦး (အသက် ၃၁ နှစ်)ကို အမဖြစ်သူ မအေးနုက တရားလိုပြုလုပ်ကာ အမှုကြီး အမှတ်စဉ်(၄/၂၀၂၀) (ပ)၇၈/၂၀၂၀ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂ အရ မိုးညှင်းမြို့မရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archi ves/396169
မူဆယ်-ရွှေလီတွင် အကောင်အထည်ဖော်မည့် မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ် စီးပွားရေးဇုန်ဧရိယာ၌ မြန်မာဘက်အခြမ်းမှ မူဆယ် အပါအဝင် နမ့်ဖတ်ကာ-နမ့်ခမ်း-ကြူကုတ် (ပန်ဆိုင်း) ဒေသတို့ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းမင်း က ပြောသည်။ ၎င်းက “နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် စီးပွားရေးဇုန် တည်ထောင်ဖို့အတွက် တရုတ်နဲ့ Framework agreement ရေးထိုးဖို့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အဓိကကျတဲ့ ၂ ဘက်ဇုန်နယ် မြေ ဧရိယာ သတ်မှတ်ရေးအတွက် မကြာခင်မှာ ကွင်းဆင်းတိုင်းတာမှုလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်”ဟု ဇွန် ၂၄ ရက်က ပြု လုပ်ခဲ့သော စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အစိုးရ စတုတ္ထတနှစ်တာကာလ ဆောင်ရွက်ချက်များ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ထိုသို့ပြောကြားခဲ့သည်။
မူဆယ်-ရွှေလီနယ်စပ်စီးပွားရေးဇုန်အတွက် မြန်မာဘက်ခြမ်းမှ နမ့်ဖတ်ကာ-နမ့်ခမ်း-ကြူကုတ်(ပန်ဆိုင်း)နေရာများတွင် ပါဝင် မည်ဖြစ်ပြီး ဇုန်အတွက်ကိုသြဒိနိတ်မြေပုံဖြင့် အတည်ပြုတည်နေရာ အကျယ်အဝန်းသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် မြေပြင်ကွင်း ဆင်းတိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းအား တလအတွင်း ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ ထိုသို့ ဇုန်နယ်မြေလျာထားသတ်မှတ်ပြီးပါက ဖြစ်နိုင်ခြေ ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း (Feasibility Study) လုပ်ငန်း စတင်မည်ဖြစ်ကာ FS ရမှသာ တဖက်တရုတ်နိုင်ငံမှ ဇုန်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအလိုက် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိအောင် နှစ်နိုင်ငံပြန်လည်ညှိနှိုင်းပြီး မြန်မာဘက်အခြမ်းအတွက် Developer ကုမ္ပဏီများရွေးချယ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းမင်းက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တွင် ပြောကြားသည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းအား နှစ်နိုင်ငံအစိုးရနားလည်မှုစာချွန်လွှာရေးထိုးပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံဘက်အခြမ်းတွင် နယ်စပ် စီးပွားရေး ဇုန်များ တည်ဆောက်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်းများ၊ ၂၁ ရာစုပိုးလမ်းမစီမံကိန်းချေးငွေများဖြင့် တရုတ် လုပ်ငန်းရှင်အများစု က နယ်စပ်ဧရိယာများ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိစပ်နေသော ယူနန်ပြည်နယ်တွင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ စတင်တည် ဆောက်မှုများရှိလာပြီဟု မူဆယ်-နမ့်ခမ်းဒေသရှိ ကုန်သည်ကြီးများက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။ မူဆယ်-နမ့်ခမ်းကုန်သည် ကြီးများအသင်း၏ တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းအောင်ခန့်က “စီးပွားရေး ဇုန်တွေလုပ်တာ ရည်ရွယ်ချက်တွေက ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံသား အကျိုးစီးပွား အကာအကွယ်ပေးမဲ့ မူတွေချမှတ်ပြီးဖော်ဆောင်ဖို့ လိုပါ တယ်”ဟု ပြောသည်။
တဖက်နိုင်ငံက ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများရှိသော်လည်း မြန်မာဘက်အခြမ်းတွင် အစိုးရ၏ မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာချပြမှုအားနည်းခြင်း၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ လက်လှမ်းမမီခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံပိုင်း၊ ငွေကြေးအရင်းအနှီးနှင့် နည်း ပညာအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် မိမိနိုင်ငံအတွင်း လာရောက်လုပ်ကိုင်သူများက အကျိုးစီးပွား အသာရသွားမည်ကို ဒေသခံ လုပ်ငန်း ရှင်အများစုစိုးရိမ်နေကြသည်။ တရုတ်မြန်မာနယ်စပ် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဇုန်များ အကောင်အထည်ဖော် ရေးအတွက် ဗဟိုကော်မတီတရပ်ဖွဲ့စည်းထားပြီး စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဥက္ကဌ အဖြစ် တာဝန်ယူကာ နယ်စပ် စီးပွားရေးဇုန်နှင့် ဆက်စပ်သည့် တာဝန်ရှိဌာနများမှ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အရာရှိကြီးများလည်း ပါဝင် ပြီး ယခုလ ၁၂ ရက် မြန်မာ-တရုတ်နှစ်နိုင်ငံ ဒေသအဆင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး Video Conferencing ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/20 20/06/25/225294.html
၂၅။ ရသေ့တောင်မြို့အနီးပစ်ခတ်မှုဖြစ်၍ ရွှေပါရမီဘုန်းကြီးကျောင်းမှ မသန်စွမ်းသူစစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသားတစ်ဦး ထိခိုက် ဒဏ်ရာရ
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရသေ့တောင်မြို့အနီးတွင် ဇွန်လ ၂၄ ရက်ညနေ ၄ နာရီကျော်က ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ရွှေပါရမီဘုန်းကြီး ကျောင်းတွင် လာရောက်ခိုလှုံနေသူ စစ်ဘေးရှောင် ဆွံအ၊ နားမကြား၊မျက်မမြင် အမျိုးသားတစ်ဦးကို လက်နက်ကြီးကျည် ထိမှန်သွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ လက်နက်ကြီးကျည်ထိမှန်သူမှာ ရသေ့တောင်မြို့နယ် ညောင်ပင်လှကျေးရွာမှ ရွှေပါရမီကျောင်းတွင် စစ်ဘေးရှောင်နေသူ ဦးမောင်အေးညွှန့် (၅၅ )နှစ်ဖြစ်သည်။
ရွှေပါရမီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းထိုင် ဆရာတော်က “ ကျောင်းထဲက စစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ တဲအိမ်အဆောင် အောက်မှာ ဝပ် နေကြတဲ့အချိန်မှာထိတာ။ ပေါက်ကွဲသံနှစ်ချက်ကြားတယ်။ နောက်တော့ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ ပစ်တာ။ သူ့ အမေ ငိုပြီးပြေးလာပြောမှသိတာ။ ဆရာတော်တို့လည်း ချက်ချင်းသွားကြည့်လို့မရဘူး။ သေနတ်ပစ်နေတော့ အကုန်ဝပ်နေ ကြရတာ။ ဘယ်ခြေထောက် ဒူးအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကြေသွားတယ်။ အခုဆေးရုံကားရောက်နေလို့ ကားပေါ်တင်နေတယ်။ အဲဒီနားမှာ စစ်သားတွေ ကင်းပုန်းဝပ်ပြီး ရှိနေသေးတယ်” ဟု ညနေ ၅ နာရီခန့်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းစဉ် မိန့်ကြားသည်။
ဒဏ်ရာ ရရှိသွားသူ ဦးမောင်အေးညွှန့်၏ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ဦးစိန်ညွှန့်က “ သူက နားလည်းမကြားဘူး၊ စကားလည်းမပြော တတ်ဘူး။ မျက်စိလည်းမမြင်ဘူး။ ကျွန်မတို့နဲ့ နေရတာ။ မိသားစုဆိုလို့ ကျွန်မတို့ပါပဲ။ တဲအိမ်အောက်မှာ ဝပ်နေရာမှာ အိမ်ခေါင်မိုးကို ဖောက်ပြီးလာထိတာ။ ခြေထောက်ကိုထိတယ်။ ဘယ်လိုခံစားရမလဲပြောမပြတတ်အောင်ပါပဲ”ဟု ပြော သည်။ အဆိုပါ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားသည့် နေရာအနီးတွင် တပ်ရင်းအမှတ် (၅၃၈) တည်ရှိပြီး ပြားချောင်းကြီး ကျေးရွာဘက်သို့ စစ်ကြောင်း တစ်ခုဖြတ်သန်းချိန်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ရသေ့တောင်မြို့ပေါ်နှင့် အနီးအနား ကျေးရွာများသို့ လက်နက်ကြီးများ ကျရောက်ပေါက်ကွဲမှုများရှိခဲ့သည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။ ညနေ ၆ နာရီခန့်က ရသေ့တောင်မြို့ပေါ်မှ လူမှုကူညီရေး လုပ်ဆောင်နေသူ ကိုဘက္ကာသို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရာ လူနာအား ရသေ့တောင် ဆေးရုံကို ပို့ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြော ကြားသည်။
ရသေ့တောင်မြို့နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်လတ်ကလည်း “ ရသေ့တောင်မြို့ထဲက သိပ်မဝေး ဘူး။ မြို့အထွက် တံတားနားမှာ ပစ်နေကြတာ။ ရွှေပါရမီကျောင်းမှာ စစ်ဘေးရှောင် တစ်ယောက်ထိတယ်။ အခု လူနာတင် ကားနဲ့ ယူလာလို့မြို့ပေါ်က ဆေးရုံရောက်နေပြီ”ဟု အတည်ပြုပြောသည်။ ရွေပါရမီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် စစ်ဘေး ရှောင် လူဦးရေ ၁၇ဝဝ ခန့်ရှိခိုလှုံနေကြကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းအား နိရဉ္စရာသတင်းဌာနမှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ဆက်သွယ်မှု မရရှိသေး ပါ။ https://www.bnionline.net/mm/news-73778
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင် မူဆယ်မြို့နယ် မူဆယ်(၁၀၅)မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်အတွင်း မြောက်ဘက်ရှိ ကုန်သွယ် ရေးဇုန် လုံခြုံရေးတာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော နမ်းခမ်းမြို့မ ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ နေထိုင်သည့် အဆောက်အဦးအား ဆိုင်ကယ်စီးလာ‌သော လူသုံးဦးက ဇွန်လ ၂၅ ရက် နေ့လည် ၂ နာရီ ၁၀ မိနစ်ခန့်က သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ထွက်‌ပြေးမှု ဖြစ် ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်စဉ်မှာ မူဆယ် (၁၀၅) မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်အတွင်း မြောက်ဘက်ရှိ ကုန်သွယ်ရေးဇုန် လုံခြုံရေးတာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော နမ်းခမ်းမြို့မ ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ နေထိုင်သည့် အဆောက်အဦးအား ဇွန်လ ၂၅ ရက် နေ့လည် ၂ နာရီ ၁၀ မိနစ်ခန့်က မူဆယ် လားရှိုး ပန ၁၀၅ မိုင် – ပန်ဆိုင်း သွား ကားလမ်း ချိတ်ဆက်ထား‌သော အထက (ခွဲ) ၁၀၅ မိုင် ဘေးလမ်းမပေါ်မှ အမည်မသိ ဆိုင်ကယ်စီးလာသော လူသုံးဦးက ပန်ဆိုင်းမောင်တံ ကုန်သွယ်ရေးဇုန် ရှောင်ကွင်းလမ်း ကြံတောထဲမှ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ထွက်‌ပြေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အဆောက်အဦးအတွင်းရှိ ခွေးတစ်ကောင် သေဆုံးခဲ့ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူနှင့် အခြား ပြည်သူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှု မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ နယ်မြေခံတပ်ရင်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်ရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် နမ်းခမ်းမြို့မ ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက အခင်းဖြစ်နေရာ အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လုံခြုံရေးတိုးမြှင့် ချထားလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ https://new s-eleven.com/article/179979
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ မြန်မာဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုဖြစ်သော မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းတွင်းသို့ (ဇွန်လ ၂၃ ရက်) နံနက်ပိုင်း တွင် ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ရှောင်တခင် ဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ရာ မိသားစုနေ အိမ်တစ်အိမ်တွင် စိတ်ကြွဆေးပြား ထောင်ချီ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း စခန်းတာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
ထိုင်းတပ်မတော်၊ ရဲနှင့် စခန်းလုံခြုံရေး စသည့်ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ မယ်လဒုက္ခသည်စခန်း၏ ဇုန် (B-5B) ရှိ အိမ်နံ ပါတ်(၉၂)မှ အိမ်ရှင် နော်မုမု ဆိုသူ၏ နေအိမ်သို့ အနံ့ခံခွေးများဖြင့် ရှောင်တခင် လာရောက်စစ်ဆေးရာ စိတ်ကြွဆေးပြားထုပ်များကို ဖမ်း ဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ဇုန်(B) လုံခြုံရေးတာဝန်ခံ စောရွှေဝင်းမြိုင်က ပြောသည်။ ၎င်းက “စစ်သားတွေ၊ ရဲတွေ စခန်းလုံခြုံရေးအ ဖွဲ့တွေက ကျနော်တို့ ဒီကရပ်ကွက်တာဝန်ရှိသူတွေကို ဘာမှအကြောင်းမကြားဘဲ ဝင်လာပြီး စစ်ဆေးတာ။ အဲ့မှာ (၅)ထုပ် အ ရင်မိတယ်။ အဲ့ဒါပြီးတော့ စခန်းလုံခြုံရေးက ကျနော်တို့ကို အကြောင်းကြားပြီး ထပ်သွားရှာတော့ အလုံးရေ (၂,၄၀၀) ထပ်မိ တယ်။”ဟု ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။ ထိုသို့ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးရာတွင် အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူမှာ ထွက် ပြေးတိမ်းရှောင်သွားပြီး နေအိမ်ရှိကျန်ရှိသည့် မိသားစုဝင်(၄) ဦးဖြစ်သည့် အဘွားအိုတစ်ဦး၊ ညီမတော်စပ်သူတစ်ဦး၊ အဒေါ် တော်စပ်သူတစ်ဦးနှင့် အမျိုးသားတစ်ဦးကို ခေတ္တယာယီခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း စောရွှေဝင်းမြိုင် က ဆက်ပြောသည်။
ထို့နောက် သတင်းအရ ၎င်းမူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူမှာ အသက် (၂၇) နှစ်အရွယ် စောအဲငဲ ဆိုသူဖြစ်ပြီး ၎င်းနှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်သူ တစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိ၍ ကာယကံရှင်ကို လက်ရှိအချိန်ထိ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း မရှိသေးဘဲ ၎င်းမိခင်ဖြစ်သူမှ ဖုန်းဆက်ခေါ်သော်လည်း ပြန်လာအဖမ်းခံခြင်းမရှိကြောင်း မယ်လစခန်း၏ လုံခြုံရေး ဒု-တာဝန်ခံ စောအယ်မွီး က အတည်ပြုသည်။ ၎င်းက “သူအမေက ပြောလိုက်တယ်။ သားရေ ပြန်လာခဲ့ပေါ့။ ဒီမှာသူများငါတို့ကို ဖမ်းနေ ပြီးပေါ့။ သား ပြန်လာမှ ဒီကဖမ်းထားတဲ့သူတွေ လွှတ်ပေးမယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကာယကံရှင်က သေသေရှင်ရှင် မပြန်လာဘူးတဲ့။ အခု သူနေတဲ့ နေရာကိုသူများ GPS နဲ့ လိုက်တာ နေရာကို သိနေပြီ။ အဲ့ဒါ သူကပြောသေးတယ်။ လာဖမ်းရဲရင် လာဖမ်းပေါ့။ သူ့မှာက လက်နက်ရှိနေတယ်” ဟု ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။
မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး စစ်ဆေးမှုကို ထိုင်းအာဏာပိုင်များမှ တစ်လတစ်ခါ စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်မှု များ ပြုလျက်ရှိကာ မကြာခဏ ဖမ်းဆီးရမိမှုများရှိပြီး လက်ရှိ ဖမ်းဆီးရမှုသည် သတင်းအရ လာရောက်ဖမ်းဆီးသည့် ပုံစံဖြစ် သလို ပမာဏ အများဆုံး ဖမ်းဆီးရမှုလည်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%99% e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%9 c%e1%80%92%e1%8
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် ကောင်းခါးနဲ့ လွယ်ခမ်ကျေးရွာ အတွင်းက ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ချက်လုပ် တာမှာအသုံးပြုတဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေထဲကအချို့ကို ကွတ်ခိုင်မြို့မှာ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းခါး နဲ့ လွယ်ခန်ကျေးရွာကနေ အခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလကနေ မေလ ၁ ရက်နေ့အထိ မူးယစ်ဆေးနဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ပေါင်း တစ်ရာကျော်ကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးတွေနဲ့အတူ အမျိုးသား၂၉ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၄ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၃၃ ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိထားပြီး ကျန် ၉၇ ဦးကတော့ တိမ်းရှောင်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကား ၂၁ စီး၊ ဆိုင်ကယ်တစ်စီး၊ လက်နက်မျိုးစုံ ၈၆ လက်နက်ခဲယမ်းမျိုးစုံတို့ကိုပါ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာပါ။
အခုဖျက်ဆီးတဲ့ မူးယစ်ဆေးနဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေဟာ တပ်မတော်လက်အောက်ခံ ကောင်းခါးပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ထိန်းချုပ် နယ် မြေထဲမှာ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီး တပ်မတော်က လက်နက်ပြန်အပ်ခိုင်းခဲ့သလို လွယ်ခမ် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အချို့ ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ အမည်မဖော်လိုတဲ့ကောင်းခါးပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့အရာရှိတစ်ဦးက RFA ကိုပြောထားပါတယ်။
ကွတ်ခိုင်မှာ ဖျက်ဆီးတဲ့ မူးယစ်ဆေးနဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေဟာ လားရှိုးကို သယ်ဖို့ခက်ခဲလို့ ကွတ်ခိုင်မှာ ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ် ပြီး ကျန်နေတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတော့ကိုတော့ လာမယ့် ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် ၃၃ ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးနေ့မှာ လားရှိုးမြို့မှာ ထပ်မံဖျက်ဆီးမှာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၂၀ နီး ပါး တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ရှမ်းပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ကွတ်ခိုင်ဒေသမှာ လူငယ်တွေအများစု မူးယစ် သားကောင်ဖြစ်နေရပြီး ရာဘဆေးပြားတွေကတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ ဝယ်လို့ရနေတုန်းဖြစ်တယ်လို့ ကွတ်ခိုင်မြို့ တအာင်း စာပေယာဉ်ကျေးမှု ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းအောင်က ပြောပါတယ်။ ၂၀၂၀ အတွင်း ရှမ်းပြည်နယ်မှာ မူးယစ်ဆေး ဖမ်းဆီးရမိမှုဟာ အရင်နှစ်ထက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ငါးသန်းကျော်အထိ ပိုမိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း ဒု-ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်သူဇော်က ပြောပါတယ်။
ဇွန်လ၂၆ ရက်နေ့မှာ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့မှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၂၂၈.၈) သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး နဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်း ၂၉ မျိုးကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှာဖြစ်သလို တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအနေနဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၃၅ သန်း နီးပါးရှိ မူးယစ်ဆေးနဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကို လာမယ့် ဇွန် လ၂၆ ရက် နေ့မှာ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှာ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/destroying-the-making-drugthingsinkutkai06232020074424.html
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတွင် ကိုဗစ် – ၁၉ သံသယ စောင့်ကြည့်လူနာ ၇ ဦး ရှိကြောင်း စုံစမ်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါ သံသယစောင့်ကြည့်လူနာ ၇ ဦး သည် သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံး ၊ ဟဲဟိုး ၊ လွိုင်လင်၊ ကလော ၊ ကွန်ဟိန်း နှင့် စဝ်စံထွန်း ဆေးရုံတို့တွင် အသီးသီး တက်ရောက် ဆေးကုသမှု ခံယူနေကြောင်း ပြည်နယ် အထူးရောဂါ နှိမ်နင်းရေး လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ နှင်းအိဖြူ က ပြောသည်။
“စောင့်ကြည့်လူနာ ဓါတ်ခွဲနမူနာ စစ်ဆေးမယ့်သူက ၂ ယောက်ရှိတယ်။ စစ်ဆေးပြီးသား သူက ၅ ယောက်ရှိတယ်။ စုစု ပေါင်း ၇ ယောက်”ဟု ဒေါက်တာနှင်းအိဖြူ က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။ သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတွင် ကိုဗစ် အတည် ပြု လူနာ ၄ ဦး ရှိသည့် အနက် ၃ ဦး သည် ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့် ရကြောင်း သိရသည်။
မေ ၂၇ ရက်မှ ဇွန် ၂၄ ရက်နေ့ထိ ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီဘက်မှ သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား (၁၆၄၇) ဦး ရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archive s/17255
၁။ RCSS နှငျ့ TNLA စဈရေးတငျးမာမှုကွောငျ့ နမ်မတူမွို့နယျ စဈရှောငျ ၂၀ဝ ကြျောရှိ
၂။ ရခိုငျစဈဘေးဒုက်ခသညျတှေ စားနပျရိက်ခာ ပွတျလတျနေ
၃။ KNU ၏ ကိုဗဈ စောငျ့ကွညျ့ရေးစခနျးတှငျ စားနပျရိက်ခာ လိုအပျခကျြရှိနေ
၄။ ရေးမွို့နယျ တောငျပိုငျး၌ ခွံသမားတဈဦး သနေတျပဈခံထိသဖွငျ့ မျောလမွိုငျ ဆေးရုံတှငျ ကုသခံရ
၅။ ရှေး/ကျောအား တငျပွဆှေးနှေးရနျ အခကျြမြား တိုငျးရငျးသားပါတီမြား ပွငျဆငျ
၆။ ဖားကနျ့ဒသေတှငျ မွပွေိုမှုကွောငျ့ သုံးဦးသဆေုံးပွီး ခွောကျဦးဒဏျရာရရှိ ပြောကျဆုံးသူမြားကို ရှာဖှနေဆေဲဖွဈ
၇။ မော့ကနငျကြေးရှာတှငျ နအေိမျ ၁၈ လုံးကြျော မီးလောငျသဖွငျ့ အိမျထောငျစု ၂၇ စုဘေးသငျ့ခံရ
၈။ နမျ့ခမျး ဒသေခံမြားပိုငျ ထငျးစိုကျခငျး (၉၇) ဧက ပွနျလှဲပွောငျးပေးမညျ ဟုဆို
၉။ ကရငျပွညျနယျတှငျ ဆန်ဒမဲပေးခှငျ့ရှိသူ ၂ သိနျးနီးပါးတိုးလာ
၁၀။ ကရငျနီတောငျသူ ၂၂ ဦးအပျေါ ပွဈဒဏျထပျတိုးပေးရနျ တပျမတျောက တရားရုံးတှငျ လြှောကျထား
၁၁။ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှု မခံယူဘဲ အျောဟဈဆူပူမှုပွုလုပျသူအား ထောငျဒဏျ ၆ လ အမိနျ့ခြ
၁၂။ တပျမတျောက ဆကျသှယျရေးလမျးကွောငျးပိတျဆို့၍ ကြေးရှာ (၄၀) ကြျော ဆနျပွတျလပျနေ
၁၃။ ရခိုငျမှာ အငျတာနကျပွနျဖှငျ့ပေးဖို့ မရှိသေးဟု တပျမတျောပွောကွား
၁၄။ MCL ဘိလပျစကျရုံမှ ကြောကျမိုငျးခှဲသညျ့လုပျငနျးရပျဆိုငျး
၁၅။ ရဖွေူမွို့နယျ သုံးလောငျးပွိုငျလူသတျတရားခံဖမျးဆီးရမိ၊ မူးယဈဆေးဝါးသုံးစှဲရနျ ဖုနျး အပေါငျခံထားမှုကွောငျ့ဖွဈ
၁၆။ ကိုဗဈ-၁၉ အလှနျ သြှမျးပွညျ စီးပှားရေး ကဏ်ဍ တိကသြညျ့ စီမံကိနျး မရှိသေး ဟုဆို
၁၇။ ပူတာအိုကြောငျးမြား ပုံစံသဈနှငျ့ ပွနျဖှငျ့မညျ
၁၈။ ရိခေါဒါရျမွို့အနီး ငလငျြလှုပျခတျမှု လူနအေိမျနှငျ့ အဆောကျအဦးမြားပကျြစီး
၁၉။ ရေးမွို့နယျတှငျ လာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲ၌ မဲရုံ ၁၇ ရုံတိုးရနျလြာထား
၂၀။ အငျတာနကျဖွတျတောကျမှုခကျြခွငျးရပျ ကမျပိနျးဦးဆောငျသူ ၂ ဦးကို ငွိမျးစုစီဥပဒဖွေငျ့ အမှုဖှငျ့
၂၁။ ဖားကနျ့ဒသေအတှငျးသို့ ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားမြားက မြှျောလငျ့ခကျြဖွငျ့လာရောကျကွသျောလညျး မူးယဈဆေးဝါး အန်တရာယျနှငျ့လုံခွုံမှုမရှိသောကွောငျ့ ဒုက်ခမြိုးစုံကွုံတှနေ့ကွေကွောငျးပွညျထောငျစုဝနျကွီးပွောကွား
၂၂။ မနျဆူဈေး ဆိုငျးဘုတျပွနျတပျပေးရနျ သြှမျးလူထု တောငျးဆို
၂၃။ မိုးညှငျးမွို့၌ မူးယဈဆေးစှဲနသေညျ့ သားဖွဈသူက လကျသီးဖွငျ့ထိုးသဖွငျ့ မိခငျသဆေုံး
၂၄။ မူဆယျ နယျစပျ စီးပှားရေးဇုနျတှငျ နမျ့ဖတျကာ-နမျ့ခမျး-ကွူကုတျ တို့ပါဝငျမညျ
၂၅။ ရသတေ့ောငျမွို့အနီးပဈခတျမှုဖွဈ၍ ရှပေါရမီဘုနျးကွီးကြောငျးမှ မသနျစှမျးသူစဈဘေးရှောငျတဈဦးထိခိုကျဒဏျရာရ
၂၆။ မူဆယျ(၁၀၅) မိုငျ ကုနျသှယျရေးဇုနျအတှငျး လုံခွုံရေးတာဝနျ ထမျးဆောငျနသေော နမျးခမျးမွို့မ ပွညျသူ့စဈတပျဖှဲ့ နထေိုငျ သညျ့ အဆောကျအဦအား သနေတျဖွငျ့ ပဈခတျမှုဖွဈပှား
၂၇။ မယျလဒုက်ခသညျစခနျးအတှငျး မူးယဈဆေးပွား ထောငျခြီဖမျးမိ
၂၈။ ကှတျခိုငျမှာ မူးယဈဆေးခကျြလုပျတဲ့ပစ်စညျးတှေ ဖကျြဆီး
၂၉။ သြှမျးတောငျ ကိုဗဈ-၁၉ သံသယ စောငျ့ကွညျ့လူနာ ၇ဦးရှိ
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး နမ်မတူမွို့နယျအတှငျး RCSS နှငျ့ TNLA တို့ကွား စဈရေးတငျးမာမှုကွောငျ့ မနျစံကြေးရှာ ဘုနျးကွီး ကြောငျးသို့ စဈရှောငျ ၂၃၀ ကြျော ရောကျရှိတိမျးရှောငျနကွေောငျးစုံစမျးသိရသညျ။ ယခုရကျပိုငျး နမ်မတူမွို့နယျ မနျစံကြေးရှာ အနီး သြှမျးပွညျပွနျလညျထူထောငျရေးကောငျစီ သြှမျးပွညျတပျမတျော (RCSS/SSA) နှငျ့ တအာငျး (ပလောငျ) အမြိုးသား လှတျမွောကျရေး တပျမတျော (TNLA) တို့ စဈရေးတငျးမာမှုကွောငျ့ အဆိုပါ စဈရှောငျမြားထှကျပွေး တိမျးရှောငျလာရ ခွငျးဖွဈကွောငျးသိရသညျ။
ထှကျပွေးတိမျးရှောငျလာသညျ့ စဈရှောငျမြားသညျ နမ်မတူမွို့နယျ နားကြဲကြေးရှာ၊ နားကြိုငျးကြေးရှာနှငျ့ ပိနျးလုံရှာတို့မှ ဒသေခံ ၂၃၆ ဦးတို့ဖွဈပွီး၊ လကျရှိမနျစံအုပျစုရှိ မနျဟောငျဘုနျးကွီးကြောငျးတှငျ နားခိုနကွေကွောငျး နမ်မတူမွို့နယျ စဈဘေး ရှောငျ ကျောမတီအဖှဲ့မှ စိုငျးဘဉာဏျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ကိုပွောသညျ။“ မနေ့ ညကရောကျလာတယျ။ အဓိကတော့ RCSS နဲ့ TNLA စဈရေးတငျးမာလို့၊ အဲ့ရှာနားတဝိုကျမှာ စဈသားတှရေောကျလာလို့ တိုကျပှဲဖွဈမှာ စိုးရိမျတာနဲ့ ထှကျလာကွ တာပါ”ဟု စိုငျးဘဉာဏျက ဆိုသညျ။ ထို စဈရှောငျလာသညျ့ သူမြားအတှကျ နရောထိုငျခငျး၊ စားစရာမြားသညျ လကျရှိမှာ အခကျအခဲမရှိသေးကွောငျး၊ အလှူရှငျမြားက လာရောကျပေးထားကွောငျးလညျး စိုငျးဘဉာဏျ က ပွောသညျ။
နမ်မတူမွို့နယျအတှငျး စဈရေးတငျးမာမှုနှငျ့ ပတျသကျပွီး RCSS/SSA မှ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒုဗိုလျမှူးကွီး စဝျအုမျခေး က “ ကနြျောတို့တပျနဲ့ TNLA တပျ စဈရေးတငျးမာမှုရှိတာတော့ ဟုတျပါတယျ။ တိုကျပှဲတော့မဖွဈပါဘူး”ဟု သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကို ပွောသညျ။ ဆကျလကျပွီး သြှမျးသံတျောဆငျ့ မှ TNLA ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျမှူး တာ့အိုကျကြျောကို ဆကျသှယျ မေးမွနျးရာ အဆိုပါ စဈရေးတငျးမာမှုနှငျ့ ပတျသကျပွီး မသိရှိသေးကွောငျး ဖွကွေားခဲ့သညျ။ နမ်မတူမွို့နယျအတှငျး RCSS/ SSA နှငျ့ TNLA သညျ လှနျခဲ့သညျ့ ၂၀၁၆ ခုနဈမှ စတငျကာ စဈရေးတငျးမာမှုဖွဈပှားပွီး တိုကျပှဲမကွာခဏဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/17232
ဒီရကျပိုငျးထဲမှာ နယျခွားစောငျ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတခြို့ ထိခိုကျသဆေုံးတဲ့အထိ ရခိုငျလကျနကျကိုငျတပျ AA နဲ့ မွနျမာလုံခွုံရေး တပျဖှဲ့တှကွေား တိုကျပှဲတှေ ဖွဈပှားနတေဲ့အတှကျ ရခိုငျပွညျနယျထဲမှာ နရေပျစှနျ့ခှာ ထှကျပွေးသူတှေ တိုးလာနပေါတယျ။ စဈရေးတငျးမာမှုတှကွေောငျ့ လတျတလောခနျ့မှနျးခြေ ဒုက်ခသညျ တသိနျးခွောကျထောငျ့လေးရာကြျော ရှိနရောကနေ နောကျထပျ တိုးလာနိုငျတယျလို့လညျး ရခိုငျတိုငျးရငျးသားမြိုးနှယျမြားအစညျးအရုံး REC အတှငျးရေးမှူး ကိုဇျောဇျောထှနျးက ပွောပါတယျ။ တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ ဒုက်ခသညျတှေ လုံခွုံရေး စိုးရိမျနကွေရသလို ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကပျဘေးကာလမှာ အရေး ပျေါ အကူအညီတှေ လိုအပျနတေယျလို့လညျး ပွောပါတယျ။
ဒီရကျပိုငျး တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ ဒုက်ခသညျတှေ ပိုတိုးလာသလို တခြို့ယာယီခိုလှုံရေးစခနျးတှမှော စားနပျရိက်ခာပွတျလပျလာ နတေယျလို့ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါခငျစောဝကေလညျး ပွောပွပါတယျ“ လောလော ဆယျမှာ ကမြတို့ ရသတေ့ောငျဘကျမှာ တျောတျောမြားမြားတော့ သူတို့ အမိုးအကာလုံခွုံမှုအောကျ ရောကျသှားကွပွီ။ ဒါပမေဲ့ တခြို့တော့ အခုလောလောဆယျ တိုကျပှဲကိုရှောငျပွီး ပွေးလာတဲ့သူတှမှော နရောမရှိသေးတာတှရှေိတယျ။ အခုဆို ရငျ အားကစားခနျးမတှထေဲ ထားတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကမြတို့ရခိုငျပွညျနယျသညျမိုးအရမျးမြားတဲ့အတှကျ နထေိုငျရေးက အတျော လေးကို အခကျခဲရှိပါတယျ။
အခုတလော ဒီတရကျ ၂ ရကျမှာကို ကြောကျတနျးတိုကျနယျမှာ ကြောကျခကျတို့ ထိစှတေို့မှာ တပျမတျောကက နရောဝငျယူ ထားတော့တဘကျနဲ့တဘကျ တိုကျပှဲဖွဈမှာကွောကျလို့ အဲ့ကရှာသားတှတေျောတျောမြားမြား ရသတေ့ောငျဘကျကို ရောကျ ရှိလာနကွေတယျ။ ရခိုငျပွညျနယျမှာ ဒုက်ခသညျတှေ လုံခွုံရေး၊ ကပျဘေးအန်တရာယျသာမက မိုးတှငျးကာလ ရာသီဥတုဒဏျ နဲ့လညျး ရငျဆိုငျနကွေရတာပါ။ ဒီအတှကျလညျး တာဝနျရှိတဲ့ အစိုးရအနနေဲ့ထိထိရောကျရောကျ အကူအညီပေးစခေငျြ တယျလို့ ရခိုငျအမြိူးသားပါတီ ANP ရဲ့ အတှငျးရေးမှူး(၁) ဦးအောငျမွတျကြျောက ပွောပါတယျ။
ကပျရောဂါကွုံရတဲ့အခြိနျကစလို့ ရခိုငျပွညျနယျမှာ စဈဘေးရှောငျဒုက်ခသညျတှအေတှကျ ပုံမှနျထောကျပံ့ပေးနတေဲ့ အစီ အစဉျတှအေပါအဝငျ အလှူရှငျတှဆေီက ကူညီထောကျပံ့မှု ရပျတနျ့သလောကျဖွဈနတေယျလို့လညျး ဒသေခံ နိုငျငံရေး အသိုငျးအဝနျးနဲ့ အကူအညီပေးသူတှကေ ပွောပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အခုအခြိနျမှာ သကျကွီးရှယျအိုတှနေဲ့ ကလေးငယျ တှအေတှကျ အကူအညီတှေ အရေးတကွီးလိုအပျနတေယျလို့လညျး REC အဖှဲ့က ကိုဇျောဇျောထှနျးက ပွောပွပါတယျ။
ကုလသမဂ်ဂ စာနာမှုအကူအညီပေးရေးဆိုငျရာ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျရေးရုံး (UNOCHA) ရဲ့ ဇှနျလ ၂၃ ရကျနေ့ ထုတျပွနျခကျြ အရ ရခိုငျပွညျနယျက စဈဘေးရှောငျ ဒုက်ခသညျစခနျးတှနေဲ့ မွို့နယျပေါငျး ၁၄ ခုထကျ မနညျးမှာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့စလို့ ရကွေီးမှုတှေ ကွုံနရေတယျလို့ ဖျောပွထားပါတယျ။ မွပေုံ၊ ကြောကျတောနဲ့ မွောကျဦးမွို့နယျတှကေ စဈရှောငျစခနျးတှမှော ရကွေီးမှုတှကွေောငျ့ သကျကွီးရှယျအိုတှေ၊ ကလေးငယျတှနေဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျတှကေို ဘေးလှတျရာ ပွောငျးရှပေ့ေးခဲ့ရ ကွောငျးနဲ့ အကူအညီပေးရေးအဖှဲ့တှကေ အရေးပျေါကူညီနိုငျအောငျ ပွငျဆငျနကွေောငျးလညျး ထုတျပွနျခကျြမှာ ပွောဆို ထားပါတယျ။ https://burmese.voanews.com/a/rakhine-refugee-food-in-need-/5475079.html
KNU-ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး၊ ဒူးပလာယာခရိုငျ(တပျမဟာ ၆)မှ ဖှဲ့စညျးထားသညျ့ COVID-19 အရေးပျေါတုနျ့ပွနျရေး ကျောမတီ၏ ကော့ကရိတျမွို့နယျရှိ ရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျ စောငျ့ကွညျ့ရေးစခနျး (Quarantine center) တှငျ စားနှပျ ရိက်ခာ မလုံလောကျမှု အခကျအခဲရှိနကွေောငျး တာဝနျရှိသူမြားက ယနေ့ ပွောသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ ဧပွီလ ၇ ရကျနမှေ့စ၍ ယခငျ ကော့ကရိတျမွို့နယျ ရှာသဈကြေးရှာတှငျ စတငျဖှငျ့လှဈထားသညျ့ စငျတာ၌ လူဦး ရေ အနအေထားနှငျ့ နရောအကယျြအဝနျး အခကျအခဲကွောငျ့ ကော့ကရိတျ-မွဝတီသှားလမျးမကွီးဘေးရှိ KNU စိုကျပြိုး ရေး နှငျ့ မှေးမွူရေးဌာနသို့ ပွောငျးရှနေ့ရောခထြားပွီး လကျရှိတှငျ ထိုငျးနိုငျငံမှ နရေပျပွနျ စောငျ့ကွညျ့လူဦးရေ (၄၈) ဦး ရှိနကွေောငျး သိရသညျ။ ကော့ကရိတျမွို့နယျ၊ ကိုဗဈ ထိနျးခြုပျကာကှယျရေး ကျောမတီ တှဲဖကျအတှငျးရေးမှူး စောအေးမွ က “ကနြျောတို့ သိရသလောကျ ပွညျတှငျးမှာဝငျလာတဲ့ NGO တှရေဲ့ အကူအညီက အစိုးရ ဆီကိုပဲရောကျတယျ။ အဲ့ကနေ တဈဆငျ့ ကနြျောတို့ KNU ဗဟိုနဲ့ ခရိုငျနဲ့ ခြိတျဆကျမှုတှေ လုပျနတေယျပေါ့နျော။ သူတို့ ခရိုငျကပံ့ပိုးတာဘာမှမရှိဘူး။ သို့သျောလညျးပဲ သူတို့ဆီလညျး ဘာမှမရောကျလာသေးတဲ့ သဘောတော့ရှိတယျ။ အခုက ကနြျောတို့ဆီကို တိုကျရိုကျပံ့ပိုး တဲ့ အစီအစဉျတှေ မရှိသေးဘူး” ဟု ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။
ထို့အပွငျ လကျရှိတှငျ ကော့ကရိတျမွို့နယျ၏ ဘတျဂကျြငှဖွေငျ့သာ စီစဉျဆောငျရှကျနပွေီး အဆိုပါ ဖှငျ့လှဈထားသညျ့ Quarantine Center ဆီသို့ အစိုးရဘကျမှ နရေပျပွနျသူမြားကို လာရောကျလှဲပွောငျး ထားမှုရှိသလို ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှု ကဏ်ဍတှငျသာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုရှိပွီး စားနပျရိက်ခာ ထောကျပံ့မှု တဈစုံတဈရာမရှိ သေးကွောငျးနှငျ့ လတျတလော ကိစ်စ ရပျအတှကျ ဒူးပလာယာခရိုငျ တာဝနျရှိသူမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးသှားမညျဖွဈကွောငျးလညျး စောအေးမွက ဆကျပွော သညျ။
KNU ဒူးပလာယာခရိုငျမှ COVID-19 အရေးပျေါ တုနျ့ပွနျကာကှယျ ထိနျးခြုပျရေးအတှကျ ခရိုငျအတှငျး ထိုငျးနိုငျငံမှ မွနျမာနိုငျငံသို့ နရေပျပွနျပွညျသူမြားအတှကျ Quarantine Center ၃ ခုဖှငျ့လှဈပေးထားကွောငျး ခရိုငျတာဝနျရှိသူမြား ထံမှ သိရသညျ။ ထိုငျးနိုငျငံဒသေအသီးသီးမှ မွနျမာရှပွေ့ောငျးလုပျသားမြားမှာ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ မွဝတီနယျစပျမှ တဆငျ့ ဒုတိယ အကွိမျ မလေ ၂၃ ရကျမှ ယနေ့ ဇှနျလ တတိယအပတျထိ လူဦးရေ ၃၀,ဝ၀ဝ ကြျော ပွညျတှငျးသို့ ပွနျလညျ ဝငျရောကျလာ ခဲ့ဖွဈသညျ။ ထိုအထဲတှငျ ရောဂါပိုး တှရှေိ့သူမြားလညျးရှိကာ ၎င်းငျးရောဂါးပိုးတှရှေိ့ သူမြားကို သကျဆိုငျရာ ဖားအံ၊ မျောလမွိုငျ နှငျ့ ရနျကုနျမွို့မြားသို့ ပို့ဆောငျပေးခဲ့ပွီးဖွဈသညျ။ http://kicnews.org/2020/06/knu%e1%81% 8f% e1%80%80% e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%97%e1
ရေးမွို့နယျ တောငျပိုငျး ရငျးရယျတောငျခွတှေငျ ခွံသမားတဈဦး ညအိပျစောငျ့နစေဉျ ဇှနျလ ၂၁ ရကျည ၁၀ နာရီခနျ့အခြိနျ က သနေတျဖွငျ့ ခြောငျးမွောငျးပဈခံထိသဖွငျ့ မျောလမွိုငျဆေးရုံ၌ ကုသခံနရေပွီး ယခုအခါ စိုးရိမျစရာအခွအေနမေရှိတော့ ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
သနေတျပဈခံထိသူမှာ ရငျးရယျရှာသား နိုငျဝမျး ဖွဈပွီး ၎င်းငျး၏ ညာဘကျနံရိုးကို ထိမှနျသှားသညျဟု ညီမဖွဈသူ လူနာစောငျ့ မိယဉျစိနျက ပွောသညျ။“သူ့မှာ ရနျသူလညျးမရှိဘူး ရနျသူဟောငျး ရနျသူသဈလညျးမရှိဘူး။ ပဈတဲ့လူကို မတှမေိ့ဘူးဆို တော့ ဘယျသူလကျခကျြလညျးဆိုတာ မပွောတတျပါဘူး၊ ရနျညိုးရနျစ ရှိထားတယျဆိုရငျတော့ တဈမြိုးပေါ့နျော”ဟု ၎င်းငျး ကဆိုသညျ။ အဆိုပါ သနေတျပဈခတျခံရမှုနှငျ့ပတျသကျ၍ ရဲစခနျး၌ အမှုဖှငျ့ထားခွငျးမရှိသေးကွောငျး မိယဉျစိနျက ဆကျ ပွောသညျ။
သနေတျဒဏျရာရရှိထားသညျ့နရောမှ ကညျြဆံထိပျဖူးခှဲထုတျခဲ့ပွီးဖွဈသညျ့အတှကျ စိုးရိမျစရာမရှိတော့သဖွငျ့ ဒဏျရာ အနာ ကကျြရနျ တဈပတျ ဆယျရကျခနျ့နပွေီးပါက ဆေးရုံဆငျးရမညျဟု လိုကျပါကူညီဆောငျရှကျနသေညျ့ မှနျအရှငျ ဥက်ကံသ က ပွောသညျ။ မှနျအရှငျ ဥက်ကံသ က “အခုကညျြဆံထုတျပွီးပွီ၊ ကညျြဆံက ဘယျလိုအမြိုးအစားဖွဈတယျဆိုတာ ဆရာဝနျ မပွောသေးပါ၊ ကညျြဆံကထုတျပွီးပွီလို့ အဲ့လောကျပဲပွောပွတယျ၊ ခနျ့မှနျးကွညျ့ရငျတော့ တောပုနျးသနေတျဖွဈနိုငျတယျ၊ စဈသားတှကေိုငျတဲ့ သနေတျမဖွဈနိုငျဘူး။ ရှာနဲ့ခွံနဲ့ သှားရငျ တဈနာရီလောကျပဲ ကွာတယျ၊ စဈသားတှလေညျး မရှိပါဘူး” ဟု ပွောသညျ။
အဆိုပါ ရငျးရယျရှာနှငျ့အနီတဝိုကျတှငျ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြား သှားလာလှုပျရှားမှုမရှိသလို နယျမွအေေးခမျြးသော ဒသေဖွဈသညျ့အတှကျ ယငျးဖွဈစဉျနှငျ့ ပတျသကျပွီး မှနျပွညျသဈပါတီနှငျ့ သကျဆိုငျရာ ရဲစခနျးမှ စုံစမျး စဈဆေးမှုမြား ပွုလုပျနသေညျဟု သိရသညျ။ ရေးမွို့နယျတောငျပိုငျးဒသေသညျ ယခငျက မှနျပွညျသဈပါတီအမာခံ နယျမွတေဈခုဖွဈခဲ့ သျောလညျး ၁၉၉၅ ခုနှဈ နဝတစဈအစိုးရ နှငျ့သဘောတူခကျြအရ တပျစခနျးအခွခေခြှငျ့ မရှိတော့ပေ။ http://burmese. monnews.org/2020/06/22/%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%99%e1%
ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျနှငျ့ တှဆေုံ့မညျ့ အစညျးအဝေးတှငျ တိုငျးရငျးသား နိုငျငံရေးပါတီမြားအနဖွေငျ့ လှတျလပျပွီး တရား မြှတသော ရှေးကောကျပှဲဖွဈရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား တငျပွဆှေးနှေးသှားကွမညျဟု ပွောသညျ။
နိုငျငံရေးပါတီမြားနှငျ့ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲ ကောကျမရှငျတို့ ဇှနျ ၂၇ ရကျနေ့ ရနျကုနျမွို့တှငျ တှဆေုံ့ရာတှငျ သကျ ဆိုငျရာ ကွားနအေဖှဲ့အစညျးမြားအား လှတျလပျစှာသတငျးရယူ၊ ထုတျပွနျခှငျ့မြားကို ဖှငျ့ပေးရနျတောငျးဆိုသှားမညျဟု ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ SNLD အထှထှေအေတှငျးရေးမှူးခြုပျ စိုငျးလိတျ ကပွောသညျ။ “ရှေးကောကျပှဲကို စောငျ့ကွညျ့မယျ့ ကွားနအေဖှဲ့အစညျးတှေ လှပျလပျမြှတစှာ သတငျးယူနိုငျခှငျ့ သတငျးထုတျပွနျနိုငျခှငျ့ ဒါတှရှေိဖို့အတှကျကို သူတို့ဘယျလို စီမံဆောငျရှကျမှုမြိုးတှရှေိသလဲ ကနြျောတို့ ဖကျကတော့ အဲဒီကွားနအေဖှဲ့အစညျးတှေ မြားမြားစားစားနဲ့ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး လှတျလှတျလပျလပျ လှုပျရှားနိုငျအောငျ ဖှငျ့ထားပေးဖို့ ဒီဥစ်စာကို ကနြျောတို့ တောငျးဆို မှာ ဖွဈပါတယျ”ဟု ပွောသညျ။ လကျရှိတှငျ တိုငျးရငျးသားဒသေမြားဖွဈသညျ့ ရခိုငျပွညျနယျ၊ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝနှငျ့ ရှမျးပွညျနယျ မွောကျပိုငျးတို့တှငျ တိုကျပှဲမြား ဖွဈပှားနသေညျ့အတှကျ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပမညျ့ဆိုပါက အဆိုပါဒသေမြား တှငျ ကငျြးပနိုငျမညျ့ အနအေထား ရှိ၊ မရှိကို ဆှေးနှေးသှားရနျရှိပွီး ထိုသို့ သိရှိနိုငျမှသာ ကွိုတငျပွငျဆငျမှုမြားကို လုပျဆောငျ နိုငျမညျဟု SNLD က ဆိုသညျ။
ရခိုငျဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ ALD ပါတီ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဦးမြိုးကြျောက ၎င်းငျးတို့ပါတီအနဖွေငျ့ ဆှေးနှေးမညျ့ အကွောငျးအရာမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ယခုကဲ့သို့ ပွောသညျ။“ကနြျောတို့ဖကျကတော့ အဓိကဆှေးနှေးရမှာကတော့ ရခိုငျ ကိုယျစားပွုပါတီတှဖွေဈတဲ့အတှကျ ရခိုငျပွညျနယျမှာ ရှေးကောကျပှဲ တဈပွညျနယျလုံး အတိုငျးအတာနဲ့ ဖွဈနိုငျမဖွဈနိုငျ မေးကွရမှာပေါ့ဗြာ။ တဈဖကျမှာလညျး ပွညျထောငျစု တဈခုလုံးမှာလညျး ရှေးကောကျပှဲဖွဈနိုငျလား ဆိုတဲ့ဟာမြိုး ဒီလို မေးခှနျးလေးတှတေော့ ရှိမှာပေါ့။ နောကျတဈခါနပွေီးတော့ အခုရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပတဲ့အခြိနျက COVID ရဲ့ အခြိနျလညျး ရှိနတေယျလေ။ ဒီအတှကျကိုလညျး ဘယျလိုအကာအကှယျ အတားအဆီးပါ ဒါတှလေညျး မေးခှနျးတှေ အနနေဲ့ကတော့ ရှိမှာပါ။”
ထို့အတူ ကခငျြပွညျနယျ ပွညျသူ့ပါတီ KSPP ကလညျး ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားမြား မဲပေးမညျ့ ကိစ်စရပျမြား၊ ကွိုတငျမဲကိစ်စ၊ တပျမဲရုံကိစ်စနှငျ့ ပှငျ့လငျးမွငျသာ၍ တရားမြှတသော ရှေးကောကျပှဲဖွဈအောငျ လုပျဆောငျပေးရနျ စသညျ့အခကျြမြားကို အဆိုပါ တှဆေုံ့ပှဲတှငျ တငျပွဆှေးနှေးသှားရနျ ရှိသညျဟု KSPP ဒု-ဥက်ကဋ်ဌ ဦးကှမျဂေါငျအောငျခမျးက ပွောသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၂၀ ခုနှဈ ဇှနျလ ၁ ရကျနကေ့ ရှေးကောကျပှဲကို ရကျရှဆေို့ငျးခွငျး သို့မဟုတျ ပုံမှနျအတိုငျး ပွုလုပျမညျဆိုပါ က ရှေးကောကျပှဲတှငျ ပါဝငျမညျ့ သကျဆိုငျရာ ပါတီမြား၏ သဘောတူညီခကျြကို ရယူရနျ SNLD ပါဝငျသညျ့ စညျးလုံး ညီညှတျသော တိုငျးရငျးသားမြား မဟာမိတျ UNA နှငျ့ မိတျဖကျ အဖှဲ့အစညျးမြားက ထုတျပွနျကွညောခကျြထုတျကာ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအား တိုကျတှနျး တောငျးဆိုထားသညျ။ ထိုတောငျးဆိုမှု နောကျပိုငျး ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျကရှေးကောကျပှဲဝငျမညျ့ သကျဆိုငျရာနိုငျငံရေးပါတီမြားအား တှဆေုံ့ဆှေးနှေးရနျ ပွောဆိုလာခွငျးဖွဈသညျ။ ရှေးကောကျပှဲကို နိုဝငျဘာလတှငျ ကငျြးပမညျဆိုသျောလညျး ကငျြးပမညျ့နေ့ အတိအကကြို ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ UEC မှ တရားဝငျ ထုတျပွနျကွညောထားခွငျး မရှိသေးပေ။ https://www.bnionline.net/mm/news-73767
၆။ ဖားကနျ့ဒသေတှငျ မွပွေိုမှုကွောငျ့ သုံးဦးသဆေုံးပွီး ခွောကျဦးဒဏျရာရရှိကာ ပြောကျဆုံးသူမြားကို ရှာဖှနေဆေဲဖွဈ
ကခငျြပွညျနယျ ဖားကနျ့မွို့နယျ ဆိပျမူကြေးရှာအုပျစု စပေါ့ကြေးရှာနှငျ့ ဘှမျနနျကြေးရှာကွားရှိ ရတနာအဓိပတိ ကုမ်ပဏီ လုပျကှကျ ကငျြးပွိုကခြဲ့ရာ သုံးဦးသဆေုံးခဲ့ပွီး ခွောကျဦး ဒဏျရာရရှိခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ မွပွေိုမှုဖွဈစဉျမှာ ဇှနျ၂၃ ရကျ ညနေ ၃ နာရီ ၃၉ မိနဈခနျ့တှငျ ဖွဈပှားခဲ့ပွီး မွပွေိုမှုအခွအေနကေို ကွိုတငျသတိပေးမှုမြား ပွုလုပျနိုငျခဲ့ကွောငျး၊ မွေ ပွိုသညျ့ဘကျမှ လူအမြားရှောငျတိမျးနိုငျခဲ့သျောလညျး ရကေနျတဈဖကျမှလူမြားမှာ မွစောမြား ရကေနျအတှငျးကသြညျ့ အ ရှိနျကွောငျ့ ရလှေိုငျးမြားဆှဲခသြညျ့အခွအေနမြေားဖွဈပျေါခဲ့ကွောငျး၊ ပြောကျဆုံးစာရငျးမြားကို လိုကျလံကွညောနကွေောငျး စပေါ့ကြေးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးစနျးယုက ပွောကွားသညျ။
ဖားကနျ့အထှထှေအေုပျခြုပျရေး မှတျတမျးမြားအရ သဆေုံးသူမှာ မှျောရှနျကြေးရှာ နသေူ ၅၁ နှဈအရှယျရှိ ဦးအောငျမွငျ့မှာ ယငျးမွပွေိုခြိနျတှငျ အမွငျ့ပေ ၆၀ ခနျ့မှ ပွုတျကခြဲ့ပွီး ဦးခေါငျးပေါကျပွဲ၊လကျမောငျးကြိုးပဲ့ကာ ဆေးရုံသို့ ကားဖွငျ့ပို့ဆောငျစဉျ သဆေုံးခဲ့ကွောငျး၊ ဆိပျမူကြေးရှာမှ ၄၅ နှဈအရှယျရှိ ဦးနျောတောငျ နှငျ့ ဦးကြျောစိုး (အခကျြအလကျ စိစဈဆဲ) မှာ ရလှေိုငျး နှငျ့ ဆှဲခခြံရကာ သဆေုံးခဲ့ကွခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ လကျရှိတှငျ ရှာဖှရေေးလုပျငနျးမြားကို ဆကျလကျလုပျဆောငျနေ ပွီး ပြောကျဆုံးစာရငျးမြားကို ကောကျယူနဆေဲဖွဈကွောငျးသိရသညျ။ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈအတှငျး မွပွေို၊ မြောခြောငျးပေါကျ ကမြှုမြား၊ ခွခြေျောပွုတျကမြှုမြားကွောငျ့ လူသဆေုံး မှု ၃၀ နီးပါးရှိခဲ့ပွီဖွဈကွောငျး အစိုးရမှတျတမျးမြားအရ သိရသညျ။
ဖားကနျ့ဒသေတှငျ မွနျမာနိုငျငံအရပျရပျမှရောကျရှိလာသညျ့ရှပွေ့ောငျးလုပျသား သုံးသိနျးဝနျးကငျြအမွဲရှိနပွေီး ကြောကျစိမျး လုပျကှကျမြားတှငျ တရားမဝငျ တဈနိုငျတဈပိုငျ တူးဖျောခွငျး၊ မွစောပုံမြားတှငျ ရမေဆေးရှာခွငျး၊ ကြောကျစိမျးတူးဖျောနဆေဲ လုပျကှကျမြားတှငျ ကြောကျစိမျးရှာဖှခွေငျးစသညျ့ လုပျငနျးမြားတှငျလုပျကိုငျနပွေီး မွပွေိုမှုကွောငျ့လစဉျသဆေုံးမှုမြားရှိခဲ့ သညျ။
ဦးသိနျးစိနျအစိုးရ လကျထကျတှငျ သတ်တုတှငျးဝနျကွီးဌာန၏ စာရငျးမြားအရ ဖားကနျ့ဒသေတှငျ ပုဂ်ဂလိက ကုမ်ပဏီ ၈၀၈ ခု တဈဧက လုပျကှကျပေါငျး ၁၅၆၃၈ ကှကျ၊ အကြိုးတူ ကုမ်ပဏီ ၂၂၂ ခု၊ လုပျကှကျပေါငျး ၃၀၂ ကှကျအထိ ရှိခဲ့သညျ။ NLD အစိုးရလကျထကျတှငျ လုပျကှကျမြားကို သကျတမျးတိုးပေးခွငျး မရှိတော့ဘဲ လုပျကှကျဧရိယာ အကယျြအဝနျးနှငျ့ ပေါငျးစပျ တူးဖျောခှငျ့မြား ကနျ့သတျခဲ့သညျ။ လကျရှိတှငျ အကြိုးတူလုပျကှကျ လေးခု၊ ပုဂ်ဂလိကလုပျကှကျ ၆၃၆ ကှကျရှိပွီး အမြားစုမှာ ခိုးတူးနကွေခွငျး ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ https://news-eleven.com/article/179872
မှနျပွညျနယျ ရေးမွို့နယျ မော့ကနငျကြေးရှာတှငျ အိမျ ၁၈ လုံး မီးလောငျကြှမျးသဖွငျ့ အိမျထောငျစု ၂၇ စုနှငျ့ လူဦးရေ ၁၄၄ ဦး မီးဘေးသငျ့ ခံနရေသညျ့အပွငျ အခွားနအေိမျ ၉ လုံးလညျး အိမျအကာနံရံမြား မီးထဲပါရှိသှားသညျ့အတှကျ လတျတလော ဆုံးရှုံးမှုတနျဖိုး မခနျ့မှနျးနိုငျသေးကွောငျး မော့ကနငျ ကြေးရှာအုပျစု အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးအငျးစိနျက ပွောသညျ။ ဇှနျလ ၂၂ ရကျနေ့ ညနေ ၃ နာရီ ၁၅ မိနဈခနျ့တှငျ မီးစလောငျကြှမျးခဲ့ပွီး ၂ နာရီခနျ့အကွာ မီးညှနျ့အရှိနျကြိုးကာ ည ၁၁ နာရီခှဲခနျ့က မီးငွိမျးသတျနိုငျခဲ့ပွီး စိစဈမှုတှအေရ အိမျတှငျး လြှပျစဈဝါယာရှော့ကွောငျ့ဟု မီးသတျဌာနက မှတျခကျြပွုသညျ။ “လောငျတာ ကတော့ ဝါယာကွိုးရှော့ ဖွဈပွီးလောငျတယျလို့ ပွောကွတာပေါ့ ဒါက မီးသတျတပျဖှဲ့ရဲ့ စိစဈခကျြအရ ပွညျသူ့ရဲတှေ စိစဈ ခကျြအရ မွို့နယျထှအေုပျဌာနရဲ့ စိစဈခကျြအရ ဒီမီးပေးထားတဲ့ ပါဝါကွိုးကနေ ရှော့ဖွဈပွီးတော့ လောငျတယျလို့ ပွောကွ တာပေါ့” ဟု ၎င်းငျးကဆိုသညျ။
“ဒီဘေးနားမှာပဲလားဆိုပွီး ဘာမှယူလို့လညျး မမှီတော့ ဂုနျနီအိတျတဈလုံးယူပွီးတော့ ပစ်စညျးတဈခြို့ကိုထညျ့ပွီး မွေးနဲ့ ပွေးသှားတော့တာပဲ အခုဘာမှမရှိတော့ဘူး အကုနျလောငျသှားကုနျပွီ တနျဖိုးက အမြားကွီးပဲ ဆုံးရှုံးသှားတာ ဆုံးရှုံးသှားတဲ့ တနျဖိုးက အခုမွငျနရေတဲ့အတိုငျးပဲ အိမျမှာရှိတဲ့ ကလေးစရာ ပစ်စညျးတှေ စလောငျးတှေ TV တှေ အကုနျကုနျသှားတယျ မီးစကျတှေ ပစ်စညျးတှေ တဈအိမျလုံးလညျး အကုနျဖကျြစီးသှားတယျ”ဟု မီးဘေးသငျ့ခဲ့ရပွီး နအေိမျဆုံးရှုံးခဲ့ရသညျ့ ဒျေါစနျး က ပွောသညျ။ မီးလောငျရာမှာ မကျြမွငျကွုံတှခေဲ့ရသူ မအေးကွူက “ဟို အိမျမီးလောငျသှားပွီ ကွညျ့လိုကျတော့ မီးခိုးတှေ ထှကျနတေယျ အဲ့ဒါနဲ့ အရေးကွီးတဲ့ ပစ်စညျးတှယေူတယျ ယူနတေုနျးပဲ ရှိသေးတယျ မီးကလောငျတယျ ကွညျ့နတေုနျးမှာပဲ နောကျတဈအိမျ ဆကျကူးသှားတယျ မီးကအားကောငျးနတေယျလေ ခုနနနေောကျတဈအိမျ သုံးအိမျမွောကျကို ဆကျကူး သှားတယျ တဈလမျးလုံး ခွားနတောတောငျ မီးကူးလာတယျ အဲ့ခြိနျမှာ မီးသတျကားကတော့ ရောကျလာပွီး အဲ့မှာကွောကျ ပွီးတော့ ဘုနျးကွီးကြောငျးမှာ သှားနလေိုကျတယျပေါ့” ဟု ပွောသညျ။
အဆိုပါ မီးလောငျနအေိမျ (၁၈) လုံးတို့ကို ဆနျတဈအိတျနှငျ့ ငှတေဈသိနျးစီနှငျ့ ကနျြနအေိမျ (၆) လုံးကို ဆနျတဈအိတျနှငျ့ ငှငေါးသောငျးစီ ပွညျနယျလှတျတျော ဒုတိယ ဥက်ကဌ ဒေါကျတာအောငျနိုငျဦး နှငျ့ “အအာခရီး” အဖှဲ့တို့ကလညျးကောငျး၊ မျောလမွိုငျမွို့မှ ဘိုဘိုဝငျးလူမှုကယျဆယျရေးအဖှဲ့ကလညျးကောငျး ဆနျ၊ ဆီနှငျ့ ပစ်စညျးတခြို့တို့ကို သှားရောကျကူညီ ထောကျပံ့ပေးခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ http://burmese.monnews.org/2020/06/23/%e1%80%99%e1%80%b 1%e1%80%ac %e1%80%b7%e1%
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး နမျ့ခမျးမွို့နယျ ကောငျးကတျကြေးရှာအုပျစုရှိ သဈတောဦးစီးဌာနမှ သိမျးယူထားသညျ့ မွဧေရိယာ (၉၇) ဧက ကို ကြေးရှာပိုငျမြား ထငျးစိုကျခငျးအဖွဈ ပွနျလညျလှဲပွောငျးပေးမညျဟု လှတျတျောတှငျ ဒေါကျတာ ညီညီအောငျ က ပွောကွားလိုကျသညျ။
ယမနျနေ့ ( ဇှနျ ၂၄)ရကျတှငျ ကငျြးပသညျ့ သြှမျးပွညျ လှတျတျော (၁၉ ) ကွိမျမွောကျ ပုံမှနျအစညျးအဝေးတှငျ နမျ့ခမျးမွို့ နယျ မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ (၂) ပွညျနယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးအေးမောငျ မှ ကောငျးကတျကြေးရှာအုပျစု ကှငျးပွငျပ ဒသေရှိ သဈတောစိုကျခငျးအဖွဈ သိမျးယူထားသညျ့ မွမြေားအနကျ စိုကျပြိုးခွငျးမရှိသော မွဧေရိယာ (၉ ၇) ဧက ကို မူလ ပိုငျရှငျ တောငျသူ ၂၈ ဦးထံ သို့ ပွနျလညျလှဲပွောငျးပေးရနျ အစီစဉျ ရှိ /မရှိ ကွယျပှငျ့ပွ မေးခှနျး မေးမွနျးခဲ့ပါသညျ။
အဆိုပါ မေးမွနျးမှုနှငျ့ ပတျသကျပွီး သယံဇာတ နှငျ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေးဝနျကွီး ဒေါကျတာ ညီညီအောငျ မှ နမျ့ခမျးမွို့နယျ ကောငျးကတျကြေးရှာအုပျစု သဈတောစိုကျခငျးမြားကို ကြေးရှာပိုငျထငျးစိုကျခငျးအဖွဈ လှဲပွောငျးပေးမညျဟု လှတျတျောတှငျး ပွနျလညျဖွကွေားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ နမျ့ခမျး သဈတော ဦးစီးဌာနမှ (၁၉၉၅ – ၁၉၉၆) ခုနှဈတှငျ ကြေးရှာသုံး ထငျးစိုကျခငျး အဖွဈ စိုကျပြိုးရနျ သိမျးယူခဲ့ပွီး သိမျးယူမွဧေက (၁၀ဝ) အနကျ ၃ ဧက သာ ထငျးစိုကျခငျးအဖွဈ သဈတောဦးစီးဌာနက စိုကျပြိုးခဲ့ပွီး ကနျြရှိသညျ့ ဧက (၉၇) ဧက တှငျ စိုကျပြိုးခဲ့ခွငျး မရှိကွောငျး သိရသညျ။ https://bur mese.shan news.org/archives/17252
၂ဝ၂ဝ ပွညျ့နှဈ၊ နိုဝငျဘာလတှငျ ကငျြးပမညျ့ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ကရငျပွညျနယျအနဖွေငျ့ ၂ဝ၁၅ ခုနှဈ ဆန်ဒမဲ ပေးခှငျ့ရှိသူထကျ လူဦးရေ ၂ သိနျးနီးပါး တိုးလာသညျဟု ပွညျနယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့၏ ကောကျယူထားသညျ့ စာရငျးအရ သိရသညျ။ ကရငျပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့က ၂ဝ၁၉ ခုနှဈ ဇှနျလမှ ၂ဝ၂ဝ ပွညျ့နှဈ ဇှနျလအထိ ဆန်ဒမဲပေးခှငျ့ရှိသူ ၁၁ သိနျးနီးပါး စာရငျးကောကျယူထားပွီး ၎င်းငျးဆန်ဒမဲပေးခှငျ့ရှိသူမြားထဲတှငျ အစိုးရ တပျမတျောသားမြား၏ ဆန်ဒမဲထညျ့ခှငျ့စာရငျး ပါဝငျမှုမရှိ သေးကွောငျး ကအေိုငျစီမှ စုံစမျးသိရှိရသညျ။
“ ၂ဝ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၅ ခုနှဈ ရှေးကောကျပှဲမှာ မဲဆန်ဒနယျရော၊ မဲထညျ့ခှငျ့ရော မရခဲ့ဘူး။ ၂ဝ၂ဝ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ အခွခေံမဲ စာရငျး ကောကျခံထားတယျဆိုတော့ ကနြျောတို့နယျက ကြေးရှာအုပျစုတှေ ပါလာမယျလို့တော့ မြှျောလငျ့ရတယျ။ အစိုးရ အုပျခြုပျရေးမှူး မရှိတဲ့ ကြေးရှာအုပျစု အမြားကွီးရှိတော့ ဒသေခံတှေ မဲထညျ့ခှငျ့ရဖို့ ကျောမရှငျနဲ့ တိုငျးရငျးသားအဖှဲ့တှေ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျပေးစလေိုတယျ”ဟု ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျ ကရငျအမြိုးသားဒီမိုကရကျတဈပါတီ (KNDP) ဒုဥက်ကဋ်ဌ စကြျောစှာက ဇှနျလ ၂၃ ရကျနေ့ ကအေိုငျစီ သို့ပွောသညျ။
ကရငျပွညျနယျတှငျ ဖာပှနျ၊ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျနှငျ့ အခွားမွို့နယျအခြို့ရှိ ကြေးရှာမြားတှငျ အစိုးရမှ ခနျ့အပျထားသညျ့ ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူး မရှိသေးသညျ့အတှကျ ဒသေခံမြား ဆန်ဒမဲထညျ့ခှငျ့ရဖို့ မသခြောသေးသညျ့အပျေါ အစိုးရဌာနဆိုငျ ရာမြားနှငျ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့တို့ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျမှုရှိသညျဟု ကအေဲနျယူ-ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး မွို့နယျတာဝနျရှိသူမြားထံမှ သိရသညျ။
၂ဝ၁၅ ခုနှဈ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ကရငျပွညျနယျအနဖွေငျ့ ဆန်ဒမဲပေးခှငျ့ရှိ သူဦးရေ ၉ သိနျးကြျောရှိပွီး ပါတီပေါငျး ၁၉ ပါတီမှ ကိုယျစားလှယျလောငျး ၂၆ဝ ကြျော ဝငျးရောကျယှဉျပွိုငျကာ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ(NLD) ပါတီမှ မဲဆန်ဒ နယျအမြားစု အနိုငျရရှိသညျဟု ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ မှတျတမျးမြားအရ သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/06/ %e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%bb%e1%
မွယောအငွငျးပှားမှုနဲ့ပတျသကျပွီး ပွဈဒဏျခမြှတျခံထားရပွီးဖွဈတဲ့ ကရငျနီတောငျသူ ၂၂ ဦးအပျေါ နောကျထပျပွဈဒဏျ ထပျတိုးခမြှတျပေးဖို့ တပျမတျောက ကယားပွညျနယျတရားရုံးမှာ လြှောကျထားလိုကျပါတယျ။ လှိုငျကျောအခွစေိုကျ အမွောကျ တပျ ၃၅၆ တပျရငျးနဲ့ ခလရ ၂၅၀ တပျရငျးတို့က ကရငျနီပွညျ တောငျသူလယျသမားသမဂ်ဂအဖှဲ့ဝငျတှဖွေဈတဲ့ ခှနျးဘှယျမူး၊ ခှနျးကောရီယို၊ ခှနျးမောငျလှငျနဲ့ တရားစှဲခံရတဲ့ တောငျသူ ၁၉ ဦးတို့ကို ပွဈဒဏျထပျတိုးပေးဖို့ လြှောကျထားခဲ့ တာဖွဈပါတယျ။
ကရငျနီတောငျသူ ၁၉ ဦးတို့ကို ပုဒျမ ၄၄ရ၊ ပုဒျမ ၂၉၄၊ ၃၅၃၊ ၄၂၇၊ နဲ့ ပွညျသူပိုငျပစ်စညျး ကာကှယျစောငျ့ရှောကျရေး ဥပဒပေုဒျမ ၆(၁) တို့ နဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈက အမှုတှဲသီးခွားစီ တရားစှဲဆိုခံခဲ့ရပွီး ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ မတျလ ၁၃ ရကျနကေ့ သူတို့ကို လှိုငျကျောမွို့နယျ တရားရုံးက ပုဒျမအလိုကျ ဒဏျငှကေပျြ ၂၀ဝဝဝ စီနဲ့ ခြုပျရကျ ထုတျနုတျခံစားခှငျ့ပွုတဲ့ ထောငျ ဒဏျ ၆ လ ခမြှတျခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါ ပွဈဒဏျတှဟော နညျးနတေယျဆိုပွီး မူလ တရားစှဲဆိုတဲ့ တပျမတျောအရာရှိတှကေ လှိုငျကျောခရိုငျတရားရုံးကို လြှောကျထားခဲ့ပါတယျ။ ခရိုငျတရားရုံးက ပလပျခဲ့တာကွောငျ့ ပွညျနယျ တရားလှတျတျောကို ထပျပွီး လြှောကျထားခဲ့တာဖွဈပွီး အဲဒီပွငျဆငျခကျြကို ပွညျနယျတရားလှတျတျောက လကျခံတဲ့အတှကျ ဒီကနဇှေ့နျလ ၂၅ ရကျနမှေ့ာ တောငျသူတှကေို ချေါယူလကျမှတျထိုးခိုငျးခဲ့တယျလို့ တောငျသူတှရေဲ့ရှနေ့ေ ခူးတလပေိုးရယျက ပွောပါတယျ။
ဒီကနမှေ့ာတော့ ရှနေ့ပေါဝါတငျပွီး နောကျထပျရုံးခြိနျးမှာ အမှုကို လြှောကျလဲခကျြကွား နာဖို့နကော လြှောကျလဲကွားမှာပွီး ရငျတော့ အမိနျ့ခမြှာဖွဈပါတယျ။ လာမယျ့ရုံးခြိနျးရကျတှကေိုတော့ တရားလှတျတျောက ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြမှာကနေ ကွညောပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈက တရားစှဲဆိုခံထားတဲ့ တောငျသူ ၂၂ ဦးထဲက ပုဒျမ ၆(၁) နဲ့ တရားစှဲဆို ခံရသူ ၃ ဦးရှိပွီး သူတို့တှဟော ထောငျတှငျးမှာ ဖမျးဆီးခြုပျနှောငျတရားရငျဆိုငျခဲ့ရပါတယျ။ မွို့နယျတရားရုံးက အမိနျ့ခြ မှတျစဉျမှာတော့ ပုဒျမ ၆၁ အပါအဝငျ ကနျြတဲ့အမှုတှနေဲ့ပါ တရားစှဲဆိုခံရတဲ့ ဦးဦးရယျနဲ ဦးရှားရယျကိုတော့ ထောငျဒဏျ ခွောကျလနဲ့ ငှဒေဏျတှေ ခမြှတျခံခဲ့ရပွီး တဈဦးက အမှုမှ ကှငျးလုံးကြှတျလှတျမွောကျခဲ့ပါတယျ။
ကယားပွညျနယျတရားလှတျတျောက ခူးဦးရယျထံ ပေးပို့ခဲ့သညျ့ အကွောငျးကွားစာအရ အခငျးဖွဈတဲ့နကေ့ ခူးဦးရယျနဲ့ ခူးရှားရယျတို့ ဝငျရောကျဖကျြဆီးခဲ့တဲ့ ခလရ (၂၅၀) မှ အုတျတံတိုငျးတှဟော ပွညျသူပိုငျပစ်စညျးတှဖွေဈပွီး ကာလတနျဖိုး ကပျြ ၁၄၉ သိနျးခနျ့ဖွဈလို့ နိုငျငံ့ဘဏ်ဍာဆုံးရှုံးမှုနဲ့ နှိုငျးယှဉျပါက ထောငျဒဏျ ခွောကျလပွဈဒဏျမှာ နညျးပါးလှနျးလှတယျလို တရားလိုက ရေးသားထားပါတယျ။ တရားစှဲဆိုခံရတဲ့ တောငျသူအမြားစုဟာ တရားစှဲဆိုခံရလို့ လယျယာမွတှေေ ပွနျလညျ လုပျခှငျ့မရတော့ဘဲ့ မိသားစုစားဝတျနရေေးအခကျအခဲတှေ ကွုံတှနေ့ရေပါတယျ။ ကယားပွညျနယျ၊လှိုငျကျောနဲ့ ဒီးမော့ဆို မွို့နယျမှာ ၂၀၁၉ ခုနှဈအတှငျး ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ မွယောအငွငျးပှားမှုနဲ့ ပတျသကျပွီး တပျမတျောက တရားစှဲဆိုထားတဲ့ ဒသေခံ တောငျသူပေါငျး ၄၁ ဦး ရှိပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/396084
ထိုငျးနိုငျငံမှ မွနျမာနိုငျငံသို့ မွဝတီ-မဲဆောကျ အမှတျ ၂ တံတားမှတဆငျ့ မွဝတီဘကျခွမျး BCF တှငျ (ဇှနျ လ ၂၃ ရကျနေ့) ဝငျရောကျလာသညျ့ အမြိုးသားတဈဦးမှာ အရကျသစောသောကျစားလာပွီး စဈဆေးမှုမခံယူဘဲ အျောဟဈဆူပူနခွေငျးမြား ပွုလုပျသညျ့အတှကျ မွဝတီမွို့နယျတရားရုံးက ထောငျဒဏျ ၆ လ ခမြှတျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ထိုငျးနိုငျငံမှ မွနျမာနိုငျငံသို့ ထိုငျး-မွနျမာ အမှတျ ၂ ခဈြကွညျရေးတံတားမှ တဆငျ့ ယနေ့ မှနျးလှဲ ၁ နာရီခှဲ အခြိနျခနျ့က ဝငျ ရောကျလာသူ ဖားအံမွို့ တောငျကလေးကြေးရှာနေ စောခငျစိုးဝငျး ၃၇ နှဈသညျ အရကျသစောသောကျစားလာပွီး စဈဆေး မှုမခံယူခွငျး၊ အျောဟဈဆူပူနခွေငျးမြား ပွုလုပျခဲ့သညျ။ သို့ဖွဈ၍ ယငျးဖွဈစဉျအား မွဝတီခရိုငျဆေးရုံအုပျကွီး ဒေါကျတာ နန်ဒဝငျး မှ တရားလိုပွုလုပျတိုငျတနျးမှုအရ မွို့နယျ တရားသူကွီး ဦးဝဇေငျမနျးမှ လကျခံစဈဆေးပွီး ညနေ ၆ နာရီ အခြိနျတှငျ စောခငျစိုးဝငျးအား ကူးစကျရောဂါ ကာကှယျနှိမျနငျးရေး ဥပဒေ ပုဒျမ ၁၈ အရ ထောငျဒဏျ (၆) လ ကခြံစရေနျ အမိနျ့ခမြှတျ ခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
ယမနျနေ့ ဇှနျလ ၂၂ ရကျနကေ့လညျး ထိုငျးနိုငျငံမှ မွနျမာနိုငျငံ ထိုငျး-မွနျမာ အမှတျ ၂ တံတားမှတဆငျ့ ပွနျလာသူ အမြိုး သမီး တဈဦးမှာ မွဝတီ BCF ဇုနျ သို့ မဝငျဘဲ ကားဖွငျ့ ခိုးထှကျသှားသဖွငျ့ ၎င်းငျးအမြိုးသမီးနှငျ့ အတူယာဉျမောငျး အမြိုးသား (၁)ဦးအား မွဝတီမွို့နယျတရားရုံးမှ ကူးစကျရောဂါကာကှယျနှိမျနငျးရေးဥပဒေ ပုဒျမ ၁၈ ဖွငျ့ ထောငျဒဏျ(၄)လစီ အမိနျ့ခခြဲ့ ပွီး မွဝတီနယျစပျ BCF ဇုနျတှငျ ဥပဒခြေိုးဖောကျမှုဖွငျ့ အဆိုပါ ဥပဒဖွေငျ့ အရေးယူခံသူ (၃)ဦးထိရှိပွီဖွဈသညျ။ http://k icnews.org/2020 /06/%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%8
မွနျမာ့တပျမတျောက ဆကျသှယျရေးလမျးကွောငျးမြား ပိတျဆို့ထားသညျ့အတှကျ ရခိုငျပွညျနယျ အမျးမွို့နယျအတှငျးရှိ ခငျြး လူမြိုးအမြားစုနထေိုငျကွသော ကြေးရှာပေါငျး (၄၀) ကြျောမှဒသေခံပွညျသူမြား ဆနျပွတျလပျနပွေီဟုသိရသညျ။
မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျ့တပျတော (AA) အကွားဖွဈပှားနသေညျ့ စဈရေးပဋိပက်ခကွောငျ့ တပျမတျောက အမျးမွို့နယျ ဒလကျခြောငျးအုပျစုအတှငျးရှိ ကြေးရှာပေါငျး (၄၂) ရှာနှငျ့ ဆကျသှယျသော ရလေမျး ကုနျလမျးမြားအားလုံးကို ပွီးခဲ့သညျ့ ဇနျနဝါရီလဆနျးကတညျးက ယနခြေိ့နျထိ ပိတျဆို့နသေညျ့အတှကျ ဒသေခံပွညျသူမြား ဆနျပွတျလပျနကွေခွငျးဖွဈသညျဟု ခငျြးလူ့အခှငျ့အဖှဲ့ (CHRO) မှပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူဆလိုငျးလနျြကပွောသညျ။ ဒလကျခြောငျးအုပျစုအတှငျး ကြေးရှာမြားသညျ ဆနျ၊ဆီ၊ဆား အခွခေံစားသောကျကုနျမြားကို အမျးမွို့သို့ ကုနျးလမျးဖွငျ့သျောလညျး မွပေုံမွို့နယျ ကံတောငျကွီးဖကျသို့ ရလေမျးကွောငျးတို့ဖွငျ့ သယျယူလရှေိ့ကွသျောလညျး ရက်ခိုငျ့တပျတျော (AA) ထံ စားနပျရိက်ခာမြားရောကျရှိသှား မညျကို စိုးရိမျသညျ့အတှကျ တပျမတျောဘကျက လမျးကွောငျးမြားအားလုံး ပိတျဆို့လိုကျခွငျးဖွဈသညျဟု သိရသညျ။
“အခုက ကနြျောတို့က ပိုကျဆံရှိရငျတောငျမှ ဆနျဝယျလို့မရတဲ့အနအေထားမှာဖွဈနတေယျ ဆနျအိတျကိုကလုံးဝမရှိဘူး၊ အခုလောလောဆယျက ကနြျောတို့ ပွညျသူတှကေ ဒလကျခြောငျးကွားမှာရှိတဲ့သူတှကေ ရှမျးကုနျးကြေးရှာနဲ့ မင်ျဂကနျကြေးရှာ ကိုအကုနျလုံးနီးပါး ပွောငျးရှလေ့ာကွပွီ ဆိုတော့ လောလောဆယျက ကနြျောတို့စုပုံနကွေတာပေါ့ စုပုံနတေဲ့ခါ ကတြော့ အကုနျလုံးကအစားအသောကျတှကေ ပွတျနတေဲ့အခါကတြော့ စားစရာဆနျမရှိတဲ့အခါကတြော့ လောလောဆယျ အသီး အနှံ ပိန်နဲသီးတို့ စားပွီးတော့မှနနေရေတယျ” ဟု ဆလိုငျးဝငျးမောငျကပွောသညျ။
အမျမွို့မှ အနောကျဖကျ(၂၅)မိုငျခနျ့အကှာ ဒလကျခြောငျးအုပျစုအတှငျး ဒါးလကျကြေးရှာ အထကျနှငျ့ ရှမျးကုနျးကြေးရှာ အနားတှငျ တပျစခနျးမြားရှိတညျပွီး အမျးမွို့အခွစေိုကျ အနောကျပိုငျးတိုငျးစဈဌာနခြုပျ လကျအောကျခံတပျမြား ဖွဈကွ ကွောငျး သိရပါသညျ။ လကျရှိ ရိက်ခာဆနျပွတျလပျနသေညျ့ ဒလကျခြောငျးအုပျစုအတှငျးရှိ ကြေးရှာ (၄၂) ရှာအနကျ (၃၇) ရှာမှာ ခငျြးလူမြိုးမြားနထေိုငျကွပွီး ကနျြ (၅) ရှာမှာ ရခိုငျလူမြိုးမြားနထေိုငျကွကွောငျးသိရသညျ။ https://www.bnionli ne.net/mm/news-73784
စဈရေးဆိုငျရာ လြှို့ဝှကျခကျြ ပေါကျကွားမှုနဲ့ လူမြိုးရေး အမုနျးတရားတှကေို အငျတာနကျကနေ လှုံ့ဆျောမှုတှေ ရှိနတော ကွောငျ့ ရခိုငျပွညျနယျမှာ အငျတာနကျပွနျဖှငျ့ပေးဖို့ အစိုးရကို တိုကျတှနျးမှာ မဟုတျသေးဘူးလို့၊ တပျမတျော သတငျးမှနျ ပွနျကွားရေးအဖှဲ့ အတှငျးရေးမှူး ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျး က ပွောလိုကျပါတယျ။ ရခိုငျ လှတျတျောအမတျတှနေဲ့ လူ့အခှငျ့ အရေး လှုပျရှားသူတှကေတော့၊ ဒီယူဆခကျြကို လကျမခံဘဲ ငွငျးပယျလိုကျပါတယျ။
ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျးက မွို့နယျ ၇ မွို့နယျနဲ့၊ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့နယျတှမှော အငျတာနကျ ဖွတျတောကျထား တာ တဈနှဈပွညျ့ပွီဖွဈတဲ့အတှကျ၊ ကမ်ဘာပျေါမှာ အရှညျကွာဆုံး အငျတာနကျဖွတျတောကျမှုကို အဆုံးသတျပေးဖို့ ဒသေခံ တှေ၊ နိုငျငံရေးသမားတှေ၊ တကျကွှလှုပျရှားသူတှကေ ကယျြကယျြလောငျလောငျ တောငျးဆိုနကွေတာပါ။ တပျမတျော သတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့ အတှငျးရေးမှူး ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ရခိုငျမှာ အငျတာနကျ ဖွတျတောကျထားတာကို အဆုံးသတျဖို့ အစိုးရကို အဆိုပွုတိုကျတှနျးမှာ မဟုတျဘူးလို့ နပွေညျတျောမှာ ကငျြးပတဲ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ပွော ကွားလိုကျပါတယျ။ သမ်မတရုံး ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဦးဇျောဌေးကလညျး “ရခိုငျမှာ လုံခွုံရေး အခွအေနတှေကွေောငျ့ အငျတာ နကျ ဖွတျတောကျပေးဖို့၊ တပျမတျောက တောငျးဆိုခဲ့တဲ့အတှကျ အစိုးရက ဆောငျရှကျခဲ့တာဖွဈပွီး၊ ဒီလို အငျတာနကျ ဖွတျတောကျမှုက အကြိုးရှိပါတယျ”လို့ မကွာသေးခငျကလုပျတဲ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတဈခုမှာ ပွောခဲ့ဖူး ပါတယျ။
ရခိုငျပွညျနယျက အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျတဈဦးဖွဈသူ ဒျေါထုမကေတော့ တပျမတျောရဲ့ ဒီအကွောငျးပွခကျြ က ယုတ်တိမတနျဘူးလို့ ခပြေပါတယျ။ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကပျရောဂါကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ သဆေုံးသူ ခွောကျဦးသာရှိ သေးပမေယျ့၊ ရခိုငျနဲ့ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့နယျက တိုကျပှဲတှကွေောငျ့၊ အရပျသား သဆေုံးမူက ၂၀ဝ ကြျောရှိနပေါပွီ။ အငျတာနကျဖွတျတောကျ ပွီးနောကျပိုငျး အရပျသားထိခိုကျသဆေုံးရတဲ့ အရအေတှကျနဲ့ မဖွတျတောကျခငျ ထိခိုကျသဆေုံး ရမှုကို၊ နှိုငျးယှဉျကွညျ့ရငျ ကှာခွားတာကို တှနေို့ငျတယျလို့ ဒျေါထုမကေ ထောကျပွပါတယျ။
လူ့အခှငျ့ရေးလှုပျရှားသူ Fortify Rights အဖှဲ့က နဈကီဒိုငျးမှနျးက၊ အငျတာနကျဖွတျတောကျထားတာဟာ ရခိုငျပွညျသူ တှနေဲ့ နိုငျငံတကာက စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာသူတှေ၊ သတငျးမီဒီယာတှအေတှကျ ဘယျလိုကောငျးကြိုးမှ ရှာမတှဘေူ့းလို့ ထောကျပွ‌ဝဖေနျပါတယျ။ ပို့ဆောငျရေးနဲ့ ဆကျသှယျရေးဝနျကွီးဌာန အမွဲတမျးအတှငျးဝနျ ဦးစိုးသိနျး က‌တော့၊ ရခိုငျပွညျ နယျမွောကျပိုငျးမှာ အငျတာနကျ ဖွတျတောကျထားတာနဲ့ ပတျသကျလို့ “ဆကျသှယျရေးဥပဒအေရ အမြားပွညျသူအကြိုးကို မထိခိုကျဘူးလို့ သုံးသပျနိုငျတဲ့အခြိနျမှသာ အငျတာနကျ ပွနျဖှငျ့ပေးမှာဖွဈပွီး၊ လောလောဆယျ သွဂုတျလ ၁ ရကျနထေိ့ အငျတာနကျ ဖွတျတောကျထားမယျ”လို့ ဇှနျလ ၁၀ ရကျ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ပွောခဲ့ပါတယျ။ HRW ရဲ့ အာရှ ဥပဒေ ရေးရာအကွံပေး Linda Lakhdhir က ရခိုငျနဲ့ ခငျြးပွညျနယျတှမှော မွနျမာအစိုးရရဲ့ ကမ်ဘာ့အရှညျကွာဆုံး အငျတာနကျ ဖွတျတောကျမှုဖွဈသလို ခကျြခငျြးပွနျဖှငျ့ပေးသငျ့ကွောငျးနဲ့ ဒသေခံတှေ လုံခွုံစှာနထေိုငျနိုငျဖို့ သတငျးအခကျြအလကျရရှိဖို့ ဟာ အရေးကွီးကွောငျး တိုကျတှနျး ပွောကွားထားပါတယျ။
တပျမတျောသတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ၊ ရခိုငျပွညျနယျ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ ဂူတာပွငျကြေးရှာ သတျဖွတျမှု ကိစ်စအပျေါ စဈ တရားရုံးက ဆောငျရှကျနတေဲ့ အခွအေနေ၊ AA နဲ့ ပတျသတျမှုရှိတယျဆိုတဲ့သူတှေ ရိုကျနှကျခံရတဲ့ ကိစ်စအပျေါ စုံစမျး စဈ ဆေးနတေဲ့ အခွအေနတှေနေဲ့ ပတျသကျပွီး RFA က မေးမွနျးရာမှာ၊ အဲဒီကိစ်စတှကေို စဈခုံရုံးက ပိုပွီးတိတိကကြ စဈဆေး နဆေဲဖွဈကွောငျး တပျမတျော သတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့ အတှငျးရေးမှူး ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ပွနျလညျဖွကွေား သှားပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/zawmintun-says-army-still-block-internet-in-rakhin e-state-06232020071026.html
Mawlamyine Cement Limited- MCL (ကြိုကျမရောဘိလပျမွစေကျရုံ) သညျ ၂၀၂၀ ခုနှဈ ဇှနျလ ၁ ရကျနမှေ့စ၍ ကြောကျ မိုငျးခှဲခွငျးလုပျငနျးကို ရပျဆိုငျးခဲ့ပွီးဖွဈသညျ့အတှကျ ကြောကျမိုငျးခှဲခွငျးကိစ်စအဝဝသညျ MCL (ကြိုကျမရော ဘိလပျမွေ စကျ ရုံ) နှငျ့ လုံးဝမသကျဆိုငျတော့ကွောငျး စကျရုံ၏ Managing Director, Mr Hatsachai Prahanphap က ဇှနျလ ၈ ရကျနေ့ စှဲဖွငျ့ အကွောငျးကွားခဲ့သညျ။ မညျသို့အကွောငျးကွောငျ့ ကြောကျမိုငျးခှဲခွငျးလုပျငနျးမြား ရပျဆိုငျးလိုကျရသညျကို ကုမ်ပဏီ တာဝနျရှိပုဂ်ဂိုလျအခြို့အား ဆကျသှယျမေးမွနျးရာတှငျ ၎င်းငျးတို့အနဖွေငျ့ ယခုကိစ်စအား ရှငျးပွပွောဆိုရနျ ဆန်ဒမရှိကွောငျး မှနျ သတငျးအဂေငျြစီကို ငွငျးပယျခဲ့သညျ။
“MCL ကိုဖကျစပျထားတဲ့ ထိုငျး SCG နဲ့ မွနျမာဘကျက PLCI တို့ ရှယျယာပွဿနာကိစ်စရှိနတေယျ၊ နပွေညျတျောအထိ သှားပွီးရှငျးကွတယျ၊ အဆငျမပွဘေူး၊ တဈဖကျနဲ့တဈဖကျ လုံးဝကိုညှိမရလို့ စကျရုံပိတျသိမျးတော့မယျ့ အနအေထားအထိ တောငျ ဖွဈသှားနိုငျတယျ”ဟု MCL နှငျ့ နီးစပျသညျ့လုပျငနျးရှငျတဈဦးက မှနျသတငျးအဂေငျြစီသို့ ပွောသညျ။ သို့ရာတှငျ အထကျပါရှယျယာပွဿနာနှငျ့ပတျသကျ၍ SCG နှငျ့ PLCI တာဝနျရှိပုဂ်ဂိုလျမြားကို ဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျခွငျးမရှိသဖွငျ့ အတညျမပွုနိုငျခဲ့ပါ။“လကျရှိ ကနျြနသေေးတဲ့ ကုနျကွမျးတှကေ ဇူလိုငျလ လယျလောကျမှာ ကုနျတော့မယျ၊ သွဂုတျလ ကုနျလောကျဆိုရငျ ဘိလပျမွထေုတျလုပျ နတောတှလေုံးဝကို ရပျနားသှားသလောကျပါပဲ”ဟု အဆိုပါလုပျငနျးရှငျက ဆကျ ပွောသညျ။
တဈနလြေှ့ငျ ဘိလပျမွတေနျခြိနျ ၅၀ဝဝ ထုတျလုပျသညျ့ MCL ဘိလပျမွစေကျရုံသညျ ထိုငျးနိုငျငံ SCG-Siam Cement Group က အစုရှယျယာ ၇၀ ရာခိုငျနှုနျးနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံသားပိုငျ Pacific Link Cement Industries Ltd. က အစုရှယျယာ ၃၀ ရာခိုငျနှုနျး စုစုပေါငျး အမရေိကနျဒျေါလာသနျး ၄၀ဝ ဖွငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံထားသညျ့ ပုဂ်ဂလိကအကြိုးတူ ဖကျစပျလုပျငနျးဖွဈ သညျ။ Pacific Link Cement Industry- PLCI သညျ ၁၆-၃-၂၀၁၆ ရကျနမှေ့စပွီး ၁၅-၃-၂၀၃၆ ရကျအထိ နှဈပေါငျး ၂၅ နှဈတိုငျ ပြားတောငျဒသေတှငျ လိုအပျသညျ့ စကျမှုကုနျကွမျး ထုံးကြောကျမြားကို ထုတျလုပျခှငျ့ ရရှိထားသညျ။
MCL ဘိလပျမွစေကျရုံ စတငျလညျပတျပွီးနောကျပိုငျးတှငျ အတ်ထရံမွဈကွောငျးတလြှောကျသင်ျဘောကွီးမြား အဆကျမပွတျ သှားလာမှုကွောငျ့ မွဈကမျးပါးပွိုကခြွငျး၊ ကမျးပါးအနီးအနားရှိ နအေိမျမြားယိမျးယိုငျသှားခွငျး၊ ရနေသေတ်တဝါမြား ရှားပါးလာ ခွငျးနှငျ့ ကြောကျမိုငျးခှဲမှုကွောငျ့ အိမျနံရံအခြို့ တုနျခါ၍အကျကှဲမှုဖွဈပျေါခဲ့သဖွငျ့ ဒသေခံမြားမှ ကနျ့ကှကျမှုမြားရှိခဲ့သညျ။ ထို့အပွငျ ၂၀၁၇ ခုနှဈ ဧပွီလ ၁ ရကျနမှေ့ စကျရုံစတငျ လညျပတျခဲ့ရာတှငျ လိုအပျသော လြှပျစဈမီး မဂ်ဂါဝပျ ၄၀ ကို ကြောကျ မီးသှေးအသုံးပွုရသညျ့အတှကျ ဒသေခံမြားနှငျ့ သဘာဝဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေးအဖှဲ့တို့၏ မကွာခဏ ကနျ့ကှကျခံရသညျ့ စကျရုံတဈရုံအဖွဈထငျရှားသညျ။ http://burmese.monnews.org/2020/06/23/mcl-%e1%80%98%e1%80%ad% e1%80%9c%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%80%e1%80
၁၅။ ရဖွေူမွို့နယျ သုံးလောငျးပွိုငျလူသတျတရားခံဖမျးဆီးရမိ၊ ရာဘာခွံလုပျသားနှဈဦး မူးယဈဆေးဝါးသုံးစှဲရနျ ဖုနျး အပေါငျခံ ထား မှုကွောငျ့ဖွဈ
တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး၊ ရဖွေူမွို့နယျ ရေး-ထားဝယျကားလမျးပျေါရှိ ဥသာရံကြေးရှာအနီး မီးရထားသံလမျးအစောငျ့ ဝနျထမျးမိသားစု သုံးလောငျးပွိုငျလူသတျမှုကြူးလှနျသညျ့ တရာခံမြားအား ဇှနျလ ၂၄ ရကျနကေ့ ဖမျးဆီးရမိခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ ဥသာရံကြေးရှာမှ ရာဘာခွံလုပျသားနှဈဦး မူးယဈဆေးဝါးသုံးစှဲရနျ ဖုနျးလာရောကျအပေါငျခံထားရာမှ လူသတျမှုဖွဈပျေါခဲ့ကွောငျး သိရှိရသညျ။“တရားခံကတော့ မိပွီဗြ၊ မနညေ့က မိထားတာ ခငျဗြား”ဟု ရဖွေူမွို့မရဲစခနျး ထံမှ တာဝနျရှိသူတဈဦးက မှနျသတငျးအဂေငျြစီသို့ အတညျပွုပွောကွားခဲ့သညျ။
ဖွဈစဉျမှာ ရေးမွို့နယျ ခြောငျးတောငျရှာနေ ကြျောမငျးထှနျးနှငျ့ ရဖွေူမွို့နယျ ဥသာရံကြေးရှာနေ ဝိုငျကတေို့သညျ ရဖွေူမွို့ နယျ ၂၃ မိုငျဝနျးကငျြ ရာဘာခွံအတှငျး ခွံခုတျလုပျသားအဖွဈလုပျကိုငျကွပွီး အခငျးဖွဈပှားသညျ့ ဇှနျလ ၁၃ ရကျနေ့ ည ၁၁ နာရီခနျ့တှငျ မူးယဈဆေးဝယျရနျ ကိုငျဆောငျထားသောဖုနျးအား အသတျခံရသူ အောငျကြျောထှနျးထံ အပေါငျထားခဲ့ ကွောငျး၊ အဆိုပါ ည ၁ နာရီခနျ့တှငျ အပေါငျထားသော ဖုနျးအားပွနျတောငျးရာ မရသဖွငျ့ သုံးလောငျးပွိုငျ လူသတျမှုကြူး လှနျခဲ့သညျကို စဈဆေးပျေါပေါကျခဲ့ကွောငျး ထားဝယျခရိုငျပွနျ/ဆကျသတငျးတှငျ ဖျောပွသညျ။
အဆိုပါလူသတျမှုကြူးလှနျရာတှငျ အသုံးပွုခဲ့သညျ့ သဈသားရိုးတပျ ငါးမနျးစှယျဓားအား ဥသာရံကြေးရှာနေ သိနျးသနျးဝငျး ၏ နအေိမျတှငျ ပွနျလညျသိမျးဆီးရမိပွီဟု သတငျးတှငျဖျောပွသညျ။ အဆိုပါ အသတျခံရသူမိသားစုမှာ ဥသာရံကြေးရှာအနီး ရထားသံလမျး တံခါးအဖှငျ့အပိတျ ပွုလုပျသညျ့ ဝနျထမျး ကိုအောငျကြျောထှနျး (၂၆ နှဈ)၊ ဇနီး မခငျမြိုးဝေ (၂၈ နှဈ) နှငျ့ အသကျတဈနှဈခှဲအရှယျ ကလေးငယျတဈဦးတို့ ဖွဈသညျ။ အဆိုပါ သုံးလောငျးပွိုငျလူသတျမှုနှငျ့ပတျသကျ၍ ရဖွေူမွို့မ ရဲစခနျးမှ ရာဇသတျကွီး ဥပဒပေုဒျမ ၃၀၂ အရ အမှုဖှငျ့ထားသညျ။ http://burmese.monnews.org/
ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါအလှနျတှငျ သြှမျးပွညျ ပွညျသူမြား၏ စီးပှားရေး ကဏ်ဍနှငျ့ ပတျသကျပွီး တိကသြညျ့ အဖွမေရခဲ့ကွောငျး ဦးညီလေးခမျြးက ပွောဆိုလိုကျသညျ။
၂၀၂၀ မလေ ၁၈ နှငျ့ ၁၉ သြှမျးပွညျနယျလှတျတျော အထူးအစညျးအဝေး (ဇှနျ ၂၄) ရကျတှငျ ပငျးတယမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ(၂) ဦးညီညီ (ခ) ဦးညီလေးခမျြး က ကိုဗဈ-၁၉ အလှနျ သြှမျးပွညျ ပွညျသူလူထု ကနျြးမာရေး၊ ပညာရေး ၊ စီးပှားရေး၊ စိုကျပြိုးရေးလုပျငနျးဆောငျရှကျခကျြမြားကို လှတျတျောတှငျး မေးမွနျးခဲ့သညျ။ ထိုမေးမွနျးခကျြနှငျ့ပတျသကျပွီး သကျဆိုငျရာ ဝနျကွီးမြားအသီးသီးက လာရောကျဖွကွေားခဲ့သျောလညျး ကိုဗဈ-၁၉ အလှနျ စီးပှားရေးကဏ်ဍကို ဖွဆေိုပေးခဲ့သညျမှာ ကနြေပျမှုမရှိကွောငျး ဦးညီလေးခမျြးက ပွောသညျ။“ စီးပှားရေး လုပျငနျးက လှဲပွီး ကနြေပျအားရမှု ရှိပါတယျ။ အခွခေံ လူတနျးစားတှရေဲ့ ဘဝက အရေးကွီးဆုံးပဲ။ ကဏ်ဍလေးဖွသှေားတာတော့ မတှဘေူ့း။ စီမံကိနျးဝနျကွီးက ဖွသှေားတာတော့ မပွညျ့စုံဘူး။ အခွခေံလူတနျးစားတှအေတှကျ မပါတော့မပွညျ့စုံဘူးပဲ ပွောပါရစေ”ဟု ဦးညီလေးခမျြး က သြှမျးသံတျော ဆငျ့ ကိုပွောသညျ။
ကနျြးမာရေး၊ ပညာရေး နှငျ့ စိုကျပြိုးရေး ကဏ်ဍမှာ သကျဆိုငျရာ ဝနျကွီးမြားက ပွနျလညျဖွကွေားသှားတာ ပွညျ့စုံမှု ရှိသျော လညျး စီးပှားရေးကဏ်ဍကို ပွညျ့စုံစှာ ဖွကွေားခဲ့ခွငျးမရှိကွောငျး ဦးညီလေးခမျြး က ဆိုသညျ။ ကိုဗဈ-၁၉ ကွောငျ့ သြှမျးပွညျ တဝှမျးတှငျ စီးပှားရေး၊ ကနျြးမာရေး၊ ပညာရေး ထိခိုကျမှုမြားရှိနကွေောငျး၊ ထိုထိခိုကျမှုကွောငျ့ သြှမျးပွညျ အစိုးရ အနဖွေငျ့ ကိုဗဈ-၁၉ အလှနျ ဆောငျရှကျမညျ့ အရာကိုသိလိုသညျ့ ရညျရှယျခကျြဖွငျ့ မေးမွနျးခွငျးဖွဈသညျဟု ဦးညီလေးခမျြးက ပွော သညျ။
ကိုဗဈကာလအတှငျး သြှမျးပွညျသို့ပွနျလာသညျ့ ထိုငျး၊ တရုတျ နိုငျငံသို့ သှားရောကျ အလုပျလုပျသညျ့ ရှပွေ့ောငျးအလုပျ သမား သိနျးခြီရှိကွောငျး သိရသညျ။ ထို ကိုဗဈ-၁၉ ဆကျလကျဖွဈပှားနပေါက သြှမျးပွညျ ဒသေခံမြား စားဝတျနရေေးခကျခဲ ကာ၊ ပွဿနာမြားစှာ ရငျဆိုငျလာနိုငျကွောငျးလညျး သြှမျးပွညျသူမြားက ပွောဆိုလိုကျသညျ။ ကိုဗဈ – ၁၉ ရောဂါကွောငျ့ မွနျမာပွညျတှငျး သာမက ကမ်ဘာတှငျလညျး စီးပှားရေး ကဆြငျးမှု သာမက ပွညျပမှာလညျး စီးပှားရေးကွောငျ့ ကုမ်ပဏီမြားစှာ အကွပျအတညျးဖွဈပွီး ဒဝေါလီ ခံခဲ့ရကွောငျးသိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/17246
ကခငျြပွညျနယျ၊ ပူတာအိုမွို့နယျအတှငျးရှိ အခွခေံပညာသငျကြောငျးမြားကို COVID-19 ကာလအတှငျး ပညာသငျကွားရေး စနဈမြားကို ပွောငျးလဲသငျကွားရနျ စီစဉျထားသညျဟု သိရသညျ။
ပူတာအိုမွို့ရှိ၊ ကောငျကထောငျရပျကှကျရှိ အထကျတနျးကြောငျးအုပျဆရာကွီး ဦးဆိုငျးခှနျက COVID-19 ကာလအတှငျး ပွောငျးလဲထားသညျ့ ပညာသငျကွားရေးလုပျငနျးစဉျမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ယခုကဲ့သို့ ပွောသညျ။“အထကျတနျးကို အရငျ သငျမယျ၊ တဈခနျးမှာ အယောကျ (၂၀) ထား သငျမယျ။ လူဦးရမြေားတဲ့ ကြောငျးတှမှောဆိုရငျ မနကျပိုငျးနဲ့ ညနပေိုငျး သငျသှားမှာဖွဈတယျ။ တပတျသငျပွီး တပတျပွနျနား အဲ့လိုသငျသှားမယျ။ သငျထားတဲ့စာတှကေို အိမျစာအဖွဈ နားတဲ့ အပတျမှာလုပျရမယျ။ (၉)တနျး၊ (၁၀)တနျး ကို အရငျသငျကွညျ့ပွီး အဆငျပွမှေ မူလတနျး၊ အလယျတနျးတှကေို ပွနျ သငျမှာဖွဈပါတယျ။ အဆငျမပွရေငျ ကြောငျး ပွနျပိတျမယျ။” ဇူလိုငျလ ၁၃ ရကျနေ့ မှစတငျ၍ ၁၈ ရကျနအေ့ထိ ၉ တနျး နှငျ့ ၁၀ တနျးတို့အား နာမညျစာရငျးမြား စတငျကောကျယူသှားမညျဖွဈပွီး ၂၁ ရကျနတှေ့ငျ ကြောငျးစတငျဖှငျ့လှဈသှားမညျ ဟု ကြောငျးအုပျကွီး ဦးဆိုငျးခှနျ က ဆကျပွောသညျ။
COVID-19 ကာလ ရောဂါတားဆီးကာကှယျနိုငျရေးအတှကျ ယခုကဲ့သို့ ပွောငျးလဲစီစဉျရခွငျးဖွဈပွီး၊ နဝမ တနျးနှငျ့ ဒဿမ တနျး ကြောငျးသူ/သားမြားမှာ MASK မြားကို စနဈတကြ သုံးတတျရနျ သငျကွားပေးရသညျမှာ လှယျကူသညျ့အတှကျ ၎င်းငျး တို့အား ယခုကဲ့သို့ အရငျဆုံး ကြောငျးဖှငျ့ပေးရခွငျးဖွဈသညျဟု သိရသညျ။ ကြောငျးသူ/သားမြားအတှကျ Mask (၂) ခုစီနှငျ့ Face Shield (၁) ခု စီကိုလညျး ပညာရေးဝနျကွီးဌာနက ထောကျပံ့ပေးရနျ စီစဉျထားသညျဟုလညျး သိရသညျ။
ထို့အပွငျ မူလတနျးနှငျ့ အလယျတနျး ကလေးငယျမြားအတှကျ ပထမအသုတျအနဖွေငျ့ ကြောငျးစတကျရမညျ့ နဝမတနျး နှငျ့ ဒဿမတနျး ကြောငျးသူ/သား နှငျ့ ဆရာ/ဆရာမမြားက COVID-19 ကာလအတှငျး စနဈတကြ Mask မြား တကျတတျရနျ နှငျ့ လကျစနဈတကဆြေးတတျရနျ သငျကွားပေးရနျ စီစဉျထားသညျဟုလညျး ပွောသညျ။ ကြောငျးသားသဈမြားအား တဈရကျခွား ကြောငျးအပျလကျခံပေးသှားမညျဖွဈပွီး ကြောငျးသားဟောငျးမြားကို နစေ့ဉျလကျခံပေးသှားမညျဟု ကြောငျး အုပျကွီး က ပွောသညျ။ ယခုကဲ့သို့စီစဉျရခွငျးသညျ ကြောငျးအပျခြိနျ လူစုလူဝေးမဖွဈစရေနျ ဖွဈသညျဟု ဆိုသညျ။ https:/ /www.bnionline.net/mm /news-73799
အိန်ဒိယ-မွနျမာ အမှတျ (၂) နယျစပျကုနျသှယျရေးစခနျး ခငျြးပွညျနယျ ရိခေါဒါရျမွို့ အနီးတဝိုကျတှငျ ဇှနျ ၂၂ ရကျနံနကျပိုငျး ၅ နာရီ ဝနျးကငျြခနျ့က အငျအားအသငျ့အတငျ့ရှိသညျ့ မွငေလငျြလှုပျခတျမှုဖွဈပှားခဲ့ပွီး လူနအေိမျနှငျ့ အဆောကျအဦးမြား ပကျြစီးမှုရှိခဲ့သညျ။
အဆိုပါ မွငေလငျြလှုပျခတျမှုကွောငျ့ ရိခေါဒါရျမွို့၊ အမှတျ(၁)ရပျကှကျရှိ ရိပွညျထောငျစုရိပျသာ မကျြနှာကကျြအကျကှဲ ကှာကပြကျြစီးမှု၊ ပွနျကွာရေးနှငျ့ပွညျ့သူ့ဆကျဆံ‌ရေးဌာနရုံး အဆောကျအဦးအရှမေ့ကျြနှာစာ နံရံမြားအကျကှဲကှာ ကပြကျြ စီးမှု၊ ရိခေါဒါရျမွို့ အမှတျ(၂)ရပျကှကျရှိ ဦးထနျးအောငျ နအေိမျ နှဈထပျတိုကျ ပငျမဆောငျနဲ့ကပျလကျြတှငျရှိသော ဝရံတာ၊ မီးဖိုဆောငျ၊ ပနျးတငျခုံမြား အကျကှဲပကျြစီးမှု၊ ဒျေါဇှနျကိမျး၏ နအေိမျ တဈထပျတိုကျ အတှငျးအိပျခနျးနံရံ၊ မီးဖိုခြောငျ၊ မီးဖိုခနျးလှခေါးအိမျမြားအကျကှဲပကျြစီးမှု၊ ဦးငှနျနယျကြဲအိုတို့ နအေိမျ နှဈထပျတိုကျ ဆောကျလုပျဆဲအတှငျးနံရံမြား အကျကှဲ ပကျြစီးခဲ့သညျဟု ရိဒျခေါဒါရျမွို့ ပွနျဆကျဦးစီးမှူး ဦး LalPeklawma ကပွောသညျ။
“ထိခိုကျပကျြစီးတာတော့ရှိတယျ မနနေိုငျလောကျအောငျ ပကျြစီးတာတော့မရှိဘူး၊ အိမျတှကေ အကျတာရှိတယျ တဈခြို့ နရောမှာကတြော့ တျောတျောအကျကှဲတယျ ရှပွေ့ောငျးစရာတော့မလိုပါဘူး၊ ထိတျလနျ့ကွတယျ၊ ဒီလိုမြိုးမကွုံဖူးဘူးဆို တော့ ဒါပမေဲ့လူတှထေိခိုကျပကျြဆီးမှုတော့မရှိဘူး၊ ကနြျောသိသလောကျဆိုရငျတော့ အဲလောကျပွငျးအားကောငျးတာမြိုး တော့ မကွုံဖူးပါဘူး။ ဒီတဈခေါကျပဲ၊ ရုံးတော့တကျလို့ရပါတယျ။ ရုံးက အကျပဲအကျတာဆိုတော့ တကျလို့ရပါတယျ” ပွနျဆကျဦးစီးမှူး ဦး LalPeklawma ကပွောသညျ။
လှုပျခတျသှားသညျ့ မွငေလငျြနှငျ့ပတျသကျ၍ ရိခေါဒါရျမွို့တှငျ နထေိုငျသူအမြိုးသမီးတဈဦးကလညျး “ဒီနမေ့နကျ ငလငျြ လှုပျတာတော့ အရမျးကွောကျစရာကောငျးတယျ အိမျထဲက ဘီရိုတံခါးတှေ ပွုတျကြ မှနျတငျခုံ မှနျလညျးကှဲ ဒီလိုမြိုးတဈခါမှ မကွုံဖူးဘူး တဈခြို့အိမျတှဆေိုလညျး သိပျနလေို့မရတော့လောကျထိ ပကျြစီးတာတှရှေိတယျ”ဟု ပွောသညျ။ အဆိုပါ မွငေလငျြ လှုပျခတျမှုကွောငျ့ တဖကျ မီဇိုရမျပွညျနယျ ဇိုခေါထာရျကြေးရှာတှငျလညျး ဘာသာရေးအဆောကျအဦး တဈခြို့ လညျး အနညျးငယျပကျြစီးမှုရှိခဲ့သညျဟု သိရသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-73732
ရေးမွို့နယျအတှငျး ၂၀၁၅ ခုနှဈရှေးကောကျပှဲတှငျ မဲရုံ ၁၁၀ ရုံရှိရာက လာမညျ့ရှေးကောကျပှဲ၌ မဲရုံ ၁၇ ရုံ ထပျမံတိုးမွှငျ့ရနျ လြာထားကွောငျး ရေးမွို့နယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲထံက သိရသညျ။ ရေးမွို့နယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ အဖှဲ့ခှဲ ဥက်ကဌ ဦးညီသှေးက ” မဲရုံက အတိုးအလြော့ရှိနိုငျပါသေးတယျ၊ လကျရှိအနနေဲ့ကတော့ မဲရုံအရအေတှကျနဲ့ မဲရုံတညျနရော သတျမှတျလြာထားတာတှေ၊ မဲဆန်ဒရှငျစာရငျး ပွငျဆငျဖွညျ့စှကျပယျဖကျြတာတှကေတော့ လစဉျဆောငျရှကျနပေါတယျ ” ဟု သံလှငျတိုငျးမျကို ပွောသညျ။
လကျရှိအခြိနျအထိ ကောကျခံရရှိသော မဲပေးခှငျ့ရှိသူဦးရေ ၂၀၃၉၃၉ ဦးရှိပွီး ၂၁၀ဝဝဝ ကြျောရှိလာမညျဟု ခနျ့မှနျးထား ကွောငျးနှငျ့ ယငျးတို့အထဲတှငျ ပထမအကွိမျမဲပေးမညျ့သူ ၃၀ဝဝဝ ကြျော ပါဝငျလာနိုငျကွောငျး သိရသညျ။ ”တပျမဲရုံ ဆောငျ ရှကျမှုအခွအေနကေတော့ ဥပဒေ၊ နညျးဥပဒေ၊ ညှနျကွားခကျြနဲ့အညီဖွဈစဖေို့ သကျဆိုငျရာတပျရငျးတပျဖှဲ့မြားနဲ့ ညှိနှိုငျး ဆဲဖွဈပါတယျ ” လို့ ဦးညီသှေးက ပွောကွားသညျ။ ပွီးခဲ့သော ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲတှငျ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျက ပွညျသူ့လှတျတျော၊ အမြိုးသားလှတျတျော(၁)ဦး၊ ပွညျနယျလှတျတျော(၁)ဦး အနိုငျရရှိထားပွီး မှနျအမြိုးသားပါတီက အမြိုးသားလှတျတျော(၁)ဦး ပွညျနယျလှတျတျော (၁)ဦး အနိုငျရရှိထားသညျ။
ရေးမွို့နယျအတှငျး ပါတီမြားအနဖွေငျ့ အမြိုးသားဒီမိုရစေီအဖှဲ့ခြုပျ၊ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ၊ တိုငျးရငျးသား စညျးလုံးညီညှတျရေးပါတီ၊ မှနျညီညှတျရေးပါတီ၊ ပွညျထောငျစုကောငျးကြိုးဆောငျပါတီ၊ ညီညှတျသောဒီမိုကရကျတဈပါတီ၊ အမြိုးသားနိုငျငံရေးဒီမိုကရကျတီပါတီ စုစုပေါငျး ၇ ပါတီရှိကွောငျး ရေးမွို့နယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲထံက သိရ သညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-73787
အငျတာနကျဖွတျတောကျမှုခကျြခွငျးရပျ ကမျပိနျးဦးဆောငျသူ လူငယျ ၂ ဦးကို ငွိမျးစုစီ ပုဒျမ-၁၉ နဲ့ ကြောကျဖွူမွို့မ ရဲစခနျး မှာ မွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူး ရဲမှူးအောငျမျောက တရားလိုပွုလုပျအမှုဖှငျ့ထားပါတယျ။ ရခိုငျပွညျနယျရှိမွို့နယျ ၇ ခုနဲ့ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့နယျတို့မှာ အငျတာနကျဖွတျတောကျထားတာ ၁ နှဈပွညျ့ အထိမျးအမှတျအဖွဈ ဇှနျ ၂၁ ရကျနကေ့ ကနျပိနျးပွု လုပျခဲ့ကွတာနဲ့ ပတျသကျပွီး တရားစှဲခံရတာဖွဈပါတယျ။
အုနျးတောပရဟိတဖောငျဒေးရှငျးအဖှဲ့ ခေါငျးဆောငျ ကိုမငျးဇအောငျ က “ကနြျောတို့ကို မွို့နယျရဲစခနျးကနပွေီး စှဲတာပေါ့။ အငျတာနကျပိတျတာ ၁ နှဈပွညျ့ဆိုပွီးတော့ ၃၆၅ ရကျ No Internet ဆိုပွီးတော့ ဆိုငျးဘုတျကိုငျပွီးတော့ ဓာတျပုံရိုကျကွ ပွီးတော့ ဖစျေ့ဘှတျချတငျကွတာပေါ့။ အဲဒါအပျေါမှာ သူတို့က ဘယျလိုမွငျလညျးတော့မသိဘူး၊ ငွိမျးစုစီပုဒျမ-၁၉နဲ့ ငွိတယျ ဆိုပွီးတော့ ကနြျောတို့ကိုဆငျ့ချေါပွီး တရားစှဲတယျလို့ပွောတယျ။ သူတို့ပွောတာကတော့ ဗဟိုက အထကျကစှဲခိုငျးတယျလို့ ပွောတာပဲ။”လို့ ဒီဗှီဘီကို ပွောပါတယျ။
တရားစှဲဆိုခံရတဲ့ သန်တာရငျသှီး မြိုးဆကျသဈလူငယျမြားအဖှဲ့ ဥက်ကဋ်ဌဌ ကိုနစေိုးခိုငျက “ကနြျောတို့ လုပျတာကလညျး အငျတာနကျ ပိတျထားတဲ့ကိစ်စလေးနဲ့လုပျတာ၊ ဒီမိုကရစေီစနဈရဲ့ အခွခေံကတြဲ့ သတငျးအခကျြအလကျမြှဝမှေု၊ ပှငျ့လငျးမွငျ သာမှု၊ လူသားတိုငျး တနျးတူအခှငျ့အရေးရရှိဖို့ အငျတာနကျကိုတောငျးဆိုကွတာ။ ကနြျောတို့ ရခိုငျပွညျမှာဆိုရငျ ကိုဗဈ လညျးဖွဈနတေယျ၊ စဈလညျးဖွဈနတေယျ၊ အဲဒီအခြိနျမှာ ရခိုငျပွညျသူတှေ သတငျးအခကျြအလကျကို အခြိနျမီရဖို့အတှကျ အငျတာနကျ ဖှငျ့ပေးဖို့လိုတဲ့အကွောငျး၊ အငျတာနကျပိတျထားတာလညျး တဈနှဈပွညျ့တဲ့အတှကျ အငျတာနကျကို ပွနျဖှငျ့ ပေးပါဆိုပွီး ကနြျောတို့ တောငျးဆိုကွတာပါ။ ဒါလေးကို ငွိမျးစုစီနဲ့ငွိတယျဆိုတော့ ဒီမိုကရစေီစနဈကွီးက ဘယျလိုဖွဈသှား ပွီလဲဆိုတာလညျး ပွနျပွီးတော့တောငျ သုံးသပျရမလိုဖွဈသှားပွီ” လို့ ပွောပါတယျ။
ရခိုငျပွညျနယျမွို့နယျ ၇ ခုနဲ့ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့နယျမှာ အငျတာနကျဖွတျတောကျထားတာဟာ ဇှနျ ၂၁ ရကျနကေ့ တဈနှဈပွညျ့ခဲ့ပွီဖွဈတာကွောငျ့ အငျတာနကျပွနျလညျဖှငျ့ပေးဖို့ကို ရခိုငျပွညျနယျ ၁၇ မွို့နယျနဲ့ ရနျကုနျမွို့ အပါအဝငျ မွို့ကွီးတှမှော အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးတှပေူးပေါငျးကာ ကမျပိနျးပွုလုပျခဲ့ကွပါတယျ။ ကမျပိနျးပွုလုပျခဲ့တာကွောငျ့ ဇှနျ ၂၁ ရကျနေ့ ညနကေ ရမျးဗွဲမွို့နယျက လူငယျ ၁ ဦးကို ငွိမျးစုစီ ပုဒျမ-၁၉နဲ့ အမှုဖှငျ့လှဈခံခဲ့ရသလို ရနျကုနျမွို့မှာလညျး ကမျပိနျး ဦးဆောငျသူတှကေိုလညျး ငွိမျးစုစီဥပဒနေဲ့ တရားစှဲဆိုထားပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/396028
၂၁။ ဖားကနျ့ဒသေအတှငျးသို့ ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားမြားက မြှျောလငျ့ခကျြဖွငျ့လာရောကျကွသျောလညျး မူးယဈဆေးဝါး အန်တရာယျနှငျ့လုံခွုံမှုမရှိသောလုပျငနျးခှငျမြားကွောငျ့ ဒုက်ခမြိုးစုံကွုံတှနေ့ကွေကွောငျး ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ပွောကွား
ဖားကနျ့ဒသေအတှငျးသို့ ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားမြားက မြှျောလငျ့ခကျြဖွငျ့ လာရောကျကွသျောလညျး မူးယဈဆေးဝါး အန်တရာယျနှငျ့ ဘေးကငျးလုံခွုံမှုမရှိသော လုပျငနျးခှငျ အခွအေနမြေားကွောငျ့ ဒုက်ခမြိုးစုံ ကွုံတှနေ့ကွေကွောငျး လူမှုဝနျထမျး၊ ကယျဆယျရေးနှငျ့ ပွနျလညျနရောခထြားရေး ဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာဝငျးမွတျအေးက ပွောကွားသညျ။
ဇှနျ ၂၂ ရကျ မှနျးလှဲပိုငျးက လူမှုဝနျထမျး၊ ကယျဆယျရေးနှငျ့ ပွနျလညျနရောခထြားရေး ဝနျကွီးဌာန အစညျးအဝေးခနျးမ၌ Video Conferencing ဖွငျ့ ပွုလုပျသညျ့ ဖားကနျ့ရတနာမွရှေိ ဒသေခံမြားနှငျ့ ရှပွေ့ောငျး အလုပျသမားမြားဘဝ ဘေးကငျး လုံခွုံစှာ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး လုပျငနျးစဉျအတှကျ “ဖားကနျ့ဒသေရှိ ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားမြားအတှကျ ပွနျလညျထူထောငျ ရေးလုပျငနျးမြားဆိုငျရာ လုပျငနျးအဖှဲ့”၏ (၈) ကွိမျမွောကျညှိနှိုငျးအစညျးအဝေး၌ အမှာစကားပွောကွားရာတှငျ ပွညျထောငျ စုဝနျကွီးက ယငျးကဲ့သို့ ထညျ့သှငျး ပွောကွားခဲ့ကွောငျး ပွနျကွားရေး ဝနျကွီးဌာန၏ သတငျးထုတျပွနျခကျြအရ သိရသညျ။
အစညျးအဝေး၌ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာဝငျးမွတျအေးက ရတနာနယျမွေ ဖွဈသညျ့အတှကျ သယံဇာတနှငျ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေး၊ မွယောစီမံခနျ့ခှဲရေးသညျလညျး အရေးကွီးကွောငျး၊ ဖားကနျ့ဒသေအတှငျးသို့ ရှေ့ ပွောငျးအလုပျသမားမြားသညျ မြှျောလငျ့ခကျြဖွငျ့လာရောကျကွခွငျးဖွဈကွောငျး၊ သို့သျောလညျး မူးယဈဆေးဝါး အန်တရာယျ နှငျ့ ဘေးကငျးလုံခွုံမှုမရှိသော လုပျငနျးခှငျ အခွအေနမြေားကွောငျ့ ဒုက်ခမြိုးစုံ ကွုံတှနေ့ကွေရကွောငျး၊ ဘေးကငျးလုံခွုံ သော အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးမြား ဖျောဆောငျရေးနှငျ့ ပွနျလညျထူထောငျရေးလုပျငနျးမြားကို မဖွဈမနဆေောငျရှကျ ရမညျဖွဈကွောငျး၊ ယခငျ အစညျးအဝေးတှငျ ဆုံးဖွတျခကျြ ၁၆ ခကျြ ခမြှတျဆောငျရှကျခဲ့ပွီး ဆောငျရှကျဆဲ အနဖွေငျ့ အခကျြ ၁၃ ခကျြနှငျ့ ဆောငျရှကျပွီးအနဖွေငျ့ သုံးခကျြရှိခဲ့ကွောငျး၊ ဆောငျရှကျနဆေဲဖွဈသညျ့ လုပျငနျးမြားသညျလညျး ပွီးပွတျအောငျ ဆောငျရှကျ၍မရနိုငျသေးသညျ့ လုပျငနျးရပျမြားဖွဈပွီး အခြိနျယူဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး၊ လုပျငနျး အမြား စုသညျ လုံခွုံရေးနှငျ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးတို့အပျေါ မူတညျကွောငျး ပွောကွားသညျ။
ဖားကနျ့ဒသေအတှငျးရှိ ရှပွေ့ောငျး အလုပျသမားမြားအတှကျ ပွနျလညျထူထောငျရေးဆိုငျရာ လုပျငနျးအဖှဲ့ကို ၂၀၁၈ ခုနှဈ အောကျတိုဘာတှငျ ဖှဲ့စညျးခဲ့သညျမှာ တဈနှဈနှငျ့ရှဈလခနျ့ကွာမွငျ့ခဲ့ပွီဖွဈကွောငျး၊ ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားမြားအတှကျ ပွနျ လညျထူထောငျရေးဟု ဆိုသျောလညျး ဖားကနျ့ဒသေ တဈခုလုံးအတှကျ အရေးကွီးသညျ့ လုပျငနျးစဉျတဈခု ဖွဈကွောငျး၊ လုပျငနျးအဖှဲ့၏ ဆောငျရှကျမှုမြားကို သုံးသပျကွညျ့ရာတှငျ ကောငျးသောအရှေ့ မြားစှာရှိကွောငျး၊ ရရှေညျဆောငျရှကျရမညျ့ လုပျငနျး ဖွဈပါကွောငျး၊ ဖားကနျ့ဒသေ ဘေးကငျးလုံခွုံစှာ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး လုပျငနျးစဉျအတှကျ ရညျရှယျခကျြဖွငျ့ လုပျငနျး အဖှဲ့ခှဲခွောကျဖှဲ့ ဖှဲ့စညျးဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး၊ အရေးအကွီးဆုံး ကိစ်စသညျ လုံခွုံရေးနှငျ့ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးဖွဈ ကွောငျး ပွညျထောငျစုဝနျကွီးက ပွောကွားသညျ။ https://news-eleven.com/article/179751
သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး လားရှိုးမွို့လယျခေါငျတှငျတညျရှိသညျ့ မနျဆူဈေး နာမညျကို “ ရှခေမျြးမွေ့” ဆိုငျးဘုတျလာတငျ သညျ့အပျေါ ဒသေခံမြား ကနျ့ကှကျခဲ့ကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။
လားရှိုးမွို့နယျ စညျပငျသာယာရေး ဌာနပိုငျ မနျဆူဈေး၊ ဈေးအကြိုးဆောငျ ဥက်ကဌ ဦးမောငျငယျ ဦးစီးပွီး ဈေးသူ၊ ဈေးသား (၃၃၀) ဦး တို့ မှ မနျဆူဈေး အား “ ရှခေမျြးမွေ့” ဈေးအဖွဈ အမညျပွောငျးပေးရနျ တငျပွသညျ့အတှကျ ယမနျနေ့ (ဇှနျ ၂၂) ရကျနတှေ့ငျ မနျဆူဈေး ကို “ ရှခေမျြးမွေ့” ဈေးဟု ဆိုငျးဘုတျတငျခဲ့ကွောငျး လားရှိုးမွို့စညျပငျသာယာရေး ဖစျေ့ဘုတျတှငျ ရေးသားဖျောပွထားသညျ။“ရှခေမျြးမွဈေ့ေး”ဟု ဆိုငျးဘုတျတငျပွီးနောကျ လားရှိုးဒသေခံမြားက ကနျ့ကှကျမှုမြား ပွုလုပျ ကွရာ (ဇှနျ ၂၂ ရကျ ညနေ ၄ နာရီဝနျးကငျြတှငျ ဆိုငျးဘုတျကို စညျပငျသာယာမှပွနျလညျဖွုတျပေးခဲ့ကွောငျး လားရှိုးဒသေခံ လညျးဖွဈ ၊ သြှမျးလူငယျအဖှဲ့ ဥက်ကဌလညျးဖွဈသညျ့ စိုငျးဟနျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကို ပွောသညျ။
လားရှိုးမွို့လယျခေါငျတှငျ တညျရှိသညျ့ မနျဆူဈေးနာမညျ သညျ မနျဆူဘုရားအနီးတှငျ တညျရှိပွီး၊ လှနျခဲ့သညျ့ နှဈပေါငျးမြား စှာကတညျးက တညျရှိသညျ့ နာမညျဖွဈသကဲ့သို့ သြှမျးနာမညျလညျးဖွဈကွောငျး၊ ထိုနာမညျကို သကျဆိုငျရာကပွောငျးလဲ ခငျြတိုငျး ပွောငျးလဲခှငျ့မရှိကွောငျးလညျး လားရှိုးဒသေခံမြားက ပွောဆိုလိုကျသညျ။ ထို့အပွငျ သြှမျးပွညျနယျ လှတျတျော အမတျမြားကလညျး မနျဆူဈေးနာမညျကိုသာ ပွနျလညျသုံးစှဲရနျ လကျမှတျကောကျပွီး သကျဆိုငျရာ အစိုးရထံတငျပွသှား မညျဖွဈကွောငျးသိရသညျ။“ သြှမျးပွညျ လှတျတျောအမတျတှကေို လကျမှတျကောကျသှားမယျ။ နဂိုနာမညျ “ မနျဆူဈေး” ဖွဈဖို့အတှကျတောငျးဆိုမယျ”ဟု သိန်နီမွို့နယျ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ နနျးခငျထားရီ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကို ပွောသညျ။ လှနျခဲ့သညျ့ နှဈပေါငျးမြားစှာက မနျဆူဈေးသညျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြား ရောငျးသညျ့ဈေးဖွဈသညျ့အပွငျ ဘျောလုံးကှငျး ဖွဈကွောငျး၊ ထိုဘျောလုံးကှငျးပွငျကို ဖကျြကာ မနျဆူကားဂိတျ၊ မနျဆူဈေး နှငျ့ မနျဆူပလာဆာ ဆိုပွီး ခတျေ အဆကျဆကျမွခှေဲရောငျးခလြာကွသညျဟုလညျး လားရှိုးဒသေခံမြားပွောပွခကျြအရသိရသညျ။
လားရှိုး စညျပငျသာယာအနဖွေငျ့ ဈေးနာမညျကို မိမိသဘောဖွငျ့ ပွောငျးလဲနခွေငျးသညျ လားရှိုးဒသေခံမြား၊ သြှမျးလူထု မြား၊ သြှမျးစာပေ၊ ယဉျကြေးမှု၊ တရားဝငျ မှတျပုံတငျသညျ့ သြှမျးနိုငျငံရေးပါတီမြား နှငျ့လားရှိုးမွို့နယျ လှတျတျောကိုယျစား လှယျမြားကို ဥပက်ခာပွုလိုကျသညျ့ သဘောဖွဈသညျဟုလညျး လားရှိုး သြှမျးလူငယျမြားက ပွောဆိုလိုကျသညျ။ https://b urmese.shannews.org/archives/17224
ကခငျြပွညျနယျ၊ မိုးညှငျးမွို့၊ အရှစေု့ ၆ လမျး၊ အိမျအမှတျ ၄၇၀ မှာ မူးယဈဆေးစှဲနတေဲ့ လူငယျတဈဦးက မိခငျထံက ငှေ တောငျးမရတဲ့အတှကျ လကျသီးဖွငျ့ထိုးရာ မိခငျဖွဈသူ သဆေုံးသှားတယျလို့ မိုးညှငျးမွို့မရဲစခနျးက သိရပါတယျ။
ဇှနျ ၂၄ ရကျ ညနေ ၂ နာရီခှဲလောကျက မိုးညှငျးမွို့၊ မိုးဒါးစုရပျကှကျနေ မအေးနုက မိခငျဖွဈသူ ဒျေါအဲလှအောငျ ရဲ့ ကနျြးမာရေးအခွအေနကေို သှားရောကျကွညျ့ရှုရာ မိခငျဖွဈသူရဲ့ အိပျခနျးတံခါးပှငျ့နတေဲ့အတှကျ ဝငျသှားစဉျ တံခါးပေါကျ ဝငျဝငျခငျြးမွကွေီးပျေါမှာ ဒဏျရာတှနေဲ့ လဲကသြဆေုံးနတောကို တှခေဲ့ရပါတယျ။ အနီးနားမှာလညျး ဓာတျဗူးတဈလုံးကှဲကြ နတောကို တှရေ့တဲ့အတှကျ မိခငျနဲ့အတူနတေဲ့ မောငျဖွဈသူ ဇျောဇျောဦးကို နအေိမျမှာ ရှာဖှခေဲ့တယျလို့ဆိုပါတယျ။
ဇျောဇျောဦးကို အိပျခနျးတှငျးမှာ အိပျနတောတှရေ့လို့ နှိုးလိုကျရာမှာ အျောတဲ့အတှကျ အိမျနီးခငျြးတှကေို အျောဟဈအကူ အညီတောငျးရာ ရာအိမျမှူးတှနေဲ့ ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူးတို့က ရဲစခနျးကို အကွောငျးကွားပေးခဲ့တာလို့ သိရပါတယျ။ နယျ ထိနျးခေါငျးဆောငျ ဒုရဲအုပျကြျောမငျးနိုငျ ထံသို့ အရှစေု့ရာအိမျမှူး ဦးမွငျ့သိနျးက လူသတျမှုဖွဈပှားကွောငျးဖုနျးနဲ့ သတငျး ပေးခကျြအရ ရဲတပျဖှဲ့က အခငျးဖွဈရာနရောကို သှားရောကျ ခဲ့ပါတယျ။
အိမျနီးနားပတျဝနျးကငျြကို မေးမွနျးရာမှာ ဇျောဇျောဦးက မိခငျဖွဈသူကို အမွဲထိုးကွိတျနလေို့ မိခငျဖွဈသူ မကွာခဏထှကျ ပွေးတာမွငျရကွောငျး၊ မူးယဈဆေးဝါးအလှနျအကြှံသုံးစှဲပွီး မိခငျဖွဈသူ ဒျေါအဲလှအောငျ ထံမှ ဆေးဖိုးတောငျးလရှေိ့ကွောငျး သိရပါတယျ။ ဇျောဇျောဦး (အသကျ ၃၁ နှဈ)ကို အမဖွဈသူ မအေးနုက တရားလိုပွုလုပျကာ အမှုကွီး အမှတျစဉျ(၄/၂၀၂၀) (ပ)၇၈/၂၀၂၀ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၃၀၂ အရ မိုးညှငျးမွို့မရဲစခနျးမှာ အမှုဖှငျ့ထားပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archi ves/396169
မူဆယျ-ရှလေီတှငျ အကောငျအထညျဖျောမညျ့ မွနျမာ-တရုတျနယျစပျ စီးပှားရေးဇုနျဧရိယာ၌ မွနျမာဘကျအခွမျးမှ မူဆယျ အပါအဝငျ နမျ့ဖတျကာ-နမျ့ခမျး-ကွူကုတျ (ပနျဆိုငျး) ဒသေတို့ပါဝငျမညျဖွဈကွောငျး စီးပှားရေးနှငျ့ ကူးသနျးရောငျးဝယျရေး ဝနျကွီးဌာန ကုနျသှယျရေးဦးစီးဌာနမှ ညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ ဦးမငျးမငျး က ပွောသညျ။ ၎င်းငျးက “နှဈနိုငျငံနယျစပျ စီးပှားရေးဇုနျ တညျထောငျဖို့အတှကျ တရုတျနဲ့ Framework agreement ရေးထိုးဖို့ရှိပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ အဓိကကတြဲ့ ၂ ဘကျဇုနျနယျ မွေ ဧရိယာ သတျမှတျရေးအတှကျ မကွာခငျမှာ ကှငျးဆငျးတိုငျးတာမှုလုပျဖို့ အစီအစဉျရှိပါတယျ”ဟု ဇှနျ ၂၄ ရကျက ပွု လုပျခဲ့သော စီးပှားရေးနှငျ့ ကူးသနျးရောငျးဝယျရေးဝနျကွီးဌာနမှ အစိုးရ စတုတ်ထတနှဈတာကာလ ဆောငျရှကျခကျြမြား သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲ ထိုသို့ပွောကွားခဲ့သညျ။
မူဆယျ-ရှလေီနယျစပျစီးပှားရေးဇုနျအတှကျ မွနျမာဘကျခွမျးမှ နမျ့ဖတျကာ-နမျ့ခမျး-ကွူကုတျ(ပနျဆိုငျး)နရောမြားတှငျ ပါဝငျ မညျဖွဈပွီး ဇုနျအတှကျကိုသွဒိနိတျမွပေုံဖွငျ့ အတညျပွုတညျနရော အကယျြအဝနျးသတျမှတျနိုငျရေးအတှကျ မွပွေငျကှငျး ဆငျးတိုငျးတာခွငျးလုပျငနျးအား တလအတှငျး ပွီးစီးအောငျဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး စီးပှားရေးနှငျ့ ကူးသနျးရောငျး ဝယျရေးဝနျကွီးဌာန၏ ဝဘျဆိုဒျတှငျ သတငျးထုတျပွနျထားသညျ။ ထိုသို့ ဇုနျနယျမွလြောထားသတျမှတျပွီးပါက ဖွဈနိုငျခွေ ဆနျးစဈလလေ့ာခွငျး (Feasibility Study) လုပျငနျး စတငျမညျဖွဈကာ FS ရမှသာ တဖကျတရုတျနိုငျငံမှ ဇုနျအတှငျး ဆောငျရှကျမညျ့လုပျငနျးမြားအလိုကျ လိုကျလြောညီထှမှေုရှိအောငျ နှဈနိုငျငံပွနျလညျညှိနှိုငျးပွီး မွနျမာဘကျအခွမျးအတှကျ Developer ကုမ်ပဏီမြားရှေးခယျြခွငျးကို ဆောငျရှကျသှားမညျဟု ညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ ဦးမငျးမငျးက သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲ တှငျ ပွောကွားသညျ။
အဆိုပါစီမံကိနျးအား နှဈနိုငျငံအစိုးရနားလညျမှုစာခြှနျလှာရေးထိုးပွီးနောကျ တရုတျနိုငျငံဘကျအခွမျးတှငျ နယျစပျ စီးပှားရေး ဇုနျမြား တညျဆောကျရေးအတှကျ ပွငျဆငျခွငျးမြား၊ ၂၁ ရာစုပိုးလမျးမစီမံကိနျးခြေးငှမြေားဖွငျ့ တရုတျ လုပျငနျးရှငျအမြားစု က နယျစပျဧရိယာမြား အထူးသဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ ထိစပျနသေော ယူနနျပွညျနယျတှငျ စကျရုံ၊ အလုပျရုံမြား စတငျတညျ ဆောကျမှုမြားရှိလာပွီဟု မူဆယျ-နမျ့ခမျးဒသေရှိ ကုနျသညျကွီးမြားက ဧရာဝတီကို ပွောသညျ။ မူဆယျ-နမျ့ခမျးကုနျသညျ ကွီးမြားအသငျး၏ တှဲဖကျအထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဦးဝငျးအောငျခနျ့က “စီးပှားရေး ဇုနျတှလေုပျတာ ရညျရှယျခကျြတှကေ ကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တိုငျးပွညျနဲ့ကိုယျ့နိုငျငံသား အကြိုးစီးပှား အကာအကှယျပေးမဲ့ မူတှခေမြှတျပွီးဖျောဆောငျဖို့ လိုပါ တယျ”ဟု ပွောသညျ။
တဖကျနိုငျငံက ကွိုတငျပွငျဆငျမှုမြားရှိသျောလညျး မွနျမာဘကျအခွမျးတှငျ အစိုးရ၏ မူဝါဒပိုငျးဆိုငျရာခပြွမှုအားနညျးခွငျး၊ စီမံကိနျးဆိုငျရာ သတငျးအခကျြအလကျမြား လကျလှမျးမမီခွငျး၊ အခွခေံအဆောကျအအုံပိုငျး၊ ငှကွေေးအရငျးအနှီးနှငျ့ နညျး ပညာအားနညျးခွငျးတို့ကွောငျ့ မိမိနိုငျငံအတှငျး လာရောကျလုပျကိုငျသူမြားက အကြိုးစီးပှား အသာရသှားမညျကို ဒသေခံ လုပျငနျး ရှငျအမြားစုစိုးရိမျနကွေသညျ။ တရုတျမွနျမာနယျစပျ စီးပှားရေးပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုဇုနျမြား အကောငျအထညျဖျော ရေးအတှကျ ဗဟိုကျောမတီတရပျဖှဲ့စညျးထားပွီး စီးပှားရေးနှငျ့ကူးသနျးရောငျးဝယျရေး ပွညျထောငျစုဝနျကွီးက ဥက်ကဌ အဖွဈ တာဝနျယူကာ နယျစပျ စီးပှားရေးဇုနျနှငျ့ ဆကျစပျသညျ့ တာဝနျရှိဌာနမြားမှ ပွညျထောငျစုအဆငျ့ အရာရှိကွီးမြားလညျး ပါဝငျ ပွီး ယခုလ ၁၂ ရကျ မွနျမာ-တရုတျနှဈနိုငျငံ ဒသေအဆငျ့လုပျငနျးအဖှဲ့ ပထမဆုံးအကွိမျ လုပျငနျးညှိနှိုငျးအစညျးအဝေး Video Conferencing ပွုလုပျခဲ့သညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/06/25/225294.html
၂၅။ ရသတေ့ောငျမွို့အနီးပဈခတျမှုဖွဈ၍ ရှပေါရမီဘုနျးကွီးကြောငျးမှ မသနျစှမျးသူစဈဘေးရှောငျအမြိုးသားတဈဦး ထိခိုကျ ဒဏျရာရ
ရခိုငျပွညျနယျ၊ ရသတေ့ောငျမွို့အနီးတှငျ ဇှနျလ ၂၄ ရကျညနေ ၄ နာရီကြျောက ပဈခတျမှုဖွဈပှားခဲ့ပွီး ရှပေါရမီဘုနျးကွီး ကြောငျးတှငျ လာရောကျခိုလှုံနသေူ စဈဘေးရှောငျ ဆှံအ၊ နားမကွား၊မကျြမမွငျ အမြိုးသားတဈဦးကို လကျနကျကွီးကညျြ ထိမှနျသှားကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ လကျနကျကွီးကညျြထိမှနျသူမှာ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ ညောငျပငျလှကြေးရှာမှ ရှပေါရမီကြောငျးတှငျ စဈဘေးရှောငျနသေူ ဦးမောငျအေးညှနျ့ (၅၅ )နှဈဖွဈသညျ။
ရှပေါရမီဘုနျးတျောကွီးကြောငျးထိုငျ ဆရာတျောက “ ကြောငျးထဲက စဈဘေးရှောငျနတေဲ့ တဲအိမျအဆောငျ အောကျမှာ ဝပျ နကွေတဲ့အခြိနျမှာထိတာ။ ပေါကျကှဲသံနှဈခကျြကွားတယျ။ နောကျတော့ လကျနကျကွီး၊ လကျနကျငယျတှနေဲ့ ပဈတာ။ သူ့ အမေ ငိုပွီးပွေးလာပွောမှသိတာ။ ဆရာတျောတို့လညျး ခကျြခငျြးသှားကွညျ့လို့မရဘူး။ သနေတျပဈနတေော့ အကုနျဝပျနေ ကွရတာ။ ဘယျခွထေောကျ ဒူးအောကျပိုငျးတဈခုလုံးကွသှေားတယျ။ အခုဆေးရုံကားရောကျနလေို့ ကားပျေါတငျနတေယျ။ အဲဒီနားမှာ စဈသားတှေ ကငျးပုနျးဝပျပွီး ရှိနသေေးတယျ” ဟု ညနေ ၅ နာရီခနျ့က ဆကျသှယျမေးမွနျးစဉျ မိနျ့ကွားသညျ။
ဒဏျရာ ရရှိသှားသူ ဦးမောငျအေးညှနျ့၏ မိခငျဖွဈသူ ဒျေါဦးစိနျညှနျ့က “ သူက နားလညျးမကွားဘူး၊ စကားလညျးမပွော တတျဘူး။ မကျြစိလညျးမမွငျဘူး။ ကြှနျမတို့နဲ့ နရေတာ။ မိသားစုဆိုလို့ ကြှနျမတို့ပါပဲ။ တဲအိမျအောကျမှာ ဝပျနရောမှာ အိမျခေါငျမိုးကို ဖောကျပွီးလာထိတာ။ ခွထေောကျကိုထိတယျ။ ဘယျလိုခံစားရမလဲပွောမပွတတျအောငျပါပဲ”ဟု ပွော သညျ။ အဆိုပါ ပဈခတျမှုဖွဈပှားသညျ့ နရောအနီးတှငျ တပျရငျးအမှတျ (၅၃၈) တညျရှိပွီး ပွားခြောငျးကွီး ကြေးရှာဘကျသို့ စဈကွောငျး တဈခုဖွတျသနျးခြိနျတှငျ ဖွဈပှားခဲ့ပွီး ရသတေ့ောငျမွို့ပျေါနှငျ့ အနီးအနား ကြေးရှာမြားသို့ လကျနကျကွီးမြား ကရြောကျပေါကျကှဲမှုမြားရှိခဲ့သညျဟု ဒသေခံမြားက ပွောသညျ။ ညနေ ၆ နာရီခနျ့က ရသတေ့ောငျမွို့ပျေါမှ လူမှုကူညီရေး လုပျဆောငျနသေူ ကိုဘက်ကာသို့ ဖုနျးဖွငျ့ ဆကျသှယျရာ လူနာအား ရသတေ့ောငျ ဆေးရုံကို ပို့ဆောငျနိုငျပွီဖွဈကွောငျး ပွော ကွားသညျ။
ရသတေ့ောငျမွို့နယျ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးခငျမောငျလတျကလညျး “ ရသတေ့ောငျမွို့ထဲက သိပျမဝေး ဘူး။ မွို့အထှကျ တံတားနားမှာ ပဈနကွေတာ။ ရှပေါရမီကြောငျးမှာ စဈဘေးရှောငျ တဈယောကျထိတယျ။ အခု လူနာတငျ ကားနဲ့ ယူလာလို့မွို့ပျေါက ဆေးရုံရောကျနပွေီ”ဟု အတညျပွုပွောသညျ။ ရှပေါရမီဘုနျးတျောကွီးကြောငျးတှငျ စဈဘေး ရှောငျ လူဦးရေ ၁၇ဝဝ ခနျ့ရှိခိုလှုံနကွေကွောငျးသိရသညျ။ အဆိုပါကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ တပျမတျောသတငျးမှနျပွနျကွားရေး အဖှဲ့ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျမှူးခြုပျဇျောမငျးထှနျးအား နိရဉ်စရာသတငျးဌာနမှ ဆကျသှယျမေးမွနျးရာ ဆကျသှယျမှု မရရှိသေး ပါ။ https://www.bnionline.net/mm/news-73778
ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး မူဆယျခရိုငျ မူဆယျမွို့နယျ မူဆယျ(၁၀၅)မိုငျ ကုနျသှယျရေးဇုနျအတှငျး မွောကျဘကျရှိ ကုနျသှယျ ရေးဇုနျ လုံခွုံရေးတာဝနျ ထမျးဆောငျနသေော နမျးခမျးမွို့မ ပွညျသူ့စဈတပျဖှဲ့ဝငျမြား နထေိုငျသညျ့ အဆောကျအဦးအား ဆိုငျကယျစီးလာ‌သော လူသုံးဦးက ဇှနျလ ၂၅ ရကျ နလေ့ညျ ၂ နာရီ ၁၀ မိနဈခနျ့က သနေတျဖွငျ့ ပဈခတျထှကျ‌ပွေးမှု ဖွဈ ပှားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ပဈခတျမှု ဖွဈစဉျမှာ မူဆယျ (၁၀၅) မိုငျ ကုနျသှယျရေးဇုနျအတှငျး မွောကျဘကျရှိ ကုနျသှယျရေးဇုနျ လုံခွုံရေးတာဝနျ ထမျးဆောငျနသေော နမျးခမျးမွို့မ ပွညျသူ့စဈတပျဖှဲ့ဝငျမြား နထေိုငျသညျ့ အဆောကျအဦးအား ဇှနျလ ၂၅ ရကျ နလေ့ညျ ၂ နာရီ ၁၀ မိနဈခနျ့က မူဆယျ လားရှိုး ပန ၁၀၅ မိုငျ – ပနျဆိုငျး သှား ကားလမျး ခြိတျဆကျထား‌သော အထက (ခှဲ) ၁၀၅ မိုငျ ဘေးလမျးမပျေါမှ အမညျမသိ ဆိုငျကယျစီးလာသော လူသုံးဦးက ပနျဆိုငျးမောငျတံ ကုနျသှယျရေးဇုနျ ရှောငျကှငျးလမျး ကွံတောထဲမှ သနေတျဖွငျ့ ပဈခတျထှကျ‌ပွေးခဲ့ခွငျး ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ ပဈခတျမှုကွောငျ့ အဆောကျအဦးအတှငျးရှိ ခှေးတဈကောငျ သဆေုံးခဲ့ပွီး တာဝနျထမျးဆောငျနသေူနှငျ့ အခွား ပွညျသူမြား ထိခိုကျဒဏျရာ ရရှိမှု မရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ ယငျးဖွဈစဉျနှငျ့ ပတျသကျ၍ နယျမွခေံတပျရငျးမှ တပျဖှဲ့ဝငျမြား၊ နယျစပျကုနျသှယျရေးဇုနျရှိ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ နမျးခမျးမွို့မ ပွညျသူ့စဈတပျဖှဲ့ဝငျမြားက အခငျးဖွဈနရော အနီးတဈဝိုကျတှငျ ရှာဖှရေေးလုပျငနျးမြား ဆကျလကျဆောငျရှကျလကျြရှိပွီး လုံခွုံရေးတိုးမွှငျ့ ခထြားလကျြရှိကွောငျး သိရသညျ။ https://new s-eleven.com/article/179979
ထိုငျး-မွနျမာနယျစပျရှိ မွနျမာဒုက်ခသညျစခနျးတဈခုဖွဈသော မယျလဒုက်ခသညျစခနျးတှငျးသို့ (ဇှနျလ ၂၃ ရကျ) နံနကျပိုငျး တှငျ ထိုငျးအာဏာပိုငျမြားက ရှောငျတခငျ ဝငျရောကျစဈဆေးမှု ပွုလုပျခဲ့ရာ မိသားစုနေ အိမျတဈအိမျတှငျ စိတျကွှဆေးပွား ထောငျခြီ ဖမျးဆီးရမိခဲ့ကွောငျး စခနျးတာဝနျရှိသူမြားက ပွောသညျ။
ထိုငျးတပျမတျော၊ ရဲနှငျ့ စခနျးလုံခွုံရေး စသညျ့ပူးပေါငျးအဖှဲ့မှ မယျလဒုက်ခသညျစခနျး၏ ဇုနျ (B-5B) ရှိ အိမျနံ ပါတျ(၉၂)မှ အိမျရှငျ နျောမုမု ဆိုသူ၏ နအေိမျသို့ အနံ့ခံခှေးမြားဖွငျ့ ရှောငျတခငျ လာရောကျစဈဆေးရာ စိတျကွှဆေးပွားထုပျမြားကို ဖမျး ဆီးရမိခဲ့ကွောငျး ဇုနျ(B) လုံခွုံရေးတာဝနျခံ စောရှဝေငျးမွိုငျက ပွောသညျ။ ၎င်းငျးက “စဈသားတှေ၊ ရဲတှေ စခနျးလုံခွုံရေးအ ဖှဲ့တှကေ ကနြျောတို့ ဒီကရပျကှကျတာဝနျရှိသူတှကေို ဘာမှအကွောငျးမကွားဘဲ ဝငျလာပွီး စဈဆေးတာ။ အဲ့မှာ (၅)ထုပျ အ ရငျမိတယျ။ အဲ့ဒါပွီးတော့ စခနျးလုံခွုံရေးက ကနြျောတို့ကို အကွောငျးကွားပွီး ထပျသှားရှာတော့ အလုံးရေ (၂,၄၀ဝ) ထပျမိ တယျ။”ဟု ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။ ထိုသို့ ဝငျရောကျစဈဆေးဖမျးဆီးရာတှငျ အဆိုပါမူးယဈဆေးဝါးရောငျးဝယျသူမှာ ထှကျ ပွေးတိမျးရှောငျသှားပွီး နအေိမျရှိကနျြရှိသညျ့ မိသားစုဝငျ(၄) ဦးဖွဈသညျ့ အဘှားအိုတဈဦး၊ ညီမတျောစပျသူတဈဦး၊ အဒျေါ တျောစပျသူတဈဦးနှငျ့ အမြိုးသားတဈဦးကို ခတ်ေတယာယီချေါဆောငျသှားကွောငျး စောရှဝေငျးမွိုငျ က ဆကျပွောသညျ။
ထို့နောကျ သတငျးအရ ၎င်းငျးမူးယဈဆေးဝါး ရောငျးဝယျဖောကျကားသူမှာ အသကျ (၂၇) နှဈအရှယျ စောအဲငဲ ဆိုသူဖွဈပွီး ၎င်းငျးနှငျ့အတူ လကျတှဲလုပျဆောငျသူ တဈဦးကို ဖမျးဆီးရမိ၍ ကာယကံရှငျကို လကျရှိအခြိနျထိ ဖမျးဆီးရမိခွငျး မရှိသေးဘဲ ၎င်းငျးမိခငျဖွဈသူမှ ဖုနျးဆကျချေါသျောလညျး ပွနျလာအဖမျးခံခွငျးမရှိကွောငျး မယျလစခနျး၏ လုံခွုံရေး ဒု-တာဝနျခံ စောအယျမှီး က အတညျပွုသညျ။ ၎င်းငျးက “သူအမကေ ပွောလိုကျတယျ။ သားရေ ပွနျလာခဲ့ပေါ့။ ဒီမှာသူမြားငါတို့ကို ဖမျးနေ ပွီးပေါ့။ သား ပွနျလာမှ ဒီကဖမျးထားတဲ့သူတှေ လှတျပေးမယျပေါ့။ ဒါပမေဲ့ ကာယကံရှငျက သသေရှေငျရှငျ မပွနျလာဘူးတဲ့။ အခု သူနတေဲ့ နရောကိုသူမြား GPS နဲ့ လိုကျတာ နရောကို သိနပွေီ။ အဲ့ဒါ သူကပွောသေးတယျ။ လာဖမျးရဲရငျ လာဖမျးပေါ့။ သူ့မှာက လကျနကျရှိနတေယျ” ဟု ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။
မယျလ ဒုက်ခသညျစခနျးအတှငျး မူးယဈဆေးဝါး စဈဆေးမှုကို ထိုငျးအာဏာပိုငျမြားမှ တဈလတဈခါ စဈဆေး ဆောငျရှကျမှု မြား ပွုလကျြရှိကာ မကွာခဏ ဖမျးဆီးရမိမှုမြားရှိပွီး လကျရှိ ဖမျးဆီးရမှုသညျ သတငျးအရ လာရောကျဖမျးဆီးသညျ့ ပုံစံဖွဈ သလို ပမာဏ အမြားဆုံး ဖမျးဆီးရမှုလညျး ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%99% e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%9c%e1%80%92%e1%8
ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး ကှတျခိုငျမွို့နယျ ကောငျးခါးနဲ့ လှယျခမျကြေးရှာ အတှငျးက ဖမျးဆီးရမိတဲ့ မူးယဈဆေးဝါး ခကျြလုပျ တာမှာအသုံးပွုတဲ့ ဆကျစပျပစ်စညျးတှထေဲကအခြို့ကို ကှတျခိုငျမွို့မှာ ဒီကနေ့ မနကျပိုငျးက ဖကျြဆီးခဲ့ပါတယျ။ ကောငျးခါး နဲ့ လှယျခနျကြေးရှာကနေ အခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလကနေ မလေ ၁ ရကျနအေ့ထိ မူးယဈဆေးနဲ့ ဆကျစပျပစ်စညျး အမြိုးအစား ပေါငျး တဈရာကြျောကို ဖမျးဆီးရမိခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ မူးယဈဆေးတှနေဲ့အတူ အမြိုးသား၂၉ ဦး၊ အမြိုးသမီး ၄ ဦး၊ စုစုပေါငျး ၃၃ ဦးကို ဖမျးဆီးရမိထားပွီး ကနျြ ၉၇ ဦးကတော့ တိမျးရှောငျနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ကား ၂၁ စီး၊ ဆိုငျကယျတဈစီး၊ လကျနကျမြိုးစုံ ၈၆ လကျနကျခဲယမျးမြိုးစုံတို့ကိုပါ သိမျးဆညျးရမိခဲ့တာပါ။
အခုဖကျြဆီးတဲ့ မူးယဈဆေးနဲ့ဆကျစပျပစ်စညျးတှဟော တပျမတျောလကျအောကျခံ ကောငျးခါးပွညျသူ့စဈအဖှဲ့ထိနျးခြုပျ နယျ မွထေဲမှာ ဖမျးဆီးရမိခဲ့တာဖွဈပွီး တပျမတျောက လကျနကျပွနျအပျခိုငျးခဲ့သလို လှယျခမျ ပွညျသူ့စဈအဖှဲ့ခေါငျးဆောငျ အခြို့ ကိုလညျး ထိနျးသိမျးထားတယျလို့ အမညျမဖျောလိုတဲ့ကောငျးခါးပွညျသူ့စဈအဖှဲ့အရာရှိတဈဦးက RFA ကိုပွောထားပါတယျ။
ကှတျခိုငျမှာ ဖကျြဆီးတဲ့ မူးယဈဆေးနဲ့ ဆကျစပျပစ်စညျးတှဟော လားရှိုးကို သယျဖို့ခကျခဲလို့ ကှတျခိုငျမှာ ဖကျြဆီးခဲ့တာဖွဈ ပွီး ကနျြနတေဲ့ မူးယဈဆေးဝါးတော့ကိုတော့ လာမယျ့ ဇှနျလ ၂၆ ရကျနမှေ့ာ ကရြောကျမယျ့ ၃၃ ကွိမျမွောကျ အပွညျပွညျ ဆိုငျရာ မူးယဈဆေးဝါး တိုကျဖကျြရေးနမှေ့ာ လားရှိုးမွို့မှာ ထပျမံဖကျြဆီးမှာဖွဈပွီး အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး ၄၂၀ နီး ပါး တနျဖိုးရှိတယျလို့ ရှမျးပွညျနယျ ရဲတပျဖှဲ့တာဝနျရှိသူတဈဦးက ပွောပါတယျ။ ကှတျခိုငျဒသေမှာ လူငယျတှအေမြားစု မူးယဈ သားကောငျဖွဈနရေပွီး ရာဘဆေးပွားတှကေတော့ လှယျလှယျကူကူ ဝယျလို့ရနတေုနျးဖွဈတယျလို့ ကှတျခိုငျမွို့ တအာငျး စာပယောဉျကြေးမှု ဒု-ဥက်ကဋ်ဌ ဦးထှနျးအောငျက ပွောပါတယျ။ ၂၀၂၀ အတှငျး ရှမျးပွညျနယျမှာ မူးယဈဆေး ဖမျးဆီးရမိမှုဟာ အရငျနှဈထကျ အမရေိကနျဒျေါလာ ငါးသနျးကြျောအထိ ပိုမိုဖမျးဆီးနိုငျခဲ့တယျလို့ ရှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး ဒု-ပွညျနယျ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးကြျောသူဇျောက ပွောပါတယျ။
ဇှနျလ၂၆ ရကျနမှေ့ာ ရှမျးပွညျနယျ တောငျကွီးမွို့မှာ အမရေိကနျ ဒျေါလာ (၂၂၈.၈) သနျးကြျောတနျဖိုးရှိတဲ့ မူးယဈဆေးဝါး နဲ့ ဆကျစပျပစ်စညျး ၂၉ မြိုးကို မီးရှို့ဖကျြဆီးမှာဖွဈသလို တဈနိုငျငံလုံး အတိုငျးအတာအနနေဲ့ အမရေိကနျဒျေါလာ ၈၃၅ သနျး နီးပါးရှိ မူးယဈဆေးနဲ့ ဆကျစပျပစ်စညျးတှကေို လာမယျ့ ဇှနျ လ၂၆ ရကျ နမှေ့ာ မီးရှို့ဖကျြဆီးမှာ ဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/destroying-the-making-drugthingsinkutkai06232020074424.html
သြှမျးပွညျတောငျပိုငျးတှငျ ကိုဗဈ – ၁၉ သံသယ စောငျ့ကွညျ့လူနာ ၇ ဦး ရှိကွောငျး စုံစမျး သိရှိရသညျ။
အဆိုပါ သံသယစောငျ့ကွညျ့လူနာ ၇ ဦး သညျ သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး ဟိုပုံး ၊ ဟဲဟိုး ၊ လှိုငျလငျ၊ ကလော ၊ ကှနျဟိနျး နှငျ့ စဝျစံထှနျး ဆေးရုံတို့တှငျ အသီးသီး တကျရောကျ ဆေးကုသမှု ခံယူနကွေောငျး ပွညျနယျ အထူးရောဂါ နှိမျနငျးရေး လကျထောကျညှနျကွားရေးမှူး ဒေါကျတာ နှငျးအိဖွူ က ပွောသညျ။
“စောငျ့ကွညျ့လူနာ ဓါတျခှဲနမူနာ စဈဆေးမယျ့သူက ၂ ယောကျရှိတယျ။ စဈဆေးပွီးသား သူက ၅ ယောကျရှိတယျ။ စုစု ပေါငျး ၇ ယောကျ”ဟု ဒေါကျတာနှငျးအိဖွူ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။ သြှမျးပွညျတောငျပိုငျးတှငျ ကိုဗဈ အတညျ ပွု လူနာ ၄ ဦး ရှိသညျ့ အနကျ ၃ ဦး သညျ ဆေးရုံမှ ဆငျးခှငျ့ ရကွောငျး သိရသညျ။
မေ ၂၇ ရကျမှ ဇှနျ ၂၄ ရကျနထေိ့ ကရငျပွညျနယျ မွဝတီဘကျမှ သြှမျးပွညျတောငျပိုငျးတှငျ ပွနျလညျဝငျရောကျလာသညျ့ မွနျမာရှပွေ့ောငျး အလုပျသမား (၁၆၄၇) ဦး ရှိကွောငျး စုံစမျးသိရှိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archive s/17255